MY	EN AR VI RU ES
လိင်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် ကျား/မ မဟုတ်သူများ အတွက် လမ်းညွှန်
Women in News (WIN) အကြောင်း
အကြောင်းအရာတွင် ကျား၊မ မျှတစွာ ပါဝင်ခြင်း
ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် မတူကွဲပြားမှုများကို မြှင့်တင်ရန် တာဝန်
မီဒီယာများသည် ကျွန်ပ်တို့ တွေးတောနေသောအရာ၊ ယုံကြည်သောအရာနှင့် လုပ်ဆောင်သောအရာများကို ပုံဖော်သည်။ ထို့ကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင် နေသောလူများ၊ ဦးဆောင်နေသောလူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အရေးပါသည်။ မီဒီယာများသည် အမျိုးသမီးများကိုတန်းတူညီမျှ သရုပ်ဖော်တင်ပြခြင်း မရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်တွင်လည်းကောင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွင်လည်းကောင်း၊ ပင်ကိုအရည်အချင်းများကိုလည်းကောင်း အစဉ်အလာပုံသေရှုမြင်မှတ်ယူသရုပ် ဖော်တင်ပြပါက ၎င်းတို့ သည် ကျား/မ မညီမျှမှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြု နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအချက်သည် အမျိုးသမီးများသာမက လိင်စိတ်ပြောင်း၍ လိင်စိတ်လွှမ်းနေသူများ၊ လိင်ပြောင်းထားသူများ ကျား မဟုတ်၊ မ မဟုတ်သူများ၊ မတူညီသောလူမျိုးများ၊ လူတန်းစားများ၊ ဘာသာရေးများ၊ မျိုးနွယ်စုများ အတွက်ပါ အကျုံးဝင်သည်။ ယနေ့ခေတ် သတင်းမီဒီယာများတွင် အမျိုးသမီးများ ကို သတင်း၏ အကြောင်းအရာအဖြစ် ဖော်ပြကြမှုနည်းပါးသည်။ အမျိုးသားများ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖြစ်ဖော်ပြခံရမှု နည်းပါးသည်။
Gender Equality Tracker ၏ စာရင်းဇယားများအရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် သတင်းများတွင်နှစ်ဆခန့် ပိုမိုဖော်ပြ ခံရသည်ဟုသိရသည်။
သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့ထုတ်ဝေသော သတင်းများတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာရန် လိုအပ်ပြီးမညီမျှမှုများတွေ့ရှိပါက အရေးယူဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်ရန်လို အပ်သည်။
နော်ဝေနိုင်ငံတွင် Amedia က ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်မှာ ၂၁ လ တာ ကာလအတွင်း ထုတ်ဝေသော သတင်းစာ ၆၄ ခု၏ သတင်း ၆၆၀,၀၀၀ ခုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ နာမည်ဖော်ပြခံရမှုသည် ၃၄ / ၆၆ ရာခိုင် နှုန်းသာ ရှိသည်ဟုသိရသည်။
၎င်းကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် သတင်းစာများကို အမျိုးသားများက အမျိုးသားများအတွက်သာ ဖန်တီးနေကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကို တရားမျှတစွာညီမျှစွာနှင့် ဖော်ပြရန် လိုအပ် နေကြောင်းတွေ့ရသည်။
အမျိုးသမီးများသည် မထိတွေ့ရသေးသော ပရိသတ်ဖြစ်သောကြောင့် စီးပွားရေးအရ အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်
မတူကွဲပြားသောသတင်းများကို တမင်ရည်ရွယ်ကာထုတ်ဝေခြင်းသည် စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်နိုင်သည်။အမှန်တော့ အမျိုးသမီးများသည် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် သင်ထုတ်လုပ်သော သတင်းတွင် မပါဝင်ပါက သို့မဟုတ် သင်သည်၎င်းတို့၏ အသံကို မဖော်ပြပါက ယင်းလူအုပ်စုသည် သင်ထုတ်ဝေသောသတင်းကို ရွေးချယ်ဖတ်ရှု ရန် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်း အများအပြားသည် အမျိုးသမီးပရိသတ်ကို စတင်ထိတွေ့ရန် ကြိုးပမ်းလာကြပြီး ပိုမို ထိရောက်စွာ ထည့်သွင်းဖော်ပြလာကြသည်။ BBC သတင်းဌာန၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့သည် UK နိုင်ငံမှ အသက် ၂၈ နှစ်မှ ၄၅ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးများကို သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ရာ အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏ဘဝနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေသော သတင်းများကိုဖတ်ရှုရန် အာသီသပြင်းပြကြပြီး လက်တွေ့ကျသော သတင်းအချက်အလက်များကို တန်ဖိုးထားကြသည်ဟုသိရ သည်။ သုတေသနကဖော်ပြသည်မှာ ဒေသတွင်း သတင်းများသည် အမျိုးသမီးများက သားသမီးများရရှိနေပါက ပိုမိုအရေးပါကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ South China Morning Post ၏ စာဖတ်ပရိသတ် သုတေသနကတွေ့ရှိသည်မှာ အမျိုးသမီးများသည် သံတမန်ရေးရာများ ဒေသတွင်းသတင်းများ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ၊ ကျား/မ ညီမျှရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သတင်းများကို အမျိုးသမီးပရိသတ်များက ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကြကြောင်းသိရသည်။
သတင်းများတွင် အမျိုးသမီးများအကြောင်း ပိုမိုထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းသည် မီဒီယာလုပ်ငန်း၏ စီးပွားရေးအတွက် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်း သုတေသနများက ဖော်ပြကြသည်။ နော်ဝေမီဒီယာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Amedia က ဖော်ပြရာတွင် အမျိုးသမီးများအကြောင်း ရေးသားဖော်ပြသော သတင်းများပိုမိုထည့်သွင်းသောသတင်းစာများသည် အမျိုးသမီးများကြား စာဖတ်သူဦးရေပိုမိုရရှိစေသည်ဟုဆိုသည်။ Financial Times သတင်းစာက ဖော်ပြရာတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်သော newsletter များသည် တခြားသော newsletter များထက် ပရိသတ်၏ ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုမှုကို ပိုမိုရရှိသည်ဟုဆိုသည်။ Bloomberg သတင်းစာကဆိုရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ရှုထောင့်မှ ရေးသားသောသတင်းများသည် ကုမ္ပဏီကိုတခြားသော စင်ပြိုင်သတင်းစာများထက် ပိုမိုအသာရစေသည်ဟုဆိုသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းဆောင်းပါးများဖြင့် အမျိုးသမီးပရိသတ်အများအပြားရယူနိုင်ခဲ့သည့်သတင်းစာများ).
မတူညီကွဲပြားသောရှုထောင့်မှ သတင်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သတင်းကိုရရှိစေသည်
မတူညီကွဲပြားသော အသံများနှင့် ရှုထောင့်အမြင်များကို ဖော်ပြခြင်းသည် သတင်းဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုအားကောင်းစေပြီး အရည်အသွေးကောင်းသော သတင်း ကိုရရှိစေသည်။ ထိုသို့ဖြင့် မီဒီယာလုပ်ငန်းများ စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်ရန်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအရကိုက်ညီသောသတင်းများကို ရရှိရန်ခက်ခဲသော ယနေ့ခေတ်တွင် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းရန် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း မီဒီယာလုပ်ငန်းများသည် တသားတည်းလိုလိုဖြစ်နေကြသည်။ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း US Census Bureau data ၏ အချက်အလက်များကို Pew Research Centre က သုံးသပ်လေ့လာရာတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် တခြားသော အလုပ်အကိုင်ကဏ္ဍများထက် မီဒီယာကဏ္ဍတွင် အလုပ်သမား အများစုသည် အမျိုးသားများနှင့် လူဖြူများသာ များပြားနေဆဲဖြစ်သည်။ လူငယ်အလုပ်သမားများကြားတွင် မတူကွဲပြားသောလူမျိုးများ၊ မျိုးနွယ်စုများနှင့် လိင်အမျိုးမျိုး ပါဝင်နေကြသော်လည်း သတင်းခန်းများအတွင်းလုပ်ကိုင်နေသော အလုပ်သမားများသည် သက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်သည့်ပရိသတ်များကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ခြင်းမရှိကြပေ။ အချို့သော မီဒီယာများသည် ထိုသို့သော ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲ အနေအထားကို ပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြသည်။ Gender Initiative New York Times သတင်းစာသည် ကျား/မ ညီမျှမှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ရန်မတူကွဲပြားသော ပရိသတ်ကိုရရှိစေရန် Gender Initiative သတင်းစာကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Outside Magazine Outside မဂ္ဂဇင်းသည် မတူကွဲပြား သော အမြင်များကိုဖော်ပြနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းသည့်အနေဖြင့် ၎င်း၏ သတင်းစာများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သတင်းထောက်များ၏ သတင်းများကို အရေအတွက် တူညီစွာထည့်သွင်းစေသည်။ ဓာတ်ပုံများ၊ ပုံများတွင်အမျိုးသမီးများ မတူကွဲပြားသော ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံ ရှိသူများကို ထည့်သွင်းစေသည်။ Zambia နိုင်ငံတွင် Daily Nation သတင်းစာက ပိုင်ဆိုင်သောသီးခြားရပ်တည်သည့် သတင်းစာတစ်ခုဖြစ်သည့် Lusaka Sun သတင်းစာတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာတမင်ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Daily Nation ၏ အလုပ် အမှုဆောင်အယ်ဒီတာ၏ ပြောကြားချက်အရ အမျိုးသမီးသတင်းထောက်များ သည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတခြားသော အမျိုးသမီးများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် လွယ်ကူသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့ဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများက ၎င်းတို့၏ ဇာတ်လမ်းများ အတွေ့အကြုံများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာပင် သတင်းစာသို့ မျှဝေပေးကြသည်ဟုဆိုသည်။ Lusaka Sun, Zambia)
ကျား/မ ခွဲခြားခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် မကောင်းပါ
ကမ္ဘာကြီးသည် ကျား/မ ခွဲခြားသောအစဉ်အလာအတိုင်း ပုံသေတယူသန်အမြင်များ ပါဝင်သောသတင်းများကို ပိုမိုဆန့်ကျင်လာကြရာ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများသည် ထိုသို့သော သတင်းများကို ထုတ်ဝေပါကစာဖတ်ပရိသတ် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ #MeToo လှုပ်ရှားမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုကို ပိုမိုနိုးကြား စိတ်ဝင်စားလာကြစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျား/မ တန်းတူ ညီမျှမှုမရှိသည့် အလွဲသုံးစားပြုမှုများကို ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသော လူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများကိုသူတို့၏ လုပ်ရပ်များအပေါ်မည်သို့ တာဝန်ယူစေသင့်သည် ဆိုသည်နှင့် မည်သို့ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းရမည်ကို အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကိုလည်းပြသပေးနိုင်ခဲ့သည်။ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ကျား/မ ခွဲခြားသော အမျိုးသမီးများကိုချိုးနှိမ်သော သတင်းများထုတ်ဝေနေသည်ဟု ခံစားသိရှိရပါက ပရိသတ်များသည်ငြိမ်မနေကြတော့ပေ။ ပရိသတ်များသည် လူမှုကွန်ယက်ကို အသုံးပြုကာ၎င်းတို့၏ ဒေါသများကိုဖော်ထုတ်ကြသည်။ BBC Radio4၏ ပရိသတ်အများအပြားသည် BBC ဝန်ထမ်းဟောင်း John Humphrys ၏ ပြောကြားချက်ဖြစ်သော ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်သော အလုပ်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုကျွမ်းကျင်ကြောင်း မှတ်ချက်ကို မကျေနပ်ကြသဖြင့် Twitter လူမှုကွန်ယက်တွင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာပင် The Atlantic သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာဖြစ်သော Jeffrey Goldberg၏ ပြောကြားချက်ဖြစ်သော စကားလုံး ၁၀,၀၀၀ ပါ မျက်နှာဖုံးသတင်းများကို လူဖြူအမျိုးသားများကသာ ရေးသားနိုင်သည်ဟူသော မှတ်ချက်ကြောင့် အကြီးအကျယ် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့၏မဂ္ဂဇင်းက မတူကွဲပြားသော ဝန်ထမ်းများရရှိအောင် မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အင်တာဗျူးဖြေကြားချက်တွင် သူသည်ထိုမှတ်ချက်ကို ပြောကြားမိခဲ့ခြင်းပင်။
#MeToo လှုပ်ရှားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အကျိုးဆက်ကြောင့် ယနေ့ခေတ် အနေအထားတွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် ကျား/မ ခွဲခြားဆက်ဆံဟန်ရှိသော ဖော်ပြချက်များကို လက်မခံကြတော့ကြောင်း အထက်ပါဥပမာများက ဖော်ပြနေသည်။ The Economist သတင်းစာ၏ သုတေသနအရဝန်ထမ်းများက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်မှုပြဿနာများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေပါက ထိုကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာစျေးများသည် ထိုးကျသွားလေ့ရှိသည်ဟုသိရသည်။ The O’Reilly Factor, Fox News သတင်း ဌာန၏ ပြဿနာတွင် O’ Reilly Factor ဟုခေါ်ဆိုသော Bill O’ Reilly လက်ခံစီစဉ်သည့် show သည် တစ်ပတ် အတွင်းကြော်ငြာရှင် ထက်ဝက်ကျော်ခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၎င်းမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်က Bill O’ Reilly နှင့် Fox News တို့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်သည့် အမှု များအတွက် တရားရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခဲ့ရကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ် သည်။
၁။ လက်ရှိကိန်းဂဏန်းများအရ အမျိုးသားများ၏ အသံများက အမျိုးသမီးများ၏ အသံထက် ဖော်ပြခံရနိုင်ချေ ပိုမိုများပြားသည်။
၂။ အကယ်၍ သတင်းများတွင် အမျိုးသမီးများအကြောင်းကို အရေးပေးဖော်ပြခြင်းခံရပါက ရလဒ်မှာ
အားနည်းသည့်ဇာတ်လမ်းများ အမျိုးသားဖတ်ရှုသူ လျော့နည်းသွားမှု အမျိုးသမီးဖတ်ရှုသူ များပြားလာမှု ဇာတ်လမ်းရေးသားရန် ပိုမိုခက်ခဲလာမှု
၃။ သတင်းများတွင် ကျား၊မ ရေးရာတင်ဆက်မှုပိုမိုကောင်းမွန်လာပါက ဖြစ်လာနိုင်သည့် သက်ရောက်မှုများ
ဖတ်ရှုသူအရေအတွက်များပြားလာခြင်း အမျိုးသမီးများကို ၎င်းတို့အား ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ခံစားရစေခြင်း အမျိုးသမီး သတင်းရင်းမြစ်များကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာတွင် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှု ဖော်ပြပါအချက်အားလုံး
ကျား၊မ မျှတမှုက ဘာကြောင့် အရေးပါသလဲ။
မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ၎င်းတို့ရေးသား ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာများတွင် ကျား၊မ မျှတမှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်သင့်သည့်အကြောင်းပြချက်များ
မညီမျှသော အသံ နှင့် အမြင်များ
ကျား/မ ညီညီမျှမျှပါဝင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍‌ လူများ၏ အစဉ်အလာ ယုံမှတ်မှုများ
မီဒီယာတွင် ကျား၊မ ရေးရာ ပုံသေကားချပ် သတ်မှတ်ပုံများ
လူထုသဘောထားကို ပုံဖော်ရာတွင် မီဒီယာသည်အလွန်အရေးပါသည်။ ကျား/မ ဝိသေသစရိုက်လက္ခဏာများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် အစဉ်အလာအတိုင်းရေးသားဖော်ပြမှုများသည် သိမ်မွေ့သည်ဖြစ်စေ၊ သိမ်မွေ့မှုနည်းပါးသည်ဖြစ်စေ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို ပြောင်းလဲပြီး ကျားနှင့်မ တန်းတူဆက်ဆံသော အကြောင်းအရာများကို ရေးသားဖော်ပြရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါက်ရိုးကျိုးနေသော အပြုအမူများကိုဆန်းစစ်ဖို့လိုပါသည်။ နည်းလမ်းအမျိုးအမျိုးဖြင့် အစဉ်အလာသမားရိုးကျ လက်ခံဖော်ပြမိတတ်သည်ကို ပိုမိုသတိရှိဖို့လိုပါသည်။
ကျား/မဆိုင်ရာ သမားရိုးကျဖော်ပြခြင်း အမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သုံးနှုန်းသောစကားမှ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသောရုပ်ပုံအထိ အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့ ကျား/မပိုင်းဆိုင်ရာ သမားရိုးကျဖော်ပြခြင်းများမှာ သိသာထင်ရှားလှသော်လည်း အချို့မှာအလွန်သိမ်မွေ့ပါသည်။ သတင်းဖော်ပြရာတွင် တွေ့ရဖန်များလှသဖြင့် ခွဲခြားသိရှိဖို့ပင်ခက်ပါသည်။ အဆိုပါ အချက်များသည် မီဒီယာများက၎င်းတို့ရေးသားဖော်ပြသည့် အကြောင်းအရာများတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများကို ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်ပုံ၊ တန်းတူညီမျှ ဆက်ဆံမှုမရှိပုံနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။
၁။ မညီမျှသော သတင်းရေးသားဖော်ပြခြင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည့်အကြောင်းအရာ။ ။ လူဦးရေ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးများဖြစ်နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာ၏ ၂၄ % နှုန်းတွင်သာဖော်ပြခြင်းခံရသည်။ [IWMF GMMP အစီရင်ခံစာ] မီဒီယာမှ ရေးသားသည့်စာများ၏ အဓိကဇာတ်ကောင်များ၊ အကြောင်းအရာများတွင် အမျိုးသားများအကြောင်းကိုသာ အများဆုံးရေးသားဖော်ပြထားသည်။
အရေးကြီးသတင်းခေါင်းစဉ်များ။ ။ အမျိုးသမီးများအကြောင်း အများဆုံးဖော်ပြခံရသည့် နေရာများသည် သိပ္ပံပညာ၊ ပညာရေး နှင့် လူမှုဘဝ စသည့်နေရာအရနည်းသောကဏ္ဍများတွင်သာ ဖော်ပြခံရသည့်အချိန်တွင် အမျိုးသားများက အရေးကြီးသတင်းအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေး၊ အားကစားနှင့် စီးပွားရေး စသည့် ကဏ္ဍများကိုကြီးစိုးလျက်ရှိသည်။
၂။ မညီမျှသော အသံ နှင့် အမြင်များ
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့် သတင်းရင်းမြစ်များ။ ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးသမီး သတင်းရင်းမြစ်များထက် အမျိုးသားသတင်းရင်းမြစ်များကို ပိုမိုအသုံးပြုသည်။ အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုပါက ၎င်းတို့သည် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်သူများလိုအပ်ချိန်ထက် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများ၊ အမြင်များ၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တုံ့ပြန်မှုများကို ဖော်ပြသူများ သို့မဟုတ် မျက်မြင်သက်သေများ လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်သာ အမျိုးသမီး သတင်းရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုသည်။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကို အမျိုးသမီးဆရာမ သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးအိမ်တော်ထိန်းတစ်ဦးနှင့် မကြာခဏ တွဲဖက်အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရ ကျွမ်းကျင်သူ ၅ ဦးတွင် တစ်ဦးသာ အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ [IWMF GMMP အစီရင်ခံစာ]
သတင်းပြုလုပ်သူ။ ။ အမျိုးသားများက သတင်းအများစုကို ပြုလုပ်သူများလည်း ဖြစ်ကြသည်။ သတင်းပြုလုပ်သူအားလေ့လာကြည့်ပါက ၃၇% နှုန်းသာ အမျိုးသမီးများ၏ သတင်းပြုလုပ်ချက်များဖြစ်သည်။ [IWMF GMMP အစီရင်ခံစာ]
၃။ မညီမျှသော တစ်ဦးချင်းတင်ဆက်ပုံများ
အမျိုးသမီးများအား ပုံဖော်သည့် ဘာသာစကား နှင့် ရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများတွင် ကျွန်ုပ်တို့က လိင်ဝိသေသပေါ်အခြေခံကာ ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်မှုများရှိခဲ့သည်။
အလေးပေးသည့် အခန်းကဏ္ဍများ။ ။ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ချက်များကို မိရိုးဖလာကဏ္ဍများတွင်သာ ပိုမိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။ အမျိုးသမီးများကို ရည်ညွှန်းရာတွင် အမှုဆောင်အရာရှိများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ရှေ့နေများ သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများနေရာထက် အိမ်ထောင်ရှင်မများ၊ အမေများ သို့မဟုတ် မိန်းကလေးချစ်သူများအနေဖြင့်သာ ပိုမိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရော ကလေးပါရှိသည့် အမျိုးသမီးများကို အလုပ်လုပ်သောမိခင်များအဖြစ်မကြာခဏရည်ညွှန်းသည်။ အမျိုးသားများကိုမူ အလားတူအခြေအနေ များဖြင့်ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိပါ။
အသုံးပြုသည့် ဘာသာစကား။ ။ အထင်ရှားဆုံးနှင့် အထိခိုက်နိုင်ဆုံး ကျား၊မ ခွဲခြား နှိမ့်ချဆက်ဆံခြင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ လူအများကို ကိုယ်စားပြုသည့်နေရာတွင် အမျိုးသမီးများအားပယ်ထုတ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူသားမျိုးနွယ် (mankind) ဆိုသည့် စကားလုံးပင်ဖြစ်သည်။ ကျား၊မ ကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ်အကိုင်အမည်များကို သတ်မှတ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် chairman၊ chairwoman၊ policeman၊ policewoman စသည့် စကားလုံးများဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးအလုပ်အကိုင်တစ်ခုတွင် ကျား၊မ ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်မှုများကိုလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အမျိုးသား သူနာပြု၊ အမျိုးသမီးရှေ့နေ စသဖြင့်
အသားပေးဖော်ပြသည့် အရည်အသွေးနှင့် အကျင့်စရိုက်များ။ ။ အမျိုးသမီးများကို အားနည်းပျော့ညံ့ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ကာ စိတ်ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးသူများ သို့မဟုတ် သားကောင်များအဖြစ်သာ ပုံဖော်တတ်ကြပြီး ကြံ့ခိုင်ပြီးယုံကြည်မှုရှိကာ အခြားသူများကိုငဲ့ညှာတတ်သည့် အသွင်မျိုးကို ပုံဖော်လေ့မရှိပါ။ အသက် အရွယ်၊ အသွင်အပြင်နှင့် အဝတ်အစားကို အလွန်အလေးပေးဖော်ပြကြသည်။ အောင်မြင်သူများဖြစ်နေပါကလည်း ၎င်းတို့အားအောင်မြင်စေရန် အထောက် အကူပြုသည့်အကျင့်စရိုက်များကို အဆိုးမြင်စေမည့်ပုံစံနှင့် ဖော်ပြကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အာဏာရှိသည်ဟုအမျိုးသားများအတွက် သုံးစွဲသော်လည်း အမျိုးသမီးများအတွက်မူ ဆရာလုပ်သည်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ပြတ်သားပြီးသြဇာ ပြည့်ဝသည့်အသံဟုမသုံးဘဲ စူးရှကာကျယ်လောင်သည့်အသံဟုသုံးခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
မမျှတသောရည်ညွှန်းချက်များ။ ။မီဒီယာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများကို ညီမျှစွာမဆက်ဆံပါ။
•အမျိုးသားများကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် (သို့) ကျွမ်းကျင် မှုများဖြင့်ရည်ညွှန်းသော်လည်း အမျိုးသမီးများကိုမူ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင် နှင့် အိမ်ရှိအခန်းကဏ္ဍများဖြင့်သာ ရည်ညွှန်းခြင်း။ •အမျိုးသမီးများအား အသက်အရွယ်နှင့်လိုက်၍ သတ်မှတ်သော်လည်း အမျိုးသား များကို မသတ်မှတ်ခြင်း။ •အမျိုးသမီးများ၏ စရိုက်လက္ခဏာများကို မကောင်းသည့်သဘော ပုံသေသတ် မှတ်သော်လည်း အမျိုးသားများ၏ စရိုက်လက္ခဏာများကို အကောင်းသဘော ဆောင်ကာသတ်မှတ်ခြင်း။ ပျော့ညံ့ခြင်းနှင့် ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်ရှိခြင်း၊ စိတ် လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း နှင့် ထိရှလွယ်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း နှင့် ကြံ့ခိုင်ခြင်း၊ စိတ်ခံစား ချက်ပြောင်းလွယ်ခြင်း နှင့် စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်း၊ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ်နှင့် ခန့်ညား သည့်အရွယ်၊ အမြင်ကိုဖော်ပြခြင်းနှင့် အသိဉာဏ်ပညာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၊ စိတ်ဂ ယောက်ဂယက်ဖြစ်ခြင်း နှင့် ဒေါသထွက်ခြင်း စသဖြင့်ဖော်ပြကြသည်။ •အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ရည်ညွှန်းရာတွင်၎င်းနှင့် အမျိုးသားတစ်ဦးတို့၏ ဆက်ဆံရေးပေါ်အခြေခံကာ သူ့မိန်းမ၊ သူ့ရည်းစား သို့မဟုတ် သူ့သမီး စသည်ဖြင့် အဆင့်နှိမ့်ဖော်ပြကာသူမ၏ ကိုယ်ပိုင်ခံစားခွင့်များနှင့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများဖြင့် ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် အမျိုးသားများနှင့် ဆက်ဆံရေးပေါ်မူတည်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ခေါ်ဆိုကြသည်။ Miss နှင့် Mrs. တို့က အမျိုးသမီးများ အိမ်ထောင်ရှိမရှိကို ဖော်ပြသော်လည်း Mr တွင် ထိုကဲ့သို့ ခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါ။ •မိသားစုအပေါ်ထားရှိသည့် အမျိုးသမီးများ၏ ကတိကဝတ်များကို ရည်ညွှန်းခြင်း။ ။ ကလေးရှိသည့်အမျိုးသမီးများကို "အလုပ်လုပ်သောမိခင်များ" ဟု ရည်ညွှန်းကြပြီး မိသားစု နှင့် အလုပ်ကို တပြိုင်နက်စီမံခန့်ခွဲရာတွင် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကို မကြာခဏ မေးခွန်းထုတ်ခံကြရသည်။ အမျိုးသားများကို ဘယ်သောအခါမှ "အလုပ်လုပ်သည့်ဖခင်များ" ဟု ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်နေခြင်းနှင့် မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်ရခြင်းအပေါ်လည်း မေးခွန်းထုတ်ခြင်းမခံရပါ။ "မိခင်"ဆိုသည့်နေရာတွင် "မိဘများ" ဟူသည့်စကားလုံးကို အစားထိုးအသုံးပြုသင့်သည်။ •အမျိုးသမီးများ၏ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကို အာရုံစိုက်ကြသော်လည်း အမျိုးသားများကိုမူ ၎င်းတို့၏အောင်မြင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသာ အလေးပေးကြသည်။
အသုံးပြုသည့် ရုပ်ပုံများ။ ။ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကို မတူညီစွာ ရည်ညွှန်းသကဲ့သို့ရုပ်ပုံများဖြင့် ဖော်ပြရာတွင်လည်း မမျှတစွာပုံဖော်သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟန်ပန်များနှင့် ပြစ်ချက်များကို အသားပေး ပုံကြီးချဲ့ဖော်ပြထားသည့် ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်။ ဝတ်စုံပြည့် ဝတ်ဆင်ထားသည့် အမျိုးသားပုံများနှင့် ဘီကနီဝတ်ထားသည့် အမျိုသမီးရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုသည်။ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားများ၏ ပုံများသည် အေးစက်စူးရှသည့် အကြည့်များဖြင့်ဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားများမှာ ပြုံးမြကာ ချည်းကပ်ရလွယ်သည့်ပုံများဖြစ်သည်။ ရောင်းအားစောင်ရေတက်စေရန်အတွက် ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိသည့် အမျိုးသမီးပုံများကိုလည်း ဂျာနယ်ရှေ့ဖုံးတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
၄။ လက်လှမ်းမမီသည့် အကြောင်းအရာများ
အမျိုးသမီးများကို ဦးတည်ချက်ထားသည့် ဇာတ်လမ်းများ။ ။ ။အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသမီးများ၏အရှုပ်တော်ပုံများ သို့မဟုတ် ဖျော်ဖြေပွဲများ သို့မဟုတ် သိပ္ပံနှင့် ကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများကိုသာ စိတ်ဝင်စားပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး သို့မဟုတ် အားကစား စသည့်ခေါင်းစဉ်များတွင် စိတ်မဝင်စားဟုယူဆသဖြင့် သတင်းဝဘ်ဆိုက်များတွင် " အမျိုးသမီးများအတွက် “ဟူသည့် စာမျက်နှာတစ်ခုကို သပ်သပ်ထည့်သွင်းကြသည်။
ဇာတ်ကြောင်းပြောသည့်ပုံစံ။ ။ အမျိုးသားပရိတ်သတ်များအတွက် စီးပွားရေးနှင့် အားကစားဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားမှုများထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲ အချက်အလက်ကိုသာ ရုပ်ပုံအနည်းငယ်ဖြင့်တင်ဆက်သည်။ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်များအရ အမျိုးသမီးများသည် ကိုယ်ပိုင်စိတ်ခံစားချက်များနှင့် ရုပ်ပုံများပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသဘောကျကြသည်ဟုဆိုသည်။ သို့ရာတွင် အမျိုးသားပရိတ်သတ်များအတွက် အလုပ်ဖြစ်သည့် နည်းလမ်းကိုသာအသုံးပြုလျက်ရှိကာ ၅၀% သောအမျိုးသမီးပရိတ်သတ်များ ကြိုက်နှစ်သက်သော တင်ပြပုံနည်းလမ်း၊ ပုံစံနှင့် ဘောင်များကိုလေ့လာ ဆန်းစစ်ရန်မကြိုးစားကြပါ။
1. နိုင်ငံရေး (သို့) စီးပွားရေးကဲ့သို့သော ခြေခြေမြစ်မြစ် ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အလုံအလောက်မရှိ (သို့မဟုတ်) ရှိကို မရှိပါ
သတင်းအဖွဲ့အစည်းအချို့က ဤအယူအဆသည် လွဲမှားလွန်ကဲကြောင်း၊ မည်သည့်ခေါင်းစဉ် အကြောင်းအရာမှာမဆို ဝေဖန်ပိုင်းခြားရေးသားတင်ပြနိုင်သော အရည်အသွေးမြင့်မားသည့် အမျိုးသမီးပညာရှင်များရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်း လေး၊ ငါးခုသည် အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ၊ သူတို့ရေးသားသော သတင်းများနှင့် ကွဲပြားစေရန် အကူအညီပေးဖို့ ရည်ရွယ်၍ရှာရလွယ်သော database များကိုစုစည်းထားသည်။ သတင်းဌာနအချို့ကလည်း သတင်းခန်းတစ်ခုလုံးအတွက် အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်များရှာရလွယ်စေရန် သူတို့ကိုယ်ပိုင် database များပြုလုပ်ထားကြသည်။
2. အမျိုးသမီး သတင်းရင်းမြစ်ရှာရန် (သို့မဟုတ်) ဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲသည်
အမျိုးသားများ၏ သတင်းဆောင်းပါးများကိုသာ မှီခိုသည့်အကျင့်ပါနေလျှင်သာ အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်တွေ ရှာဖို့ခက်မှာပါ။ သင်၏ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက် တွင် အမျိုးသမီးတွေ ထည့်ပေးရန်မှာ အစပိုင်းတွင်အားထုတ်ဖို့လိုပါမည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် သင်၏ ရေးသားမှုတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ် အမြင်များပါဝင်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။
3. အမျိုးသမီးရင်းမြစ်များသည် မီဒီယာနှင့် စကားပြောဆိုရန် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ် အားနည်းနေတတ်သည်။
သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် မီဒီယာတွင် ဖော်ပြခြင်းမခံခဲ့ကြရသဖြင့် အတွေ့အကြုံမှာလည်း ပို၍နည်းပေလိမ့်မည်။
သို့သော် သတင်းအဖွဲ့အစည်းများက သူတို့သတင်းတွင် အမျိုးသမီး သတင်းရင်းမြစ်ကို ပို၍ပို၍ အသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းလာကြပါသည်။ Bloomberg သည် ၎င်း၏ New Voice Initiative ဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများမှ ကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီးများအား မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းများ ပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်
4. အယ်ဒီတာများသည် အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ ပြောသမျှကိုအတည်ပြုရန် အမျိုးသားကျွမ်းကျင်သူများထံ အမြဲပင်မေးမြန်းအတည်ပြုလေ့ရှိကြသည်။
အမျိုးသမီးပညာရှင်တစ်ဦး၏ အမြင်ကို အတည်ပြုရန် အယ်ဒီတာကအမျိုးသား ပညာရှင်တစ်ဦးထံ မေးမြန်းရခြင်းသည် ခေါက်ရိုးကျိုးနေသော ကျား/မခွဲခြားမှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာအမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက်အရည်အချင်းမရှိဟူသော မွေးရာပါအစွဲကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤအမျိုးသမီးများသည် သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သူများဖြစ်ရာ သူတို့ပြောသမျှကို ယောက်ျားတစ်ဦးကအတည်ပြုပေးမှ တရားဝင်ရတော့မည်မဟုတ်ချေ။ ဤကဲ့သို့မွေးရာပါ အမူအကျင့်အစွဲအလန်းကို ဖျောက်ဖို့ခက်သည်မှန်သော်လည်း ယင်းကိုတော့စိန်ခေါ်ရပေလိမ့်မည်။
၁။ အောက်ပါတို့မှ ကျား၊မ ဆိုင်ရာ ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရွေးပါ။
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ လိင်ဝိသေသပေါ်မူတည်ကာ ၎င်းတို့၏ သွင်ပြင်၊ စရိုက်လက္ခဏာများကို သိစိတ်ရော မသိစိတ်တွင်ပါ ကြိုတင်သတ်မှတ်ကာ ဆုံးဖြတ်ခြင်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ စရိုက်လက္ခဏာများ၊ ဆက်ဆံရေးများပေါ် အခြေခံကာ ယောက်ျားဖြစ်သင့်သည် မိန်းမဖြစ်သင့်သည်ဟု ပတ်ဝန်းကျင်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် စရိုက်လက္ခဏာများ၊ ဆက်ဆံရေးများ ကျား၊မ ကွဲပြားမှုတစ်ခုတည်းပေါ်တွင်သာအခြေခံကာ လူများကိုခွဲခြားဆက်ဆံသည့် စိတ်ဓါတ်နှင့် အပြုအမူများ။ ကြမ်းတမ်းရက်စက်ပြီး မြင်သာထင်သာရှိသည်။ ကျား၊မ ဖြစ်ခြင်းပေါ်မူတည်ကာ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင်ရှိသင့်သည့် စရိုက်လက္ခဏာများနှင့်အခန်းကဏ္ဍများကို ပုံသေကားချပ် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောစိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်အပြုအမူများ
၂။ အောက်ပါစာကြောင်းများမှ မည်သည့်စာကြောင်းသည် ကျား၊မ ဆိုင်ရာ ပုံသေ ကားချပ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသလဲ။
ကိန်းဂဏန်းများအရ ဘုတ်အဖွဲ့ရာထူးများတွင် အမျိုးသားဦးရေက အမျိုးသမီးဦးရေထက်များသည်။ အမျိုးသမီးများသည် လေးလေးနက်နက်ဆောင်ရွက်လေ့မရှိသဖြင့် အောင်မြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ Mr. Dube နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ Priscilla တို့မှ ဆုချီးမြှင့်သည်။ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် နှစ်ဦးလုံး အလုပ်လုပ်ကြသည့် Mr. နှင့် Ms. Wasonga တို့က ၎င်းတို့၏ ကလေး ၃ ယောက်နှင့်အတူ ညစာစားပွဲသို့တက် ရောက်ခဲ့သည်။
၃။ အောက်ပါစာလုံးတွဲများမှ မည်သည့်စာလုံးတွဲများသည် ကျွန်ုပ်တို့နေစဉ် အသုံးပြုနေသည့် ကျား၊မ ဆိုင်ရာစာလုံးများဖြစ်ပြီး ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်မှု အနည်းငယ်ပါဝင်နေသည့် စကားလုံးများဖြစ်ပါသနည်း။
ရဲသား၊ ဥက္ကဌ၊ လက်ထောက် အတွင်းရေးမှုး၊ လေယာဉ်မှူး၊ မီးသတ်သမား လူလုပ် (man-made) ၊ Mrs၊ အမျိုးသားသူနာပြု
၄။ သတင်းများတွင် အမျိုးသမီးများအား ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်ခြင်း နည်းလမ်း ၄ ခုကိုဖော်ပြပါ။
အမျိုးသမီးများပေါ်တွင် မှီခိုလွန်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအပေါ် ယုံကြည်မှု ပျက်ပျယ်စေခြင်း၊ မမျှတသည့် ပုံဖော်မှုများနှင့် မမျှတသည့် အကြောင်းအရာပါဝင်မှုများ မိန်းမဆန်သည့်အမျိုးသမီး၊ ယောကျ်ားပီသသည့်အမျိုးသား၊ ဖတ်ရလွယ်သည့်အကြောင်းအရာနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်ယုံကြည်မှု ပျက်ပျယ်စေခြင်း မမျှတသည့်သတင်းရေးသားဖော်ပြခြင်းများ၊ မမျှတသည့်အသံများ၊ မမျှတသည့်ပုံဖော်မှုနှင့် လက်လှမ်းမမီသည့် အကြောင်းအရာများ မျှတသည့်သတင်းရေးသားဖော်ပြခြင်းများ၊ မျှတသည့်အသံများ၊ မျှတသည့်ပုံဖော်မှုနှင့် လက်လှမ်းမီသည့်အကြောင်းအရာများ
ကျား၊မ ရေးရာပုံသေကားချပ် သတ်မှတ်မှုဆိုတာဘာလဲ။ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အတွက် အဆိုပါပြဿနာကို အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်သို့ ပြန်သွားရန် ရှေ့ဆက်ရန်
သည် အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သတင်းရင်းမြစ်များကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နေမှသာ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုတိုးတက်လာမည်။ ဤသို့ ဖော်ထုတ်ရေးသားရာတွင် လိင်ခွဲခြားသောမှတ်ချက်များ၊ အတွေးအခေါ်များ၊ ခေါက်ရိုးကျိုး ကျား/မခွဲခြားမှုများမှရှောင်ရှား၍ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ၏ ရေးသားတင်ပြမှုများကို ညီမျှစွာဖော်ပြကြရမည်။ သင်၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်မှာ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများကို သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ဝန်ထမ်းများအဖြစ် တန်းတူသဘောထားဆက်ဆံကာ ရေးသားဖော်ပြကြရန်သာဖြစ်သည်။
သင်၏သတင်းတွင် အမျိုးသမီးများအား အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အနည်းဆုံးတော့ပေါ်လွင်သော ဇာတ်ဆောင်များအဖြစ်လည်းကောင်း ဖော်ပြရေးသားပါ။ သူတို့ကိုသာ ခေါင်းတင်ရေးရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သူတို့သည် ထင်ရှားသော သတင်းဝေဖန်သူများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ရှင်းပြသူများလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရှာ၍မတွေ့လျှင်ညီမျှသွားစေရန် အမျိုးသမီးအကြောင်း ဖော်ပြထားသော နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ရှာရေးပါ။
သင်၏စာစောင်တွင်အမျိုးသားများနှင့်အတူ အမျိုးသမီးဆောင်းပါးရှင်များ ပါဝင်ရေးသားနေအောင်လုပ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ခြင်းကို အလိုအလျောက်ထင်ရှားပေါ်လွင်လာနိုင်ပါသည်။
သင်၏အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများသည်၊ ဘဝနေထိုင်ပုံ (lifestyle)၊ ခရီးသွား (သို့မဟုတ်) ဆယ်လီများအကြောင်းရေးနေသူများသာရှိသည်ဆိုလျင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိသည်ဟုမဆိုနိုင်သေးပါ။ သင့်ဝန်ထမ်းများကို နိုင်ငံရေး၊ အားကစားနှင့် စီးပွားရေးကဲ့သို့ ခြေခြေမြစ်မြစ်အကြောင်းအရာများကိုလည်း ရေးခွင့်ပေးပါ။
အမျိုးသမီးများ၏ ရှုထောင့်အမြင်များ ပါဝင်အောင် အမျိုးသမီးရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုပါ။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးသမားများ၏ ပြောစကားများကိုသာ ထုတ်ယူ သုံးစွဲခြင်းမပြုပါစေနှင့်၊ ကျောင်းဆရာမများ၊ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးများထံမှလည်းရယူပါ၊ ပုဂ္ဂလိကအတွေ့အကြုံများ ဝေမျှရန်အတွက်သာအမျိုးသမီးများကိုအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။
အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ရင်းမြစ်များ ပါဝင်ပါစေ
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အမျိုးမျိုး၏ အမြင်များပါဝင်နိုင်ရန် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တန်းတူညီမျှပါဝင်အောင်လုပ်ပါ။ ဘာသာရပ်အားလုံး တွင်အောင်မြင်နေကြသော တတ်သိနားလည်သော အမျိုးသမီးများရှိ ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးပညာရှင်၏ အယူအဆသဘောထားကို ချွင်းချန်ထားခြင်း အတွက်ပေးရန်ဆင်ခြေမရှိပါ။
သင့်တိုင်းပြည် (သို့) ဒေသတွင်အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူရင်းမြစ် စာအုပ်မရှိသေးလျှင်ပြုစုထားပါ။ ဤစာအုပ်သည် လှုပ်ရှားတက်ကြွသော၊ ကြီးထွားနေသော database ဖြစ်လာလိမ့်မည်၊ ထို database ကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူရင်းမြစ်များကို နေ့စဉ်လိုပင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနေမည်၊ ဘီဘီစီ နှင့် Bloomberg တို့လိုမီဒီယာကြီးများ ထိုကဲ့သို့အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ ပြည့်စုံ သော အမျိုးသမီးရင်းမြစ်စာအုပ် နမူနာကို ကြည့်လိုလျှင် She Source (US/Global) ကို ကြည့်ပါ။ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံတွင် (According to Her) ဟု ခေါ်သောအလားတူ အမျိုးသမီးရင်းမြစ်စာအုပ်ကို Gender Media Connect က ဖန်တီးပေးထားသည်။
အမျိုးသမီး ကျွမ်းကျင်သူများကို မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေး သင်တန်းပေးပါ
အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများထံမှ သတင်းဆောင်းပါးများ၏ အရည်အသွေးတိုးတက်လာစေရန် Bloomberg အပါအဝင်မီဒီယာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများက မီဒီယာတွင်ဖော်ပြခြင်းမခံခဲ့ရဖူးသော၊ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများအတွက် မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းများပို့ချပေးနေကြသည်။ ဤသို့ပို့ချမှုသည် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားလို မီဒီယာများအတွက် အထူးသဖြင့်အရေးပါလှပေသည်။
(၃) သမားရိုးကျ ကျား/မ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် လိင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဝါဒကို ရှောင်ရှားပါ
သင့်တင့်သော စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် သရုပ်ဖော်မှုပြုပါ
မီဒီယာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ဖတ်ရှုနေရသော အကြောင်းအရာများသည် ကမ္ဘာကြီးအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ထိုမျှမကပါ။ ထိုအကြောင်းအရာများကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဖော်ပြသည်၊ သရုပ်ဖော် သည်ဆိုသည့်အချက်ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါသည်၊ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများအကြောင်း ရေးသားဖော်ပြရာတွင် သမားရိုးကျ ကျား/မ ခွဲခြား ဖော်ပြမှုကိုရှောင်ရှားပြီး သင့်တင့်သော စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကိုသာ သုံးစွဲရေးသားပါ။ တန်းတူညီမျှ ပုံဖော်ရေးသားပါ။ “ကျား/မ မျှတသော စကားလုံးအသုံးအနှုန်း” ဟူသော စာကွင်းသည် အိတ်ဆောင်လမ်းညွှန်ဖြစ်ရာ လက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်ဖြစ်သည်။
သတင်းခန်းဝန်ထမ်းများကို ကျား/မ ဘက်လိုက်မှုနှင့် ကျား/မ မျှတစွာပါဝင်မှုကို လေ့ကျင့်ပေးပါ
ကျား/မ မျှတဖို့အရေးကြီးပုံကို ဝန်ထမ်းအားလုံး သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ကျား/မ မျှတသော သတင်းအကြောင်းအရာများကိုသာရေးအောင် လေ့ကျင့်ပေးပါ။ သင်ကြားမှုတွင် အပြိုင်စနစ်နှင့် ပြောင်းပြန်သွားနိုင်မှု နည်းလမ်းများကို (အခန်း ၃ တွင်) ရှင်းပြထားပါသည်။
အသုံးအနှုန်းလမ်းညွှန် (Style Guide) ထားပါ
ကျား/မ မျှတသောအသုံးအနှုန်း လမ်းညွှန်ထားရှိခြင်းဖြင့် သတင်းခန်းမှ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် သင့်တင့်သောစကားလုံး နှင့် မသင့်လျော်သော စကားအသုံးအနှုန်းကို ခွဲခြားသိနိုင်ပါသည်။ သင့်၌လက်ရှိ အရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ဥပမာ-
(၄)အမျိုးသမီးများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော သတင်းများ
အမျိုးသမီးများ စိတ်ဝင်စားသည့်ပုံစံဖြင့် ရေးသားပါ
အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားတို့သည် သတင်းအကြောင်းအရာများအပေါ်တွင် တုံ့ပြန်ပုံခြင်းမတူကြပါ။ လေ့လာချက်များအရအမျိုးသမီးများသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့် မြင်တွေ့ရသော သတင်းအကြောင်းအရာများကို စိတ်ဝင်စားကြသည်၊ ဤသို့ဆိုသဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ထင်ရှားကျော်ကြားသူများ အတွင်းရေးကိုသာ ဖတ်ကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ နိုင်ငံရေးရာသတင်းများကိုပင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုထောင့်မှ ရေးသားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ယဉ်ကျေးမှုခေတ်ပေါ်ရေစီးကြောင်းများ၊ ညီမျှမှုပြဿနာများနှင့် ပညာရေးအပါ အဝင် လူမှုရေးကိစ္စအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်နွယ်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းဒေသတွင်း သတင်းနှင့် သံတမန်ရေးရာများကဲ့သို့သော သတင်းများကို စိတ်ဝင်စားကြကြောင်း The South China Morning Post က တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာနှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသန အကန့်အသတ်နှင့်သာရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးများသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ သတင်းများကိုလည်း ကြည့်ရှုကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှသော အမျိုးသမီးထုကြီးကိုဆွဲဆောင်နိုင်မည့် ရေးသားနည်းဟန်များကိုလည်းစဉ်းစားကြရန်ဖြစ်ပါသည်။
သတင်းခန်းခေါင်းဆောင်နေရာများအတွက် ရွေးချယ်ရာတွင် ကျား/မ ညီမျှမှုရှိ အောင် ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်ပါ
ခေါင်းဆောင်ရာထူးများအတွက် ကျား/မ ညီမျှမှုကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီး သင့်အဖွဲ့အစည်း၏ သတင်းအစီအစဉ်ကို လွှမ်းမိုးစေရန် အမျိုးသမီးများအား ညီမျှသောအခွင့်အလမ်းကိုပေးလျှင် ပိုမိုမျိုးစုံကျယ်ဝန်းပြီး အားလုံးပါဝင်သော ရလဒ်တစ်ခုကိုရရန် အလားအလာပို၍များပေမည်။ အမျိုးသမီးများက အားလုံးသော တည်းဖြတ်မှုဆိုင်ရာ အဆုံးအဖြတ်ကိုလုပ်ခဲ့လျှင် သတင်းအစီအစဉ် အနေအထား မည်သို့ပြောင်းလဲမှုရှိမည်ကို NewsMavens ဟု ခေါ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် စူးစမ်းလုပ်ကြည့်သည်။ ဥရောပတစ်လွှားမှ အမျိုးသမီး သတင်းစာဆရာများကို ထိုနေ့တစ်နေ့အတွက် ထိပ်တန်းသတင်းများရေးပေး ကြရန်ဖိတ်ကြားလိုက်သည်။ အမျိုးသမီးသတင်းသမားများက ထိုနေ့အတွက် အရေးပါသည်ဟုယူဆ‌သော သတင်းအကြောင်းအရာများသည် ပင်မသတင်း ဂျာနယ်များတွင် မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာမှ ဖော်ပြခြင်းခံရသော အကြောင်းအရာများနှင့် ကွဲပြားမှုရှိသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ stories focused on marginalised groupsသူတို့ရွေးချယ်သော သတင်းများတွင် ဘေးဖယ်ခံထားရသော လူတန်းစားတို့၏ အကြောင်းအရာများအပေါ် အာရုံထားရေးသောသတင်းများ၊ ကြီးမားသောနိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးဖြစ်ရပ်များက သာမန်လူများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ ပါဝင်လာသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ သင်၏ သတင်းစာတွင် အမျိုးသမီးအယ်ဒီတာများအရေးထားဖော်ပြသော သတင်းဆောင်းပါးများသည် အမျိုးသမီးပရိသတ်၏အကြိုက်နှင့် ကိုက်ညီနေဖို့အကြောင်းများပေသည်။
မီဒီယာအတော်များများတွင် ကျယ်ပြန့်သော ပရိသတ်သုတေသနလုပ်ဆောင်ရန် အရင်းအမြစ်များမရှိကြချေ။ သို့သော် သင်၏ သတင်းမီဒီယာပါအကြောင်းအရာများအား အမျိုးသမီးများနှင့် သင့်လျော်အောင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို နားလည်သိရှိရန် အသေးစားသုတေသနတော့လုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျား/မ မျှတသော စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် သရုပ်ဖော်မှု
(Adapted from: Name It. Change It. The Women’s Media Center’s Media Guide to Gender Neutral Coverage of Women Candidates + Politicians၊ WMC UNESCO Guidelines for Gender-Fair Use of Language၊ UNESCO ‘Glossary of Terms’ in Unspinning the Spin: The Women’s Media Center Guide to Fair and Accurate Language၊ WMC တို့အား ကိုးကားသည်))
အမျိုးသမီးများကို ချန်လှပ်ထားသော စကားအသုံးအနှုန်းမသုံးပါနှင့်
အားလုံးပါဝင်သော စကားကိုသာသုံးပါ။ သင့်စကားလုံးသည် ကျား/မ အားလုံး၊ လိင်အားလုံးနှင့် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာအားလုံးပါဝင်ပါစေ။
•	ကျား/မ နှစ်မျိုးလုံးကို ရည်ညွှန်းသည့်စကားလုံးများဖြစ်သည့် mankind နှင့် man-made စသည့် စကားလုံးများအစား humankind နှင့် artificial ဟု ကြားကျအောင်သုံးပါ။ •	အားလုံးနှင့်ဆိုင်သော နာမ်စားကိုသုံးပါ၊ ကျား/မ နှစ်ဦးစလုံးကို ပြောရာတွင် ကျား/မ ခွဲခြားသော နာမ်စားမသုံးပါနှင့်၊ ဥပမာ - လယ်သမား တစ်ဦးစီကို အစိုးရက ‘သူ၏’ အမတော်ကြေးထုတ်ပေးသည်ဟု မရေးဘဲ ကျား/မ အကြုံးဝင်သည့် သူတို့၊ သူတို့၏၊ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ သင်၊ သင်၏ စသည်ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ •	ရင်းမြစ်တစ်ခုကို ကိုးကားမည်ဆိုပါက၊ ရင်းမြစ်ထံမှ သူတို့ကြိုက်သည့် နာမ်စားကိုအရင်မေးမြန်းထားပါ။ •	ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ပတ်သက်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ဆက်နွယ်မှုကို ဖော်ပြသောစကားလုံးများကို ရေးသားရာတွင် အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှု အမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်သည့် အသုံးနှုန်းများကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုပါ။ ဥပမာ- “ဝန်ထမ်းများ၏ ဇနီးများ” ဟုဆိုလျှင် အမျိုးသားဝန်ထမ်းများရှိသည်ဟုလည်းကောင်း၊ ရှိနေသည့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် စုံတွဲများဖြစ်နေကြသည်ဟုလည်းကောင်း၊ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ကျား/မ အပြန်အလှန် သဘောကျနေကြသောစုံတွဲ များ ဖြစ်ကြသည်ဟုလည်းကောင်း ထင်မှတ်စရာရှိသည်။
လိင်တစ်မျိုးမျိုးကို ကန့်သတ်ထားသော စကားလုံး မသုံးပါနှင့်
•	အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုအနေနှင့် ကျား/မ ကိုရှေ့တန်းမတင်ပါနှင့်၊ တစ်ဦး တစ်ယောက်၏ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်အခြေအနေတို့ကို ဖော်ပြရာတွင် ‘သူ၏’ (သို့) ‘သူမ၏’ စသည့်အသုံးအနှုန်းတို့မှာအဆင်မပြေလှပါ။ •	ဖန်တစ်ရာတေထပ်နေသော အသုံးအနှုန်းတွေကိုမသုံးပါနှင့်။ ဥပမာ-just likeaman; man up (သို့) drama queen ဆိုသောအသုံးတွေကို ရှောင်ပါ။
အလုပ်ရာထူးများကိုဖော်ပြရာတွင် အစဉ်အလာလက်ခံခဲ့သည့်အတိုင်း ကျား/မ ခွဲခြား၍ ဆက်လက်ရှုမြင်နေစေသည်များကို ရှောင်ရှားပါ။ (အမျိုးသမီးများကို ဖယ်ရှားချန်လှပ်ထားသော)
•	အမျိုးသမီးတွေကို ဘေးဖယ်ချန်လှပ်သော အလုပ်ရာထူးနာမည်များကို ကြားကျအောင်ပြောင်းပါ။ ဥပမာ-Policeman အစား police officer ၊ chairman အစား chairperson ၊ actress အစား actor, Waitress အစား waiter စသည်ဖြင့် •	အလုပ်ခေါင်းစဉ်တွင် ကျား/မ ထည့်စရာမလိုပါ။ ဥပမာ- ရှေ့နေဟာ ရှေ့နေပါပဲ၊ အမျိုးသမီးရှေ့နေ lady lawyer ဟုပြောစရာမလို သူနာပြုဟာ သူနာပြုပါပဲ၊ male nurse ဟု ရေးစရာမလို၊ အလုပ်တစ်ခုကို ယောက်ျားများသာ (သို့) မိန်းမများသာ လုပ်ရတော့မလိုလို အဓိပ္ပာယ်ရောက်နိုင်သည်။
ကျား/မ ညီမျှမှုရှိအောင် မည်သို့ ပြုမူဆက်ဆံမည်နည်း
•	ယောက်ျားတွေအပေါ် သုံးမည့် ‘နာမဝိသေသန’ များနည်းတူ မိန်းမတွေအပေါ်မှာလည်းသုံးပါ။ ဥပမာ- နှံ့စပ်သော vs ခေါင်းမာသော၊ ဆပ်ဆပ်ကြဲ vs စိတ်ခံစားလွယ်သော •	ကျား/မ ညီမျှမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသော ခေါင်းစဉ်တပ်မှုပြုလုပ်ပါ။ အမျိုးသမီးများကို သူတို့၏အိမ်ထောင်ရေး အဆင့်အတန်းအရ လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားတစ်ဦးနှင့် တော်စပ်ဆက်နွယ်မှုအရ လည်းကောင်းဖော်ပြသည့် Miss (or) Mrs အစား Ms ကိုသုံးပါ။ သူတို့၏ အမည်တွင် လင်ယောက်ျားအမည်ကိုမသုံးပါနှင့်၊ ဥပမာ - Mrs. Nick Smith •	ပုံနှိပ်ရာတွင်အထက်ပါ audio-visual content အတိုင်းအသုံးပြုပါ။
•	အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အသက်ကို အထူးဖော်ပြခြင်း၊ အမျိုးသားအတွက် အသက်ကိုအထူးဖော်ပြလေ့မရှိပါ။ •	အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသာ အသားပေးဖော်ပြသော်လည်း အမျိုးသား၏လုပ်ဆောင်အောင်မြင်မှုများကိုသာ ဖော်ပြခြင်း။ •	အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို အမျိုးသားတစ်ယောက်၏ ဇနီး၊ ချစ်သူရည်းစား (သို့မဟုတ်) သမီးဟုဖော်ပြခြင်းသည်အမျိုးသမီးကို သိမ်ငယ်သွားစေ သည်။ သူမကိုသူ့ အရှိအတိုင်းသာဖော်ပြပါ။ •	အမျိုးသမီးများကိုရှက်တတ်၊ ကြောက်တတ်သူများ၊ အမျိုးသားများကို ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူများ(သို့မဟုတ်) အလားတူ သမားရိုးကျပုံဖော်ခြင်း၊ ဥပမာ - စိတ်မတည်ငြိမ်၊ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်တတ်သူ၊ အားနည်းသူ၊ စိတ်ခံစာလွယ်သူ၊ ရှိုက်ငိုတတ်သူများအဖြစ် အမျိုးသမီးတွေကို ပုံဖော် ရေးသားပြီး အမျိုးသားတွေကို အင်အားတောင့်သူ၊ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်သူ၊ ဆတ်ဆတ်ကြဲ၊ အောင်မြင်သူအဖြစ် သမားရိုးကျ ပုံဖော်ရေးသားခြင်း။ •	သူမကဆန္ဒမရှိဘဲနှင့် သူမ၏မိသားစုကိုဖော်ပြခြင်း၊ ကလေးများနှင့် မိခင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါက ‘အလုပ်လုပ်သော မိခင်’ ဟု ဖော်ပြပြီး အိမ်ထောင်တာဝန်တစ်ဖက်နှင့် အလုပ်တာဝန်ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်လားဟု သံသယမေးခွန်း ထုတ်တတ်ခြင်း၊ အမျိုးသားတွေကျတော့ အလုပ်လုပ်သော ဖခင် Working Dads ဟု ရေးသားဖော်ပြလေ့မရှိ၊ သားသမီးတွေနှင့် အလုပ်တာဝန်ကို အောင်မြင် အောင်လုပ်နိုင်ပါမည်လားဟူ၍လည်း မေးခွန်းထုတ်လေ့မရှိကြချေ။ ထို့ ကြောင့် မိခင်အစား မိဘဟူသော စကားလုံးကိုသာ အသုံးပြုပါ။ •	အမျိုးသမီး၏ အဝတ်အစား (သို့) မိတ်ကပ်ကို အသားပေးဖော်ပြခြင်း၊ အမျိုးသားများကို ဤသို့ဖော်ပြလေ့မရှိချေ။
သင်သည် အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ရှိ/မရှိ ဆန်းစစ်ပါ
ပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အပြိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့သည် သင့် အနေနှင့် ကျား/မ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။
ပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ကြည့်ခြင်း - သင်သည် အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ဤနည်း အတိုင်းပုံဖော်လိမ့်မည်လား (သို့) ရယ်စရာမဖြစ်စေဘဲ အမျိုးသားတစ်ယောက် ကို ဤနည်းအတိုင်း ပုံဖော်နိုင်ပါမည်လား၊ အဖြေကမဖော်နိုင်ပါဟုဆိုလျှင် သင်သည်သမားရိုးကျ ကျား/မ ခွဲခြားသူဖြစ်နေပြီ။ ဥပမာ -
•	အနက်ရောင်ဆံပင်ရှိသူ လူဖြူအမျိုးသမီးကို brunette ဟုခေါ်ကြပြီး အမျိုးသားကို brown hair ဟုပြော သည်၊ •	Hilary Clinton ၏ အသံကိုစူးရှသည်ဟုပြောကြပြီး Donal Trump ကိုတော့ ထိုသို့မပြောကြချေ၊ •	အသက် ၃၇ နှစ်ရွယ် Meghan Markle သည် မေလအတွင်းက Prince Harry နှင့် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ •	အပြိုင်လုပ်ဆောင်ခြင်း- အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားကို ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူး၊ ဖော်ပြချက်၊ အရည်အချင်းတို့ကို အတူတူဖော်ပြသလား၊ ဥပမာ- •	ဖတ်ရှုစာအုပ်စာရင်း - Jane Austen, Joyce Proust and Virginia Woolf Vs. Austen, Proust and Woolf. •	The usher seated Mr. Trump and his lovely wife Melania VS. The usher seated Mr and Ms Tramp. •	Her parents, Judge Nicholas Smith and Mrs Smith, were both at the wedding VS. Her parents, Nicholas and Karen Smith, were both at the wedding.
လွန်လွန်ကဲကဲ လိင်ဆန်လွန်းသော စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် ရုပ်ပုံများကိုဘယ်တော့မှအသုံးပါနှင့်
အပျော်အပျက် ဟာသများ၊ အမျိုးသမီးများကို အဆင့်နိမ့်ကျသွားစေသော စကားလုံးများ၊ ရုပ်ပုံများ၊ အမျိုးသမီးများကို စော်စော်ကားကား၊ ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောခြင်း သို့မဟုတ် လိင်ပစ္စည်း သက်သက်အဖြစ် အဆင့်လျှော့ချသော၊ အလွန်အမင်းသမားရိုးကျဆန်သော စကားအသုံးအနှုန်းနှင့် သရုပ်ဖော်ပုံများ အားလုံးပါဝင်ပါသည်။သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပာယ်ရသော အသုံးအနှုန်းများ - ဥပမာ - pussy, bitch, banging body, nice piece of ass, little wifey, She belongs back in the kitchen (နမူနာတွေပြောရလျှင် မကုန်နိုင်တော့ပြီ)။ ယင်းစကားလုံးများကို ကျား/မ နှစ်ဦးလုံး အတွက်မျှမျှတတကြားနေသော အပြောအဆိုသုံးနှုန်းမှုများ မရှိနိုင်ပါ၊ အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ် အသွင်သဏ္ဌာန်များကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တင်ပြ ရာတွင် ဤဥပဒေသကိုပင်အသုံးပြုပေသည်။ ဥပမာ - cleavage, cellulite, wronkles.
သင်အသုံးပြုသော ရင်းမြစ်နှင့်ကိုးကားချက်မှ ပြဿနာကိုပြင်ဆင်ပါ
မကြာခဏပင်ပြဿနာသည် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော ရင်းမြစ်တွင်အရင်းခံနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ရင်းမြစ် (သို့) အကိုးအကားသည် ကျား/မ ဘက်လိုက်မှုရှိလျင်၊ လိင် (သို့) ကျား/မ သမားရိုးကျဖြစ်နေလျင် သင့်အနေနှင့် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်သင့်ပါသည်။
•	ကျား/မ သိသာလွယ်သောစကားလုံးကိုသုံး၍ အကိုးအကားကိုစာပိုဒ် ခွဲပစ်လိုက်ပါ။ •	ပြဿနာဆီကိုအာရုံပြောင်းပါ၊‘သောမက်ဂျက်ဖာဆင်’ က ပြောခဲ့သည်။ “ယောက်ျားအားလုံးကို ဘုရားသခင်က ညီတူညီမျှ ဖန်ဆင်းပေးခဲ့ပါသည်”။ “All men are created equal.” သူသာ ယနေ့ခေတ်မှာ ရေးသား ခဲ့ပါလျှင် “လူအားလုံးကို ဘုရားသခင်က ညီတူညီမျှ ဖန်ဆင်းခဲ့သည်”။ “All people are created equal” ဟု ပြောခဲ့မည်မှာသေချာပါသည်။ (UNESCO ရင်းမြစ်မှ တိုက်ရိုက်ယူထားပါသည်။) •	ကျား၊မ ဘက်လိုက်သော၊ ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်မှုပါဝင်နေသော သို့မဟုတ် ကျား၊မ ပေါ်မူတည်ကာခွဲခြားနှိမ်ချခြင်းသဘော ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ပြောစကားဖြစ်စေ အရင်းအမြစ်တစ်ခုလုံးဖြစ်စေ ဖျက်ထုတ်ပါ။
၁။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအားပုံဖော်ရာတွင် ကျား၊မ မျှတမှုရှိစေရန် ကြိုးစားသည့်အခါ သုံးရမည့် ဘာသာစကား နှင့် သွင်ပြင်သည် သူမ၏
အသက် ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ဇနီး သို့ အမေ တစ်ယောက်နေရာ အမျိုးသမီးဆန်သည့် စရိုက်လက္ခဏာများ နှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် ဝတ်စားထားသည်များကိုအလေးပေးဖော်ပြရမည်။
၂။ ကျား၊ မ ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုဘဲ အမျိုးသမီးများအားအကြောင်းအရာထဲတွင် ပိုမိုအရေးပါစေရန် မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။
အမျိုးသမီးများ၏ ဖျော်ဖြေရေးနှင့် လူမှုဘဝဇာတ်လမ်းများကို ပိုမိုရေးသားရန် အမျိုးသမီးများ၏ပုံရိပ်များကို အမျိုးသမီးများ၏ ဇာတ်ကြောင်းတွင်သာမက အခြားတွင်ပါအသုံးပြုရန် အဓိကအမျိုးသားဇာတ်ကောင်များ၏ ဇနီးများနှင့် မိန်းကလေးချစ်သူများကို အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြရန် မိခင်များနှင့်မိသားစုများအကြောင်း ပိုမိုရေးသားရန်
၃။ တန်းတူညီမျှရှိခြင်း စည်းကမ်းဆိုသည်မှာ မည်သည်ကို ရည်ညွှန်းသနည်း။
အမျိုးသားတစ်ဦး (သို့) အမျိုးသားများအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ခုကို အမျိုးသမီးတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) အမျိုးသမီးများ၏ ဆောင်းပါးနှင့် အပြိုင် ရေးသားဖော်ပြရန် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကိုတူညီသည့်ခေါင်းစဉ်၊ ပုံဖော်မှုများ၊ စရိုက်လက္ခဏာများနှင့် အသိအမှတ်ပြုခြင်းများဖြင့်ဆက်ဆံသင့်သည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများကို အပြိုင်ထည့်သွင်းဖော်ပြ၍မရပါ အပြိုင်ကမ္ဘာရှိသတင်းများတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများ ထက် ပို၍ဖော်ပြခံရသည်
ကျား၊မ မျှတမှုကို မြှင့်တင်ပေးမည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ
ရေးသားဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာများတွင် ကျား၊မ မျှတမှုကို မြှင့်တင်ရန် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကြံပေးချက်များ
လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း နှင့် အရင်းအမြစ်များ
ကျား၊မ ညီမျှမှုကို မြှင့်တင်ခြင်း
ခေါင်းဆောင်မှုဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာရှိခြင်းသည် အကြောင်းအရာများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်ရန် အရေးပါသောအချက်နှစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၏ အဆင့်ဆင့်ဝန်ထမ်းများသည် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှု၏ အရေး ပါပုံကိုသိရှိလာမည်။ အလေးထားရမည့် ပစ်မှတ်များကိုသိရှိလာမည်။ အပြောင်း အလဲများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက ယင်းအတွက် တာဝန်ယူရမည်ကိုသိရှိလာမည်။ သင်၏ စဦးလုပ်ဆောင်မှုနှင့် မဟာဗျူဟာများက မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာရှိအောင်ဖော်ပြထားရမည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးက ဘုံရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေးဦးတည်ချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရှိစေရန် တိုးတက်လာသည့် အချက်အလက်များကို ဝန်ထမ်းများနှင့် မျှဝေထားရမည်။
(၁) ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အားတက်သရော လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်သည်။
အကြောင်းအရာများတွင် ကျား/မ ညီမျှရေးတိုးမြှင့်ရန်လုပ်ဆောင်မှုတွင် အထက် ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိများလိုအပ်သည်။ တွန်းအားပေးမှုသည် အထက်ကလာပါက အလိုအလျောက်တာဝန်သိမှုဖြစ်လာသည်။ သို့ပါက ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင် ရေးအသိစိတ် ချက်ချင်းဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဝန်ထမ်းများအား ကြိုးစားအားထုတ်မှု သိပ်မလိုအပ်ဘဲ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အသိစိတ်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းကြောင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သော်လည်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ဆန့်ကျင်နေပါက ထိုလုပ်ဆောင်မှုသည် အချည်းနှီးဖြစ်သည်။
(၂) ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကို ခန့်အပ်ပါ။
ပန်းတိုင်ဆိုသည်မှာ အထက်ကချမှတ်ပေးရသည် ဆိုသည့်နည်းတူသတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိစေရန် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရသော အလုပ်များကို တစ်ယောက်ယောက်ကကြီးကြပ်ရမည်။ ထိုသူက အထက်စီမံခန့်ခွဲသူကို အစီရင်ခံလျှင်ပိုမိုကောင်းသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပါက ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေး အစီအစဉ်သည် ပိုမိုတရားဝင်ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်ရသည်မှာ ပိုမိုလွယ်ကူသွားသည်။
၎င်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမြင်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားကြသည်။ တစ်ခုမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရရှိနိုင်သည်များဖြင့် အစပြုရန်ဖြစ်သည်။ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို လွယ်ကူစွာရရှိနိုင်သော သတင်းကဏ္ဍများ၊ ဌာနများနှင့် အစပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သီးခြားဌာနအလိုက် ပစ်မှတ်များကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ ဥပမာ အားကစား သတင်းဌာနအတွက် နည်းပါးသောပစ်မှတ်များ ထားရှိပေးနိုင်သည်။ တင်းကြပ်သောချဉ်းကပ်မှု လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွင်း ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ BBC သတင်းဌာနက လုပ်ဆောင်သော ၅၀ : ၅၀ နှုန်းထားမျိုး ဖြစ်သည်။
(၄) အချိန် အကန့်အသတ်များ သတ်မှတ်ပါ။
အချိန်အကန့်အသတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး မတူကွဲပြားသော အမြင်များရှိကြသည်။ တိုတောင်းသော အချိန်အကန့်အသတ် သတ်မှတ်ပါက အပြောင်းအလဲသည် လျင်မြန်စွာဖြစ်လာနိုင်သော်လည်း ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် ကြာရှည်လွန်းပါကလည်း မအောင်မြင်ဖြစ်နိုင်ပြီး အစီအစဉ်မစတင်ခင်မှာ ထိခိုက်နိုင်သည်။
(၅) အယ်ဒီတာများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းများကို ဦးစားပေး ဆွဲဆောင်ရမည်။
သင်၏အယ်ဒီတာများ၊ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများက သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိစေရေးကို အလေးပေးရန်အရေးကြီးသည်။ သင်အသုံးပြုသော မဟာဗျူဟာသည် သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက် လက်ရှိတွင် အလုပ်ဖြစ်သော၊ အတိတ်တွင် အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သော နည်းလမ်းများဖြစ်ရမည်။ သင်သည် သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိစေခြင်းကို သတင်းနှင့် ဆိုင်သောယဉ်ကျေးမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လိုအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
(၆) ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အခြားသော ရင်းမြစ်များရရှိစေခြင်း။
စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန အပါအဝင် ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် အစီရင်ခံစာများကို ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်သည့် ပုံစံဖြင့်တင်ပြနိုင်စေရန် လေ့ကျင့်ပေးထားရမည်။ တခြားအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သော ရင်းမြစ်များမှာ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်သော style guide နှင့် အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏ အချက်အလက်ရင်းမြစ်တို့ဖြစ်သည်။ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ခြင်းကို ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်၏ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှုသုံးသပ်ရာတွင်ပါထည့်သွင်းထားနိုင်သည်။
(၇) သင်၏ ဝန်ထမ်းများကြား ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပါ။
သတင်းကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးသတင်းထောက်များ၊ အယ်ဒီတာများတိုးမြှင့် ခန့်ထားခြင်းသည် မတူကွဲပြားသော သတင်းများ၊ ရှုထောင့်များ၊ ဟန်ချက်များကို ရရှိစေပြီး အမျိုးသမီးပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ သင်၏ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများသည် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အလမ်းများ ရရှိအောင်လုပ်ဆောင် ပေးရမည်။ အမျိုးသားများလွှမ်းမိုးသောသတင်းခန်းတွင် တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ရန် ထောက်ပံ့ရေးစနစ်များပေးထားရမည်။
(၈) သင်၏ တိုးတက်မှုကို စစ်ဆေးပါ။
သင်မည်မျှတိုးတက်လာသည်ကို သိရှိခြင်းက အလွန်အရေးပါသည်။ ထိုသို့ သိရှိပါက ဘယ်သူ ဘယ်ဌာနတွင် အပြစ်အနာအဆာရှိသည်ကိုသိနိုင်သည်။ သင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်သည် အောင်မြင်ပါက ၎င်းကိုအဖွဲ့အစည်းအတွင်း တခြား ဌာနများနှင့် မျှဝေနိုင်သည်။ သင်ကမျှော်လင့်သလောက် တိုးတက်မှုမရှိလျှင် ၎င်းသည် သင်ပိုမိုကြိုးပမ်းအားထုတ်ရန်ခွန်အားကိုဖြစ်စေပြီး လိုအပ်ပါက နည်းဗျူဟာများကို ပြောင်းလဲရမည်ကိုသိရှိနိုင်သည်။ မည်သည့်နေရာတွင် သင်လိုအပ်ချက်ရှိနေသည်ကိုလည်းသိနိုင်သည်။
အောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲပါ
•	သင်၏သတင်းတွင် အမျိုးသမီးများကိုအရေးပါသော ကဏ္ဍမှပါဝင်ပါစေ •	အမျိုးသမီးများ၏ အသံနှင့် အမြင်များကို ထည့်သွင်းရေးသားပါ •	ကျား/မ ခွဲခြားဆက်ဆံသော၊ ချိုးနှိမ်သောဘာသာစကား ရုပ်ပုံများကို ရှောင်ရှားပါ •	သတင်းများက အမျိုးသမီးများကို ဆွဲဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပါ။ အမျိုးသမီးပရိသတ်၏အကြိုက်ကိုသိပါ •	သင်၏ တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးပါ
၁။ အဖွဲ့အစည်းတွင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ပေးမည့် အတွဲအစပ်ကို ရွေးပါ။
အကြောင်းအရာတွင် အမျိုးသမီးများကို အသားပေးဖော်ပြပါ။ ကျား၊မ ခွဲခြားနှိမ့်ချမှု နှင့် ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့် ဘာသာစကား နှင့် ရုပ်ပုံများ သုံးစွဲခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ တိုးတက်မှုကို တဆင့်ချင်းစစ်ဆေးပါ။ အမျိုးသားများအား ကိုယ်စားပြုခြင်းများကို လျှော့ချပါ။ စာစောင်တွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍသီးသန့်ဖန်တီးပါ။ အကြောင်းအရာကို ရိုးရှင်းသည့် အသုံးအနှုန်းများဖြင့်ရေးသားပါ။ ဇာတ်လမ်းအသစ်များတွင် အမျိုးသားများကို ပယ်ထုတ်ပါ။ အမျိုးသမီး များ၏ ဇာတ်လမ်းများဖော်ပြရန် သီးသန့်အချိန်သတ်မှတ်ပါ။ ကျား၊မ မျှတမှုမရှိသည့် အကြောင်းအရာများရေးသားသည့် သတင်းထောက်များ ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။ အရေးယူပါ။
၂။ အကြောင်းအရာတွင် ကျား၊မ မျှတမှုကိုမြှင့်တင်ရန် အဖွဲ့အစည်းတွင်းရှိ မည်သည့်အဖွဲ့က ဦးဆောင်ရမည်နည်း။
အမျိုးသမီးမီဒီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသာ အမျိုးသားမီဒီယာကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များသာ အဖွဲ့အစည်း၏ ဦးဆောင်သူများ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံရေးအဖွဲ့
မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ရေးသားထုတ်ဝေသည့် အကြောင်းအရာ များတွင် ကျား၊မ မျှတမှုကို မြှင့်တင်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ရမည့်အဆင့်များ
ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိရေးအတွက် အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆုံးပန်းတိုင်တော့မဟုတ်ပေ။ စစ်ဆေးပြီး သင်ရရှိလာသော အချက်အလက်များသည်ဝန်ထမ်းများကို လှုံ့ဆော်မှုပေးရာတွင်သုံးနိုင်သည်။ကျူးလွန်သော လူကိုတာဝန်ယူစေရာတွင် သုံးနိုင်သည်။သင်ရရှိထားသောအောင်မြင်မှုများကိုထိန်းသိမ်းထားရာတွင်သုံးနိုင်သည်။
အလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေးကိရိယာများသည် သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဝန်ထမ်းများအပေါ်အလုပ်ပိုမဖြစ်စေဘဲ ၎င်းတို့၏သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှု ရှိ၊ မရှိ လွယ်ကူစွာစစ်ဆေးနိုင်သည်။
Women in News သည် အခန်း ၅ တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်ပြ ကိရိယာများကိုအခြေခံပြီး သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသာသုံးသော software တစ်ခုကိုဖန်တီးထားသည်။ WIN သည် ၎င်းထောက်ပံ့ပေးသော နိုင်ငံများတွင်သတင်းများကို စစ်ဆေးရန် Gender Tracker ကိရိယာကိုသုံးသည်။ ၎င်းဖြင့် ခေတ်ရေစီးများနှင့် တိုးတက်မှုများကို WIN က စစ်ဆေးသည်။ ၎င်းကိုလက်ရှိတွင် WIN အဖွဲ့အစည်းကသာ အသုံးပြုသော်လည်း အနာဂတ်တွင် မီဒီယာလုပ်ငန်းများအတွက် ဝေမျှသွားရန် အစီအစဉ်ရှိသည်။
Gender Equality Tracker သည် သီးခြားနိုင်ငံတစ်ခုရှိ သတင်းအဖွဲ့အစည်း အတော်များများတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကိုယ်စားပြုမှုများကို စစ်ဆေးပေး နေသည်။ ထို software သည် အသစ်ထွက်ရှိလာသော သတင်းများကိုဖတ်ရှုပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နာမည်များ နာမ်စားများ မည်မျှပါဝင်သည်ကိုရေတွက်ပေးသည်။
Gender Equality Tracker နည်းတူ Informed Opinions ၏ Gender Gap Tracker သည် ကနေဒါနိုင်ငံရှိ အွန်လိုင်းသတင်းဝဘ်ဆိုက်များတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသား သတင်းရင်းမြစ်များကိုအချိုးအစား မည်မျှထည့်သွင်းသည်ကို အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် စာဖတ်သူများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ သတင်းဌာနများအား ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်း သည်။
Gendermeme သည် natural language processing ကို အသုံးပြုကာ သတင်းများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိ၊ မရှိကို ထဲထဲဝင်ဝင် စစ်ဆေးနိုင်သည့် လွတ်လပ်စွာ ရရှိနိုင်သော software ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အဖွဲ့အစည်းများက ကိုယ်ပိုင် စစ်ဆေးရေးကိရိယာ တည်ဆောက်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Her Headline သည် အားကစားသတင်းများတွင် ကျား/မ ခွဲခြားသော ဘာသာ စကားအသုံးအနှုန်းများကို မီးမောင်းထိုးပြသပေးသော Chrome browser extension ဖြစ်သည်။ ထို extension သည် ကျား/မ ခွဲခြားသော၊ ဘက်လိုက်သော စကားလုံးများ၊ စကားစုများရှာဖွေပေးပြီး ၎င်းတို့သည် ဘာကြောင့်ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်သည်ကို ရှင်းပြပေးသည်။ Her Headline သည် Cambridge University Press ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် ရေးဆွဲထားသော Unesco ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။
ကျား၊မ မျှတမှုအတွက် အွန်လိုင်းနည်းလမ်းများမှ အီလက်ထရောနစ်စာစောင်များနှင့် အခြေခံအသုံးပြုနည်းအများအထိ hi-fi နှင့် lo-fi ချည်းကပ်မှုများစွာရှိသည်။ အဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ ရွေးချယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ပိုမိုအချိန်ကုန်ပြီး အသေးစားစစ်ဆေးမှုများအတွက်သာ သင့်လျော်သော်လည်း Excel Spreadsheet ဖြင့် ကိုးကား ဖော်ပြခံရသူများကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် အလိုအလျောက် software များ သီးခြားဖန်တီးထားသော software များနည်းတူအသုံးဝင်ပါသည်။
၅၀ : ၅၀ စီမံကိန်း
BBC ၏ 50 : 50 စီမံကိန်းတွင် BBC’s 50:50 project ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့၏ သတင်းစာတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ရေးသားသူများကို ရေတွက်ပြီး လစဉ်ဝန်ထမ်းများအကြားမျှဝေပေးသည်။ အစီအစဉ်များက အမျိုးအစားစုံလင်သောကြောင့် တိုင်းတာစစ်ဆေးသော နည်းစနစ်များသည် မျှတမှုရှိစေရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားရသည်။
WIN GENEDER BALANCE METRICS
သင်သည် ဤလမ်းညွှန်တွင်ဖော်ပြထားသော စစ်ဆေးရေးအကြံပြုချက်များနှင့် WIN ၏ တိုင်းတာစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိုတိုင်းတာစနစ်များမှ ရွေးချယ်ပြီး သင့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုက်ညီအောင်ပြုပြင်နိုင်သည်။ သင်၏တိုးတက်မှု အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်စေရန် ရိုးရှင်းပြီးသုံးရလွယ်သော Excel Tool တစ်ခုကို WIN က ဖန်တီးပေးထားသည်။
ကျား၊မ မျှတမှုကိုတိုင်းတာရန် ကွဲပြားသည့်မက်ထရစ်များစွာလည်းရှိသည်။ အောက်ပါတို့မှာ ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်သည့် မူကွဲများဖြစ်သည်။ စာသားများကို သာမက ရုပ်ပုံများကိုပါ ခြေရာကောက်စစ်ဆေးရန် အရေးကြီးသည်။
အမျိုးသမီးများကို မည်မျှအသားပေးဖော်ပြထားကြောင်း စစ်ဆေးရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် ဖော်ပြသည့်အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ အရေအတွက်ကို နှိုင်းယှဉ်ရန်ဖြစ်သည်။ဖော်ပြချက်ဆိုသည်မှာ အမျိုးသမီး (သို့မဟုတ်) အမျိုးသားများကို ရည်ညွှန်းချက်အားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းတို့တွင် နာမည်၊ he, she, his, her စသော နာမ်စားများ ၊ Mr, Mrs, Miss, Ms, Sir, Lady, Dame စသော အခေါ်အဝေါ်များ၊ girlfriend, boyfriend, daughter, son, wife, husband စသော ကျား/မ ဖော်ပြသောနာမ်များပါဝင်သည်။ သင်သည် နာမည်တစ်ခုတည်းကိုဖြစ်စေ he, she စသော နာမ်စားတစ်ခုတည်းကိုဖြစ်စေရေတွက်နိုင်သည်။
သင်၏သတင်းတွင် အမျိုးသမီးများကို အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ် အသုံးပြုသော အရေအတွက်နှင့် အမျိုးသားများကို အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်သုံးသော အရေအတွက်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး အမျိုးသမီးများအား အသားပေးဖော်ပြမှုကို တိုင်းတာနိုင်သည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်ဆိုသည်မှာ သင်၏သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခု သို့မဟုတ် များစွာထဲမှတစ်ခုကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် သတင်းဆောင်းပါးအတွင်း ကိုးကားခံရသူ မေးမြန်းခံရသူ (သို့မဟုတ်) ထပ်တလဲလဲ ဖော်ပြခံရသူလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သတင်းဆောင်းပါးတွင် အဓိကဇာတ်ကောင် တစ်ယောက်မကပါဝင်နိုင်သည်။
အမျိုးသမီးများကို ဓာတ်ပုံများတွင် အဓိကဖော်ပြခြင်း
ဓာတ်ပုံများတွင် အမျိုးသမီးများကို အလေးပေးဖော်ပြခြင်း ရှိ၊ မရှိ ကို အမျိုးသမီးပုံ အချိုးအစားမည်မျှပါဝင်သည်၊ အမျိုးသမီးများကို တစ်ဦးတည်း (သို့) အဓိက ဖော်ပြသလော ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။ အဓိကဖော်ပြသည်ဆိုသည်မှာ ဓာတ်ပုံတွင်ပါဝင်သော တစ်ခုတည်းသော အဓိကဖော်ပြချက် (သို့) ဖော်ပြချက် များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ရမည်။ အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံသည် နောက်ခံတွင်ပါဝင်နေ၍မရပါ။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတွင် အဓိကဖော်ပြချက် တစ်ခုမကပါဝင်နိုင်သည်။
အမျိုးသမီး ရင်းမြစ်များထံမှ သတင်းရယူခြင်း
အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်များ အရေအတွက်ကို တိုင်းတာခြင်းသည် အမျိုးသမီးများ၏ အသံနှင့် အမြင်များပါ၀င်မှုကိုသိရှိနိုင်သည်။ သတင်းရင်းမြစ်ဆိုသည်မှာ အတွေ့အကြုံနှင့် အမြင်များကိုပြောပြခြင်း၊ မျက်မြင်သက်သေ၊ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ပါဝင်သည်။ တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ကိုးကားထားသော ပြောစကားများပါဝင်သည်။ ၎င်းကို ရေတွက်ခြင်းဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်ပြောစကားများကိုသာ ရေတွက်လျှင်လွယ်ကူသည်။ လူတစ်ဦး၏ပြောစကားကို အကြိမ်မည်မျှ ကိုးကားသည်ဖြစ်စေ ပြောကြားသူကို တစ်ကြိမ်သာရေတွက်ရမည်။ တိကျသောအတိုင်းအတာကို ရရှိစေရန် ကျား/မ မည်သူမည်ဝါမသိသော သတင်းရင်းမြစ်များနှင့် အများကိန်းများကို ဖယ်ထုတ်ထားရမည်။
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် အမျိုးသမီး သတင်းရင်းမြစ်များ
သာမန်ရင်းမြစ်များထက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ရင်းမြစ်များကို ရယူရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် ရယူသောသတင်းရင်းမြစ် အမျိုးအစား ကျား/မ ပါဝင်ခြင်းမညီမျှမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် သတင်းရင်းမြစ်ဆိုသည်မှာ ပညာရပ်တစ်ခုကို ကျွမ်းကျင်သူများ၊ သြဇာအာဏာရှိသူများကို တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ ကိုးကားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် တရားသူကြီး၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ စီအီးအို၊ သီးခြားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သော စီးပွားရေးသမား၊ နိုင်ငံရေးသမားနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ အကြီးအကဲ စသည်တို့ပါဝင်နိုင်သည်။ ပညာရှင်တစ်ဦးကို အကြိမ်မည်မျှ ကိုးကားသည်ဖြစ်စေတစ်ကြိမ်သာရေတွက်ရမည်။
သတင်းရေးသားသူ၏ အသံသည်လည်း အရေးပါသောအချက်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးသတင်းရေးသားသူ အရေအတွက်ကို တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသတင်းကဏ္ဍ အမျိုးအစားလိုက်၍သော် လည်းကောင်း၊ သတင်းဌာနတစ်ခုလုံးအတွက်သော်လည်းကောင်း သီးခြားတိုင်းတာပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အရေးပါသော သတင်းများဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးသတင်းရေးသား သူများနည်းပါးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတင်းရေးသားသူ ကျား/မ မည်သူမည်ဝါမသိသော သတင်းများကို ထည့်သွင်းရေတွက်ရန်မလိုပေ။
ကျား/မ ခွဲခြားသောပုံသေမှတ်ယူသောဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းများ
သတင်းတွင် ကျား/မ ခွဲခြားသော ပုံသေမှတ်ယူသောဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းများပါဝင်မှုရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် ကျား/မ ခွဲခြားမှုဆိုသည်ကို နားလည်ထားရမည်။ အခန်း ၁၀ ကို ကြည့်ရှုပါ။ ၎င်းသည် စစ်ဆေးရန်ခက်ခဲပြီး တွေးတောဆုံးဖြတ်ချက်လိုအပ်သည်။ သတင်းထဲတွင် ယင်းသို့သော ဘာသာစကားမည်မျှပါဝင်သည် ကိုရေတွက်ရမည်။ မရည်ရွယ်သော အသေးစား ကျား/မ ခွဲခြားသည့် ဘာသာ စကားနှင့် အလွန်အကျူးစော်ကားသည် နှိမ်ချသော ဘာသာစကားတွင် ကြီးမားသော ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် ၎င်းတို့ကိုခွဲခြားစစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်သောအရေအတွက်အရ သတင်းဆောင်းပါးကို အမှတ်ပေးနိုင်သည်။
ကျား/မ ခွဲခြားသော ဓာတ်ပုံများ
ကျား/မ ခွဲခြားမှုကို တိုင်းတာစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဓာတ်ပုံများကိုလည်း အသုံးပြု နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများကိုနှိမ်ချသော ကျား/မ ခွဲခြားသော ဓာတ်ပုံများကို ရေတွက်နိုင်သည်။ သေးငယ်သော (သို့) အလယ်အလတ် (သို့) အကြီးစားခွဲခြား မှုများကို သီးခြားရေတွက်နိုင်ရန် တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုကို ပြုပြင်အသုံးချနိုင်သည်။
ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို အခြေရာခံရာတွင် စဉ်းစားရမည့် အချက်များ
လုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သူက မောင်းနှင်နေသလဲ၊ အောင်မြင်မှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် မည်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲဆိုသော အချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရည်မှန်းချက်ကို ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ဍမှ လူများကချမှတ်ပေးလျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေး တန်ဖိုးများကို နားလည်ထားရမည်။ ဝန်ထမ်းအဆင့်တိုင်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အရေးကြီး သည်။
အဖွဲ့အစည်းအများစုသည် ငွေကြေးအားဖြင့် ဆွဲဆန့်သုံးစွဲနေကြရသည်ဖြစ်ရာ ဤသို့လုပ်ဆောင်ရန် ဘတ်ဂျက်အလုံအလောက်မရှိတတ်ပေ။ သင့်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်မည့် နည်းလမ်းကိုသာ အချိန်နှင့် ရင်းမြစ်ရှုထောင့်မှ စဉ်းစားပြီးရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပါ။
၎င်းသည် အရေးပါသည်။ တစ်ယောက်တည်းက လုပ်မှာလား။ လူအများ သို့မဟုတ် အားလုံးပါဝင်လုပ်ဆောင်မှာလား။
သင့်အနေဖြင့် လူဖြင့်ရေတွက်သော နည်းကိုသုံးမှာလား။ အလိုအလျောက် ကိရိယာများကိုသုံးမှာလား ရွေးချယ်ရလိမ့်မည်။ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည် သင်က ပုံနှိပ်မီဒီယာကို ဆန်းစစ်သလား၊ အွန်လိုင်းမီဒီယာကို ဆန်းစစ်နေသလား ဆိုသည့် အပေါ်မူတည်သည်။
ဘာတွေနဲ့ တိုင်းတာမှာလဲ။ သင်၏ နမူနာအရွယ်အစား ပမာဏကဘာလဲ။ ပုံနှိပ် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းလား။ အွန်လိုင်းဟုဆိုရာတွင် အလိုအလျောက် ခြေရာခံစနစ်များကို ပိုမိုလွယ်ကူစွာသုံးနိုင်သည်။ သင်၏ Home Page ကို ကြည့်ရုံပဲလား။ သတင်းအမျိုးအစား အားလုံးကိုကြည့်မှာလား။ အမျိုးအစားအလိုက် တိုင်းတာစစ်ဆေးခြင်းသည် ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှု ရလဒ်ကို မည်မျှတိကျ စေလိုပါသနည်း။ နမူနာကသေးငယ်လေလေ သင်၏အကြောင်းအရာ တစ်ခုလုံးတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်မှုနည်းလေပင်ဖြစ်သည်။
အချက်အလက်တွေကို သင်ဘယ်နှစ်ကြိမ်နှုန်းနှင့် ကောက်ယူသလဲဆိုသော အချက်သည် ယင်းစီမံကိန်းကို ဘယ်သူကပြုလုပ်သလဲ။ ၎င်းတို့မှာ အချိန်နှင့် ရင်း မြစ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ စီမံကိန်း၏ နယ်ပယ်က ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်သလဲ ဆိုသော အထက်ပါအကြောင်းတရားများအပေါ်မူတည်သည်။
သင်၏ အချက်အလက်များကို ဘယ်လိုကောက်ယူပါသလဲ။ မည်သူက ဦးဆောင်ထိန်းသိမ်းပါသလဲ။ ဗဟိုကထိန်းချုပ်သော အပိတ် database လား။ စုပေါင်း ထိန်းသိမ်းသော collaborative database လား။
သင် စတင်လုပ်ပြီဆိုလျှင် သင်၏ အချက်အလက်များကို အတွင်းစည်းမှာသ ထားခြင်းကစိတ်ချရပါသည်။ အထက်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေး အရာရှိကြီးများအတွင်း မှာသာ သိထားရမည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်၏ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါသည်။ သတင်းရေးသားသူ၊ တည်းဖြတ်သူများက ပြဿနာနှင့် တိုးတက်မှုများကိုသိရှိထားရပါမည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အဖွဲ့ အစည်းများသည် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရာတွင် တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ကိုသိရှိစေနိုင်သည်။ အပြောင်းအလဲများ မြင်တွေ့လာရပြီဆိုလျှင် သင်၏ ကိန်းဂဏာန်းများကို အများသိအောင်ဝေမျှခြင်းက နှစ်ထပ်ကွမ်းအကျိုးဖြစ် ထွန်းနိုင်သည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း သင်၏နမူနာအတိုင်းလိုက်လုပ်ရန် တွန်းအားပေးရာရောက်သည်။ သင်၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် သတင်းထောက်များအားအောင်မြင်မှုရအောင် အပြုသဘောအားပေးရာရောက်သည်။
ဤစီမံကိန်းကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန် တစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လူတစ်ဖွဲ့ ထားရှိသင့်ပါသည်။ ဌာနတွေကို လက်ခံနားလည်လာအောင်လုပ်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ အထက်ကချပေးလိုက်သော နည်း ဥပမာ ကျား/မ ညီမျှစွာ ပါဝင်ရေး တည်းဖြတ်မှုပေါ်လစီသစ်၊ တဖြည်းဖြည်းတိုး၍ လုပ်သောနည်း သို့မဟုတ် ဌာနတွေ အဆင်သင့်ဖြစ်သောအခါမှ သူတို့သဘောနှင့် သူတို့လက်ခံလုပ်ကိုင်လာကြသောနည်း၊ စိတ်ပါသော ဆန္ဒရှိသော ဌာနတစ်ခုနှင့် အရင်စ ကြည့်ပါ။ BBC ၏ 50:50 စီမံကိန်းတွင် ဤနည်းကိုသုံးခဲ့ပါသည်။ ထိုအလုပ်ကို စတင်လုပ်ဆောင်သော BBC ၏ Outside Source ဟူသော အစီအစဉ်က သူ၏ထုတ်ဝေမှုများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေး တိုးတက်လာသောအခါတခြားသော အစီအစဉ်များကလည်း မိမိသဘောအရ လိုက်ပါလာကြသည်။
၁။ ကျား၊မ မျှတမှုအကြောင်းအရာအတွက် မဟုတ်သည့် မက်ထရစ်ကိုရွေးပါ။
အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကို ဖော်ပြသည့်ရာခိုင်နှုန်း အမျိုးသမီး စာရေးသူနှင့် အမျိုးသားစာရေးသူရာခိုင်နှုန်း ကျား၊မ ဆိုသည့် စကားလုံးအရေအတွက် အဓိကအမျိုးသမီးဇာတ်ကောင်ရာခိုင်နှုန်း
၂။ ကျား၊မ မျှတမှုအကြောင်းပြောဆိုရာတွင် ကျား၊မ မျှတသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခု၏ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း ဦးတည်ချက်မှာအဘယ်နည်း။
ကျား၊မ မျှတမှုကို ခြေရာကောက်ခြင်း
Lo-fi၊ hi-fi ချည်းကပ်မှုများနှင့် မက်ထရစ်များအသုံးပြုကာ ရေးသားဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာများတွင် ကျား၊မမျှတမှုကို ခြေရာကောက်ခြင်း
ကျား၊မ ကွဲပြားမှု နှင့် စီးပွားရေးအရသက်ရောက်မှု
ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှရေးအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ
တိုးတက်မှုရှိသည့်အပြင် နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူအခွင့်အရေးနှင့် အခွင့်အလမ်း များရှိသည့်နိုင်ငံဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ထားသည့် နော်ဝေးနိုင်ငံ၌ပင် ကျား/မ မညီမျှစွာပါဝင်မှုမှာ လက်တွေ့လောကတွင် ရှိနေသေးသည်။ အေမီဒီယာ (Amedia) အမည်ရှိကုမ္ပဏီက မိမိတို့၏ စာစောင်ကိုပင် အခြေခံလေ့လာခဲ့ရာတွင် အထက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျား/မ ပိုမိုညီမျှစွာ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ကို ပီပီပြင်ပြင်သက်ဝင်စေသည်ဟု ၎င်းတို့ယုံကြည်ထားသည်ကို သက်သေထူနိုင်သည့် ထောက်အထား ကိုလည်း အဆိုပါစာစောင်ထုတ်ဝေသူများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများရေးသားထားသည့် သတင်း ဆောင်းပါးများ များများစားစားပါဝင်သည့် စာစောင်များကို အမျိုးသမီးများက ပိုမိုဖတ်ရှုသည်ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း ၂၁ လကြာ ကာလအတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည့် သတင်းစာ ၁၉ စောင်မှ သတင်းဆောင်းပါးများကို စိစစ်လေ့လာပြီးနောက် အဆိုပါ ထုတ်ဝေသူများကသိလာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ၂၁ လကြာကာလအတွင်း ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာရာတွင် သတင်းစာ ၆၄ စောင်မှ သတင်းဆောင်းပါးပုဒ်ရေ ၆၆၀,၀၀၀ ကို အချက်အလက်ဆိုင်ရာ သိပ္ပံနည်းပညာနှင့် အလိုအလျောက်အမျိုးအစားခွဲသည့် နည်းစနစ်တို့ဖြင့် အထူးအားစိုက်လေ့လာခဲ့ရာမှ ဤသို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် ဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားအား ပုံမှန်စိစစ်သည့် နည်းစဉ်များကိုအသုံးပြုကာ အေမီဒီယာသည် သတင်းဆောင်းပါးများပါ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များကိုခွဲခြားခြင်း၊ အရေအတွက်မှတ်သားခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သတင်းတွင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် ကိုးကားရေးသားထားသည်များကို ထုတ်ဝေသူများက လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်လား၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းအမည်လား ဟူသည်ကို ကနဦးခွဲခြားနိုင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် နီနာ(Nina)အမည်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် နီနာ အမည်ရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ဒုတိယအဆင့်တွင် သိရှိထားသည့်အမည်များကို နော်ဝေးနိုင်ငံ လူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက်စာရင်းဇယားပါ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အမည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏ ပင်မအချက် အလက်စုဆောင်းမှုဇယားတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးနောက် ထုတ်ဝေသူများသည် အချက်အလက်များ၏ အရပ်ရပ်သောအနေအထားများကို ခွဲခြားစိစစ်နိုင်ခဲ့သည်။
သတင်းဆောင်းပါးပုဒ်ရေ ၆၆၀,၀၀၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အမည်များတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်သာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ သည်။ သတင်းစာအမည်ကွဲများထဲတွင် အမည်အလိုက် တစ်စောင်ချင်းစီကို စိစစ် လေ့လာသည့်အခါတွင်မူ တစ်စောင်နှင့်တစ်စောင် သိသိသာသာ ကွဲပြားသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သတင်းစာတိုက်ငယ်များမှ ထုတ်ဝေသည့်စာစောင်များတွင် သတင်းစာတိုက်ကြီးများမှ ထုတ်ဝေသည့်စာစောင်များထက် ကျား/မ ပိုမို၍ ညီမျှစွာပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ယခင်က အမြင့်ဆုံးနေရာတွင်ရှိခဲ့သော စာစောင်တွင် အမျိုးသမီး နာမည်ပါဝင်မှု ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အကြောင်းအရာမတူသည့် သတင်း ဆောင်းပါးများတွင် ဆန်းစစ်လေ့လာရာ၌ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုသည် အကြောင်းအရာကိုလိုက်၍ ကွဲပြားမှုရှိသည်ကို ပို၍အထင်အရှားတွေ့ရသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ သတင်းဆောင်းပါး ၃၀,၀၀၀ ခန့်တွင် အမျိုးသမီးအမည် ပါရှိမှုမှာ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး “ဘေးအန္တရာယ်၊ အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့် မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ” တွင်မူ အမျိုးသမီးအမည်ပါရှိမှုမှာ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း သာရှိသည်။ လူမှုအသိုက်အဝန်းများ၊ မိသားစုများနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာများကို ရေးသားသည့် လူမှုရေးကဏ္ဍ သတင်းဆောင်းပါးများတွင်သာ အမျိုးသမီးအမည်များ အများဆုံးပါဝင်ကြသည်။
ကျား/မ ပါဝင်မှုမညီမျှခြင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများက လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများကို မိမိအလိုကျနေရာချခန့်ထားခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ထိုသို့ အချိုးအစားမတူညီခြင်းမှာ မိမိအင်တာဗျူးလို သူများကိုသာ ရွေးချယ်တွေ့ဆုံလေ့ရှိသော ဂျာနယ်လစ်များ၏ ကျား/မဆိုင်ရာ ဘက်လိုက် ရွေးချယ်မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
နောင်ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်များတွင် အေမီဒီယာမှ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် အယ်ဒီတာများကို ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ လက်တွေ့လောကရှိ စာဖတ်သူများထဲတွင် ကျား/မ ကွာဟချက်ရှိသည်ကို အသိပေးထားသော အထူးပြုစုထားသည့် အချက်အလက်များကို တစ်ချို့အယ်ဒီတာအဖွဲများက အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။ See AMEDIA. AMEDIA)
ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို ခြေရာခံစစ်ဆေးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ
ဘီဘီစီသတင်းဌာနသည် ကျား/မ အချိုးအစား ၅ဝး၅၀ ဖြစ်နေစေရေး စိန်ခေါ် ချက်များ၏ သက်ရောက်မှုရလဒ်များကို နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သည်။ ဘီဘီစီမှ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ ရို့စ်အက်တကင်က ၎င်းတာဝန်ယူတင်ဆက်နေသည့် Outside Source အမည်ရှိရုပ်သံအစီအစဉ်တွင် သတင်းရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုသူများထဲ၌ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှောင်း ပိုင်းတွင်စတင်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အက်တကင်နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့သည် ထုတ်လွှင့်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင်ပါဝင်သူများ၊ ထုတ်လွှင့်သည့် အကြောင်းအရာအမျိုးအစားနှင့် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုနည်းသည့် ဇာတ်လမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက် များ ကောက်ယူခဲ့ကာ အရည်အချင်းမြင့်မားသည့် အမျိုးသမီးများကို သတင်းရင်းမြစ်အဖြစ် ထည့်သွင်းကာ ၎င်းတို့ဆက်သွယ်ရမည့် ကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သတ်မှတ်လများအတွင်း အဆိုပါပရိုဂရမ်တွင် အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်ပါဝင်မှုမှာ လေးလကြာကာလအတွင်း ယခင် ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၅၁ ရာခိုင်နှုန်းသို့မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘီဘီစီ၏ ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်များမှာ နှစ်နှစ်အတွင်း အဆင့်သတ် မှတ်ချက် ၂ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျသွားခဲ့သော်လည်း Outside Source အစီအစဉ်၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာမူ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘီဘီစီက ထုတ်လွှင့်နေသော အစီအစဉ် ၅၀၀ ကျော်မှာ ၅ဝး၅၀ ဟုခေါ် တွင်သော ပရိုဂျက်တွင်ပါဝင်လာခဲ့တော့သည်။ 50:50ထို့အပြင် အဆိုပါစိတ်ကူးကို အခြားမီဒီယာ ကုမ္ပဏီ ၂၀ ကျော်ကလည်း အတုယူဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါ ၅ဝး၅၀ ပရိုဂျက်ကို ဆောင်ရွက်သည့်နည်းစနစ်မှာ အလွန်ပင်ရိုးရှင်းလှသည်။ အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ၎င်းတို့အစီအစဉ် သဘောသဘာဝ နှင့် ကိုက်ညီသည့် ချိန်ဆမှုစနစ်ကို အသုံးပြုပြီးအစီအစဉ်အတွက် လိုအပ်သော ကျား/မ ညီမျှစွာ ပါဝင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလွတ်လပ်စွာကောက်ယူကြသည်။ အဆိုပါအချက်အလက်များကို အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်မည့်သူအားလုံးထံ လစဉ်မျှဝေပေးသည်။ အစီအစဉ်များတွင် သတင်း၊ ဂီတမှသည် နိုင်ငံရေးအထိပါဝင်ရာ ထုတ်လွှင့်မည့် အစီအစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ကိုက်ညီသည့် ချိန်ဆမှုစနစ်ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုတွင် အသံလွှင့်ဌာနက တာဝန်ချထားသည့် ရုပ်သံတင်ဆက်သူဝန်ထမ်းကို ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းမပြုဘဲ ထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့က မည်သည့်သူကိုသာတင်ဆက်ခိုင်းမည်ဟု ရွေးချယ်သည့်အခါတွင်မူ တင်ဆက်သူကိုပါထည့်သွင်းရေတွက်သည်။ နည်းစနစ်တစ်ခုကိုချမှတ်ရာတွင် ဝန်ထမ်းများက ပါဝင်အကြံပြုခွင့်ရှိပါက ၎င်းတို့ သည်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိပြီး၊ မိမိတို့ကောက်ယူခဲ့သည့် အချက်အလက်များကို ပိုမို အသုံးပြုလေ့ရှိကြောင်း အထက်ပါနည်းစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ Atkin ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
အချက်အလက်များ ကောက်ယူစုဆောင်းခြင်းကြောင့် အစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရေး အဖွဲ့များသည် အချက်အလက်များပါ ကိန်းဂဏန်းအရေအတွက်ကို ယုံကြည်မှုရှိ ကြသည်မှန်သော်လည်းအဆိုပါ အချက်အလက်သက်သက်သည် ပရိုဂျက်အဆုံး စွန်ပန်းတိုင်မဟုတ်ပေ။ ထိုမျှမကအဆိုပါ အချက်အလက်များသည် ထုတ်လွှင့်မည့်အစီအစဉ်များတွင် အမျိုးသမီးအရေအတွက် ပါဝင်မှုများပြားလာစေရန် အဖွဲ့ဝင်များအား အပြောင်းအလဲလုပ်လိုစိတ်ကိုလည်း ဖန်တီးပေးသည်။
Financial Times (FT) သတင်းစာကလည်း ၎င်းတို့၏ အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ် အရေအတွက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်တွက်ဆခဲ့ရာ သိသိသာသာ နည်းပါးနေပြီး စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးကြသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအချက်ကို စိုးရိမ်စရာတစ်ခုအဖြစ်သာမက စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခု အဖြစ်ပါ ရှုမြင်လာသဖြင့် သတင်းစာအပေါ် အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်၏ အမြင်ကိုပြောင်းလဲရန် ပရောဂျက်အများအပြား ဆောင်ရွက်လာနိုင်သည့်အပြင် အမျိုးသမီးပရိသတ်၏ စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုမှုပိုရှိလာကာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင်လည်း ဓလေ့စရိုက် ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ထိုပရောဂျက်များထဲတွင် JanetBot ပရောဂျက်လည်း ပါဝင်သည်။ ထို JanetBot ပရိုဂျက်မှာ FT တွင်အသုံးပြုသည့် ဓာတ်ပုံများတွင် ပါဝင်သောသူများ၏ မျက်နှာကို ကျား/မ စိစစ်ခွဲခြားပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲက ကျား/မ ခွဲခြားမှုကို မော်နီတာတွင် အရောင်ပါအလံများဖြင့်ပြသကာ အယ်ဒီတာများမြင်နိုင်စေရန် အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အပြင် Slack ချင်နယ်မှတစ်ဆင့် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင် မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း ဖော်ပြပေးသည်။
အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင်မူအဆိုပါ JanetBot ပရောဂျက်ကို အသုံးပြုရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပင်မစာမျက်နှာ၌ဖော်ပြသော ဓာတ်ပုံများတွင် ကျား/မ ပါဝင်မှု မမျှတသည်ကိုယခင်ကထက် သတိထားမိလာစေရန်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများကို အသားပေးရိုက်ကူးသော ဓာတ်ပုံအရေအတွက်ပိုမိုပါဝင်လာအောင် ဂျာနယ်လစ် များအား နှိုးဆော်ရန်လည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲသည် FT သတင်းစာ၏ အမျိုးသမီးပရိသတ်များနှင့် အပြန်အလှန် ပိုမိုထိတွေ့ခွင့်ရအောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ အမျိုးသမီးရုပ်ပုံများဖြင့် ဖော်ပြသောသတင်းဆောင်းပါး များကို အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုအာရုံစိုက်ကြည့်ရှုလေ့ရှိ ကြောင်း FT ကပြုလုပ်သည့် ဆန်းစစ်လေ့လာ မှုတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ JanetBot ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် FT သည် လေ့လာမှတ်သားစရာ အများအပြား ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကို စတင်အသုံးပြုသူများအတွက်မူ စသုံးစဉ်က တည်းက ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သုံးစွဲမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့ဖူးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုဆော့ဖ်ဝဲကို ရေးသားပြီးသည်နှင့် အသုံးပြုသူများအတွက် အထောက်အကူမပြုသည့် အပိုင်း များကို ဖယ်ထုတ်ရန်မလွယ်ကူသဖြင့် အရင်းအမြစ် အကန့်အသတ်ကြောင့် JanetBot ဆော့ဖ်ဝဲတွင် အထက်ပါကိစ္စကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။
အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် JanetBot ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုသည့် ရည်ရွယ် ချက်မှာယခုအခါ အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက် ရန်ထက် သတင်းခန်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသော ဂျာနယ်လစ်များကို ကျား/မ ညီမျှ စွာပါဝင်မှုရှိစေရေးသတိပိုမိုထားမိစေရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုအချက်ကြောင့် ဂျာနယ်လစ်များအား သတင်းဆောင်းပါး စတင်ရေးသားစဉ်ကာလကပင် သတင်း ဓာတ်ပုံအသုံးပြုရာ၌ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာစေခဲ့သည်။ သတင်းစာပါစာရေးသူများတွင် ကျား/မ ပိုမိုညီမျှစွာပါဝင်မှုရှိစေရန် FT သည် အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုပင် အသုံးပြုကာစာရေးသူ ကျား/မ အရေအတွက်ကို ခွဲခြားရန်လည်း စမ်းသပ်လျက်ရှိသည်။
အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုထည့်သွင်းနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ
SOUTH CHINA MORNING POST သတင်းဌာန (SCMP ) သည် ကုမ္ပဏီတစ်ခု လုံးတွင်ပြုလုပ်သည့် ပရောဂျက်များထဲတွင် အမျိုးသမီးပရိသတ်ပိုမိုရရှိစေရန် တစိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်သည့်အပြင် ထိုသတင်းဌာနမှထုတ်ဝေသည့် စာစောင်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုထင်သာမြင်သာ တွေ့မြင်ရအောင် ထည့်သွင်းဖော်ပြလာသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲအကောင်အထည် ဖော်မှုကို SCMP က ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သော Hackathon ပရောဂျက် ဆောင်ရွက်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Hackathon ပရောဂျက်သည် စာဖတ်သူများတွင် ကျား/မ ကွာဟချက်ရှိသည်ကို မီးမောင်းထိုးဖော်ပြထားသည့်အပြင် သတင်းဆောင်းပါးများ၌ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သတင်းရင်းမြစ် အလွန်အမင်းကွာဟနေကာ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ် ရှာရခက်သည်ကိုပါဖော်ပြထားသည်။ အဆို ပါပရိုဂျက်မှ တွေ့ရှိချက်များကိုအခြေခံကာ SCMP သည် လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုတွင် SCMP သည် စာဖတ်သူများ၊ မိတ်ဖက်သတင်းဌာနများနှင့် ပြင်ပသတင်းရင်းမြစ်များအား ၎င်းတို့ထံ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အမျိုးသမီးအမည် များကို ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းပုံစံတစ်ခုမှတစ်ဆင့်ဖော်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ သည်။ အဆိုပါ အွန်လိုင်းပုံစံကို တိုက်ရိုက်ဖြန့်ဝေသည့်အပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် ၎င်းတို့ သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်သော သတင်းလွှာများတွင်လည်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အခြားသတင်းဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သောကြောင့် SCMP သည် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော အကြံဉာဏ်များကိုရရှိခဲ့ကာ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ကြုံတွေ့ရသည့် ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်လည်း အဆိုပါအကြံဉာဏ်များက အထောက်အကူပြုခဲ့ည်။ “မိမိတို့အတွေ့အကြုံတွေကို မျှဝေပေးလိုတဲ့ အခြားအဖွဲ့တွေထံ ဆက်သွယ်ခဲ့လို့ ရလာတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့် ကျွန်မတို့စိတ်ကူး ကောင်းတွေရခဲ့တယ်” ဟု SCMP ၏ ဒီဂျစ်တယ်အယ်ဒီတာ လူရာဝန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီလိုနယ်ပယ်မှာ သတင်းဌာနတိုင်းအရင်ကထက် ပိုကောင်းလာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကပြိုင်ပွဲဆိုတာမျိုးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အဲဒါက ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့ သတင်းမီဒီယာလောကကို တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တာမျိုးသာဖြစ်ပါတယ်။”
ဘလွန်းဘတ် (BLOOMBERG) သတင်းဌာနသည်လည်း ၎င်း၏အွန်လိုင်းနှင့် ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုများတွင် အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်များ ပိုမိုပါဝင်လာစေရန် ဌာနတစ်ခုလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများကို အခြားသတင်းဌာနများကဲ့သို့ပင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၌ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ရှိ အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသော ဂျာနယ်လစ် ၂,၇၀၀ ဦးနှင့် ဆန်းစစ်လေ့လာသူများအား သတင်းဌာနတစ်ခုလုံးက အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာဘေ့စ်ထဲတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ရန် ၎င်းတို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာ နယ်ပယ်ရှိ အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ ဘလွန်းဘတ် သတင်းဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများ၌ အမျိုးသမီးအမည် ၅၀၀ ခန့်ကို ဖော်ပြနေရာမှ ယခုအခါ အမည်ပေါင်း ၂,၃၀၀ ကျော်ထိဖော်ပြလာပြီဖြစ်သည်။ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားရန် ၎င်းတို့၏ အလုပ်ရှင်အသီးသီးထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရထားသော အမျိုးသမီးအရေအတွက်များပြားလာစေရန်နှင့် အဆိုပါအမျိုးသမီးများအား မီဒီယာသင်တန်းများပေးရန်ကိုလည်း ဘလွန်းဘတ်သတင်းဌာန ၎င်းတို့၏ NEW VOICES ပရိုဂျက်မှတစ်ဆင့်ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ထိုပရိုဂျက်ကို တစိတ်တစ်ဒေသ အကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့် ဘလွန်းဘတ်သတင်းဌာနသည် ရာထူးကြီးသည့်အမျိုးသမီးများ နှင့် ထိပ်တန်းငွေရေးကြေးရေး ကုမ္ပဏီများမှ အမှုဆောင်အမျိုးသမီး အသီးသီးကို မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးသင်တန်းများပေးရန် ကမ်းလှမ်းသည့်အပြင် အဆိုပါ သင်တန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း ကျခံပေးလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နယူးယောက်၊ ဆန်ဖရန်ဆစ်စကို၊ တိုရန်တို၊ လန်ဒန်၊ ဒူဘိုင်း၊ မွန်ဘိုင်း၊ ဟောင်ကောင်နှင့် ဆစ်ဒနီမြို့များတွင် အမျိုးသမီးအမှုဆောင် ၁၂ ဦး အတွက် သင်တန်းစရိတ်များကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဘလွန်းဘတ်သတင်းဌာနကကျခံခဲ့သည်။
Ringier Group, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ
ရိန်းဂျားဂရု (Ringier Group) သတင်းဌာနသည် EqualVoice အမည်ရှိပရောဂျက်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် မိမိကုမ္ပဏီအတွင်း၌ အရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရိန်းဂျားမီဒီယာ၏ သတင်းဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များတွင် ဖော်ပြသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အချိုးအစားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးသည့် EqualVoice Factor ခေါ် ရေတွက်ဖော်ပြသည့်ဆော့ဖ်ဝဲမှာ ထိုပရိုဂျက်တွင် အဓိကအသုံးပြုသောနည်းလမ်းပင်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပရိုဂျက်မှာ ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကို ခွဲခြားရေတွက်ပေးရုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း၊ အထူးထုတ်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင် ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှမှုကို အလေးပေးသော အွန်လိုင်း ချန်နယ်များ (ခေါင်းစဉ်အားလုံးတွင်) ထုတ်လွှင့်ခြင်းစသည့်အစီအစဉ်များကိုပါထည့်သွင်းထားသည်။ သတင်းဌာနတစ်ခုလုံး အသုံးပြုနိုင်သည့် အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ စာရင်းကိုလည်းလက်ရှိတွင်ပြုစုလျက်ရှိပြီးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အမှန်တကယ်အခြေအနေများကို ဖော်ပြသည့်ဓာတ်ပုံများကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်ရိုက်ကူးကာ အဆိုပါဓာတ်ပုံများဖြင့် ဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်လည်းနှိုးဆော်ထားသည်။
ရိန်းဂျားသတင်းဌာန၏ ထုတ်ဝေသူ မိုက်ကယ်ရိန်းဂျား နှင့် စီအီးအို ဖြစ်သူ မတ်ဝယ်ဒါတို့ကအဆိုပါ EqualVoice ပရောဂျက်၏ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူပြီး ရိန်းဂျားဂရုအမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် အကြံပေးအဖွဲ့တို့က အထောက်အကူများပေးလျက်ရှိသည်။
ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေးကို မျက်ချည်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပြီး ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍လည်းအဖွဲ့အစည်းတွင်း သိနားလည်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အပြင် FT သည် အမျိုးသမီးပရိသတ်များ ပိုမိုစိတ်ဝင်တစားအာရုံစိုက်မှုရှိလာစေရန် သတင်းဆောင်းပါးများတွင်လည်း စမ်းသပ်ပြောင်းလဲမှုအများအပြား ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးစာဖတ်သူများက ၎င်းတို့စိတ်ဝင်စားနှစ်သက်သည်ဟုဆိုသော တင်ပြပုံနှင့် အကြောင်းအရာများပါဝင်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများထည့်သွင်းထားသည့် Long Story Short ဟု အမည်ပေးထားသောသတင်းလွှာဖြင့်လည်း FT က အမျိုးသမီးပရိသတ်ကို ဦးတည်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ အလုပ်များသည့်အမျိုးသမီးများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားသော အဆိုပါသတင်းလွှာတွင် ထင်ရှားသည့်သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် ဖတ်စရာအကောင်းဆုံး အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းထားကာ ထိုသတင်းလွှာကို သောကြာနေ့တိုင်း အီးမေးလ် ဖြင့်ပေးပို့ခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းလွှာ၏ အဆင်အပြင်များမှာလည်း FT၏ ပင်တိုင်ထုတ်သတင်းစာ အဆင်အပြင်နှင့် ကွာခြားသည့်အပြင် အသွင်ကွဲလိုဂို အမှတ်အသားနှင့် အရောင် တို့ကိုအသုံးပြုထားသည်။ သတင်းလွှာတွင်အသုံးပြုသော ဓာတ်ပုံတွင်ပါဝင်သော သူများမှာလည်း အလွှာစုံမှဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါသတင်းလွှာကို အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်သောစာစောင်အဖြစ် အထင်အရှားဖော်ပြထားခြင်း မရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးပရိသတ်အတွင်း အောင်မြင်မှုရရှိနေသည့်အပြင် အမျိုးသားပရိသတ်ကလည်း စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြသည်။ အဆိုပါသတင်းလွှာမှာ FT ပင်မသတင်းစာထက် အမျိုးသမီးပရိသတ်ပိုများပြီး သတင်းဆောင်းပါးများကိုဖွင့် ဖတ်သည့် နှုန်းမှာ ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အပေါ်ယံသဘော ကြည့်ရှုသည့်နှုန်းမှာ ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တတိယသုံးလပတ် တွင် ကောက်ယူရရှိသည့် အချက်အလက်များအရသိရသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများ တင်ပြနိုင်ရေးကို ဦးတည်သည့် အခြားပရိုဂျက်တစ်ရပ်လည်း SCMP ၏ HACKATHON ပရောဂျက် ကိုအမှီပြုကာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုပရောဂျက်တွင် HACKATHON ပရောဂျက်ကို တမူထူးသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြန့်ချိချပြရန်အပြင် အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးတွင် ထိုပရောဂျက်အားစိတ်ဝင်စားသည့် စာဖတ်သူများ ရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန်တို့ပါဝင်လာသည်။ ယခင်လတွင် SCMP က LUNAR အမည်ရှိ စာစောင်ကို စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုစာစောင်တွင် သတင်း ခန်းမမှရရှိသည့် သတင်းမှန်များ၊ အင်တာဗျူးများအပြင် အမျိုးသမီးပရိသတ် အတွက် အမျိုးသမီးဂျာနယ်လစ်များက ထဲထဲဝင်ဝင် လေ့လာသုံးသပ်တင်ပြ ထားသည့် သတင်းဆောင်းပါးများပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Lunar စာစောင်နှင့် ကိုက်ညီသော သတင်းဆောင်းပါးများအတွက် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများထုတ်ကြရန် SCMP ၏ ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ရေးအတွက် ဌာနချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ Luna အယ်ဒီတာအဖွဲ့ တာဝန်ခံကလည်း သတင်းခန်းမဝန်ထမ်းများအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတင်းဆောင်းပါးများကိုလည်း အမျိုးသမီးပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားလာ စေသည့်တင်ပြပုံများဖြင့် ရေးသားကြရန်လည်းတိုက်တွန်းထားသည်။
အမျိုးသမီးပရိသတ်များ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် သတင်းဆောင်းပါး အမျိုးအစားများကိုသိရှိနိုင်ရန် SCMP က ပရိသတ်အကြိုက် လေ့လာရေးသုတေသနကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ပညာရေး၊ ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ အပါအဝင် လူမှုရုပ်ပုံအစုံစုံကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တင်ပြသည့် လူမှုပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး၊ ဒေသတွင်းသတင်းနှင့် လူမှုဘဝဆိုင်ရာကဏ္ဍများကို အမျိုးသမီး ပရိသတ်က ပိုမိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ “အမျိုးသမီးတွေဟာ နယ်ပယ်ကဏ္ဍစုံက အကြောင်းအရာတွေကိုနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအခြေ အနေကို ကျွန်မတို့အကန့်အသတ်မထားသလို ကျွန်မတို့တင်ပြနေတဲ့ ကဏ္ဍတွေကိုလည်းလျှော့မပစ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း ဇောင်းပေးတင်ပြတဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေကိုပဲ တင်ပြလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ သတင်းဆောင်းပါး တွေကိုအမျိုးသမီးတွေက စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့အပြင် သူတို့အတွက် အကျိုးသက် ရောက်မှုရှိစေရပါမယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်မျိုးချထားတာကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်” ဟု ဝါနီက ပြောကြားခဲ့သည်။ See The Financial Times Deep dive. (P. 32)
ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံတွင် ထုတ်ဝေသည့် လူစကာဆန်း (LUSAKA SUN) သတင်းစာသည်လည်း အမျိုးသမီးပရိသတ်ကိုဦးတည်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများကို အဓိကထားဖော်ပြသည်။ နိုင်ငံတွင်းရှိ ဝင်ငွေနည်းလူတန်းစား ပရိသတ်အတွက် ရည်ရွယ်သည့် အဆိုပါ သတင်းစာကို ဒေးလီးနေရှင် (DAILY NATION) သတင်းစာ က ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဇမ်ဘီယာနိုင်ငံရှိ သတင်းမီဒီယာများတွင် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုသာ ဦးစားပေးဖော်ပြလေ့ရှိရာ လူစကာဆန်း သတင်းစာ၌မူ လူမှုဘဝအကြောင်းအရာများ၊ တရားမျှတ ခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို အသားပေးဖော်ပြကြောင်း ဒေးလီးနေရှင်၏ အမှုဆောင်အယ်ဒီတာမေရီမက်ဝေး က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါသတင်းစာ၏ ဝန်ထမ်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်မှာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး အဓိကစာဖတ်ပရိသတ်မှာ ကုန်သည်များဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ထဲတွင်အများစုမှာ အမျိုးသမီးစီးပွားရေးသမားများဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းအများစုရှိနေစေ ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ခန့်ထားခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ “ကျွန်မတို့ဦးတည်တဲ့ အကြောင်းအရာနယ်ပယ်တွေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို အမျိုးသမီးတွေကပို စာနာတတ်တယ်လို့ ကျွန်မခံစားမိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင်သူတို့က အခြားအမျိုးသမီးတွေကို အိမ်ခြံဝင်း ဒါမှမဟုတ် စျေးတွေမှာစကားလွယ်လွယ်ပြောနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် ရင်ဖွင့်ပြောပြလိုသူတွေက သူတို့ကြုံတွေ့ခံစားနေရပုံ၊ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရပုံအပြင် အဲဒီအခက်အခဲတွေကို ပြေလည်အောင်သူတို့ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတယ်ဆိုတာကိုပါ ပြောနိုင်တယ်” ဟု မေရီမက်ဝေးက ပြော ကြားခဲ့သည်။
ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှမှု ပိုမိုတိုးတက်လာစေရေးကို ရည်ရွယ်သည့် လူစကာဆန်းသတင်းစာ၏ မူဝါဒကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အကောင်အထည် ဖော်သည့်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်းကို ပုံဖော်ရေးသားသည့်အပြုသဘောဆောင်ကာ စိတ်ကူးသစ်ရရှိစေသည့် သတင်းဆောင်းပါးအနည်းဆုံး တစ်ပုဒ်ကိုအပတ်စဉ်ဖော်ပြသည်။ ထိုသို့အစီအစဉ်ကြောင့် အမျိုးသမီးပရိသတ်နှင့် အဆင်ချောသည့်ဆက်ဆံရေးများရှိလာသည့်အပြင် အမျိုးသမီးအများအပြား ကလည်း ၎င်းတို့ကြုံတွေ့ခံစားနေရသည်များကို သတင်းစာတိုက်သို့ ဆက်သွယ်ပြောကြားလာခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ ထိုသို့ဆက်သွယ်ပါဝင်လာစေရန် အားပေး အားမြှောက်ပြုလုပ်သည့်အနေဖြင့် လူစကာဆန်းသတင်းစာသည် ထိုအမျိုးသမီး များက ၎င်းတို့ကြုံတွေ့နေရပုံနှင့် ဓာတ်ပုံများ၊ နောင်တွင် ဆက်သွယ်နိုင်သည့် ၎င်းတို့၏လိပ်စာများကို အွန်လိုင်းမှပေးပို့နိုင်သော ကဏ္ဍတစ်ရပ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတည်ဆောက်ဆဲဖြစ်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အီးပေပါစာစောင်တို့အပြင် လူစကာဆန်းသတင်းစာသည်ပါဝင်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများကို ပရိသတ်များ အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုလည်းတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။
ကျား/မ ရေးရာအကြောင်းအရာများကို အလေးပေးတင်ပြသည့် သတင်းဆောင်းပါးများကို ဖန်တီးဖြန့်ချိနိုင်စေရန် ကက်တာလန်ဘာသာစကားဖြင့် ရေးသားသည့် အေအာအေ (ARA) သတင်းစာမှ ဂျာနယ်လစ်သုံးဦးသည် အေအာအေ ဖီမီနီဆင်မီ (ARA FEMINISMES) အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကိုစတင် ဆောင်ရွက်နေသည်။ လက်ရှိတင်ဆက်နေသည့် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများအတွက် ပရိသတ်ပိုမိုရရှိလိုသောကြောင့် ထိုအစီအစဉ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လာရာဘိုနီလာ၊ မာတာ ရိုဒီဂုဇ် နှင့် သိဇ်ဂူတီရာ့ဇ် အမည်ရှိ ဂျာနယ်လစ်သုံးဦးသည် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့တွင် ပရိသတ်အားစတင်ချပြနိုင်ရန် ထိုနေ့မတိုင်မီ အကြိုလများမှစတင်ကာ လုပ်ငန်းများစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတင်ဆက်နေသည့် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများအတွက် ပရိသတ်ပိုမိုရရှိလိုသောကြောင့် ထိုအစီအစဉ်ကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လာရာဘိုနီလာ၊ မာတာ ရိုဒီဂုဇ် နှင့် သိဇ်ဂူတီရာ့ဇ် အမည်ရှိ ဂျာနယ်လစ်သုံးဦးသည် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့တွင် ပရိသတ်အားစတင်ချပြနိုင်ရန် ထိုနေ့ မတိုင်မီ အကြိုလများမှစတင်ကာ လုပ်ငန်းများစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် အေအာအေ ဖီမီနီဆင်မီ အစီအစဉ်က၎င်းတို့၏ သတင်းဆောင်းပါး များကို ARA ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အပတ်စဉ်သတင်းလွှာတို့အပြင် တွစ်တာ(Twitter) နှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်တို့တွင်လည်း အစဉ်တစိုက်ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ အဆိုပါအစီ အစဉ်၏ တွစ်တာနှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်ပေ့ချ်တို့တွင် ပရိသတ် ၃,၅၀၀ နှင့် ၇,၅၀၀ အသီးသီးစီရှိကြသည်။ ဤသို့အစပျိုး အားထုတ်ဆောင်ရွက်မှုကို စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ နှင့် အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည့် ဂျာနယ်လစ်သုံးဦးတို့က အထောက်အကူပြု လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ဂျာနယ်လစ်သုံးဦးသည် မိမိတို့၏ ပင်မတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရင်း အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလည်း ဦးဆောင်လျက်ရှိသည့်အပြင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုလည်း ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်သည့် သတင်းဆောင်းပါး ရေးနည်းများကို အကြံပြုလျက်ရှိသည်။ အေအာအေ ဖီမီနီဆင်မီ ပရိုဂျက်နှင့် ကိုက်ညီသည့် သတင်းဆောင်းပါးများ ရေးသားပေးရန်လည်း ၎င်းတို့ကတိုက်တွန်းထားသေးသည်။ ထိုပရောဂျက်ကို တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အထောက်အကူရရှိစေရန် အမျိုးသမီးများထံမှ သတင်း အချက်အလက် များရရှိရေးအတွက်လည်း ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် အကြိမ်ကြိမ် နှိုးဆော်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ကလေးမွေးဖွားပြီးစ အမျိုးသမီးများကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာများကိုတင်ပြသည့် လူအများ စိတ်ဝင်တစားရှိသော သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားတင်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုဆောင်းပါးကြောင့် သမားရိုးကျထုတ်ဝေနေသည့် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ သည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါအမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏အမြင်နှင့် ခံစားမှုများကိုအများပြည်သူသိအောင် တင်ပြခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှု အတိုင်းအဆ မည်မျှရှိသည်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မီဒီယာ နှင့်တွေ့ဆုံပြောကြားရန် ဝန်လေးသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသဖြင့် သတင်းခန်းမ ရှိသူအားလုံးအသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာဘေ့စ်ထဲတွင် အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များစာရင်းကိုပါ ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခု လုံးအတိုင်း အတာဖြင့်ပြုလုပ်သော အခြားအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် သတင်းခန်းမတွင်းနှင့် သတင်းစာပါ အကြောင်းအရာများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်ခြင်း စိစစ်မှု တစ်ရပ်ကို အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုအား ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်စေခဲ့သည်။
FINANCIAL TIMES သတင်းစာ၏ နက်နက်နဲနဲ ဆန်းစစ်လေ့လာမှု
FINANCIAL TIMES သတင်းစာ၏ ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဒီဂျစ်တယ်အယ်ဒီတာ ကီးစ်ဝဟင်နဆီရေးသားသည်။
ဖနယ်ချယ်တိုင်းမ်သတင်းစာက အမျိုးသမီးစာဖတ်သူ တိုးတက်စေရေး ပရောဂျက်များ ဆောင်ရွက်ရသည့်အကြောင်းရင်း
The Financial Times (FT) ၏ ကျား/မ စာဖတ်သူများဆိုင်ရာပရောဂျက်များကို အချက်အလက်များအသုံးပြုကာ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်အကြိုက်ကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန်နှင့်ယင်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထူးအထောက်အကူပြုခဲ့သည်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် ကျွန်မတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အထောက်အထားအခြေပြု ကျား/မ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ နည်းလမ်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုကာ အမျိုးသမီး စာဖတ်ပရိသတ်ပမာဏကို သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်များအရ အမျိုးသမီးစာဖတ် ပရိသတ်ပမာဏမှာ သိသိသာသာ နည်းပါးနေသည့်အပြင် စိတ်ဝင်စားမှုလည်း သိပ်မရှိကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအချက်ကို စိုးရိမ်စရာအဖြစ်ရော စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းအဖြစ်ပါကျွန်မတို့ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်က FT (ဥပမာအားဖြင့် FT ကို အမျိုးသားများအတွက် ရည်ရွယ်သောသတင်းစာဟု သတ်မှတ်ကြောင်း အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်က ပြောကြားခဲ့သည်။) ကို စိတ်မဝင်စားရသည့် အကြောင်းရင်းများနှင့် ထိုအခြေ အနေကိုပြောင်းလဲရန် ကျွန်မတို့မည်သို့ ကြိုးစားနိုင်သည်ကို ထပ်မံပြုလုပ်သော သုတေသနအရနားလည်လာသည်။ အထောက်အထားအခြေပြု ကျား/မ အချက် အလက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးများဖတ်လေ့ရှိ သော သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်အကြိုက်တို့ကို ပိုမို နားလည်လာခဲ့သည်။
ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ဆောင်ရေး ဒီဂျစ်တယ်အယ်ဒီတာ (Digital Editor for Audience Engagement)၏ လုပ်ငန်းတာဝန်တွင် ပန်းတိုင်ကြီးနှစ်ရပ်ပါဝင်သော ပရောဂျက်များကို ချမှတ်ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။
၁။ အဖွဲ့အစည်းပြင်ပ။ ။ FT အား လပေး၊ နှစ်ပေး မှာယူ ဖတ်ရှုသည့် အမျိုးသမီးပရိသတ်၏ FT အပေါ်ရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲကာ ရေရှည်တွင်၎င်းတို့ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားကာ မလွတ်တမ်းဖတ်လိုစိတ်ရှိလာအောင် ဖန်တီးပေးရန်။ ၂။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း။ ။ (က)	အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ် ဖတ်ရှုတတ်သည်များကို ပိုမိုနားလည်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် (ခ)	အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်အကြိုက်ကို အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြား လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလေ့အထ ပြောင်းလဲလာအောင်တိုက်တွန်းအားပေးရန်။
အဆိုပါ ပရောဂျက်များမှာ FT ၏ အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ် ပိုမိုများပြားလာ အောင်ဆောင်ရွက်သည်ထက် လက်ရှိမှာယူဖတ်ရှုသည့် အမျိုးသမီးပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အဆိုပါ ပရောဂျက်အချို့မှ ဆင့်ပွားသိလာနိုင်သော အချက်အလက်များဖြင့် FT ကို ဖတ် ရှုခြင်းမရှိသေးသည့် အမျိုးသမီးပရိသတ်များ၏ရှုမြင်ပုံကိုလည်း ပြောင်းလဲအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ထားသည်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအကြား ယဉ်ကျေးမှုအပြောင်းအလဲကို တွန်းအားပေးရန်အတွက်၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါက ပိုမိုအလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကဏ္ဍ တစ်ခုအား အမျိုးသမီးပရိသတ်၏ စိတ်ဝင်စားမှုရှိပုံကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဓိကတိုင်းတာ ချက်မှာ အမျိုးသမီးပရိသတ်အရေအတွက် အချိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ စုစုပေါင်းစံသတ်မှတ်အရေအတွက်နှင့် အဆိုပါအချိုးအစားကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးပရိသတ် အချိုးအစားမြင့်တက်လာပြီး၊ စုစုပေါင်း စံသတ်မှတ် အရေအတွက်လည်း များပြားလာစေရန် ကျွန်မတို့အမြဲဦးတည်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ် တွင် ၁.၂ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာသည်။
၂၀၁၇ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တို့တွင် နှစ်အလိုက် ၃ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာသည်။
FT၏ အမျိုးသမီးစာဖတ်သူများ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာစေရေး ပရောဂျက်များ
ပရောဂျက်။ ။ ထင်ရှားသည့်ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးပရိသတ် ဖတ်လိုသည့် သတင်းဆောင်းပါးများကိုထည့်သွင်းရန် ကျွန်မတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဆိုလို သည်မှာ အမျိုးသမီးများစိတ်ဝင်စားမှုရရှိခဲ့သော ယခင်ကဖော်ပြဖူးသည့် FT သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် (မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုဖတ်ရှုသော)ကိုဖတ်ရှုသော ပျမ်းမျှ အမျိုးသမီးအရေအတွက်ထက် ပိုဖတ်နိုင်ချေရှိသည်ဟု ယူဆရသည့် သတင်းဆောင်းပါးများကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက် အယ်ဒီတာများနှင့် ပရိသတ်စိတ်ဝင်စားမှု ဖော်ဆောင်ရေး ဆိုင်ရာ ဒီဂျစ်တယ်အယ်ဒီတာတို့က အမျိုးသမီးပရိသတ်ဖတ်ရှုမှုများနိုင်မည့် သတင်းဆောင်းပါးကို တစ်နေ့တစ်ပုဒ်ကျ ရွေးချယ်ထည့်သွင်းသည်။ အဆိုပါ သတင်းဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကို ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ထည့်သွင်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးပရိသတ် အများအပြားရှိသည့် လူသိများသောနေ့စဉ် သတင်းအကျဉ်း ချုပ် အီးမေးလ်တို့တွင် ထည့်သွင်းခြင်းများပြုလုပ်ကာ အများမြင်သာအောင် ဆောင်ရွက်သည်။ ထို့အပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများပေါ်တွင်လည်း အများမြင်သာ အောင် ဆောင်ရွက်သေးသည်။ ထို့နောက် အဆိုပါပရောဂျက် XX က အမျိုးသမီး ပရိသတ်အပေါ် မည်မျှထိရောက်မှုရှိသည်ကိုဆန်းစစ်သည်။
ရည်ရွယ်သည့် ပန်းတိုင်က မည်သည့်အရာနည်း။
၁။ အဖွဲ့အစည်းပြင်ပ။ ။ အမျိုးသမီးပရိသတ်က ၎င်းတို့ဖတ်ရှု လိုသည့် သတင်းဆောင်းပါးများကို ပိုမိုရှာဖွေဖတ်ရှုလာနိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက် ပေးခြင်းဖြင့် FT အပေါ်ရှုမြင်ပုံကိုပြောင်းလဲပေးရန်။ ၂။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း။ ။ (က)	ပရောဂျက် XX ပါ သတင်းဆောင်းပါးများအား ပရိသတ်ကတုံ့ပြန်ပုံ များကို ဆန်းစစ်ကာအဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်များကို အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သင့်လျော်သည့်အဖွဲ့များထံပေးပို့ကာ အမျိုးသမီးပရိသတ်၏ အကြိုက်ကိုပိုမိုသိရှိ အောင်ဆောင်ရွက်ရန်။ (ခ)	သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့များ၏ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအလေ့အထ ပြောင်းလဲလာ အောင်တိုက်တွန်းအားပေးရန်။ ဥပမာအားဖြင့် ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက် အယ်ဒီတာများ ကသတင်းဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးကို လူသိများအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ အောင် မြင်မှုအတိုင်းအတာကို သတင်းဆောင်းပါးများအား ကြည့်ရှုသူအရေအတွက်ထက် စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုသည့် ပရိသတ်အချိုးအစားနှင့်သာ ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်အတွက် သတင်းဆောင်းပါးများ ဖန်တီးရေးသားရန် တာဝန်ယူရသော အယ်ဒီတာများကလည်း ဂျာနယ်လစ်များအား သတင်းဆောင်းပါး အမယ်အမျိုးမျိုး ရေးသားရေးအတွက်တာဝန်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
ပရောဂျက် XX ပါ သတင်းဆောင်းပါးများ အမျိုးသမီးပရိသတ်များအကြားတွင် အခြေအနေမည်သို့ရှိသနည်း။
ပရောဂျက် XX ပါသတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုသည့် ပျမ်းမျှအမျိုးသမီး အရေအတွက် အချိုးအစားသည် FT ပါ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရှုသည့် ပျမ်းမျှ အရေအတွက်ထက် သိသိသာသာ ပိုမိုများပြားသည်။ ထိုသို့ သိသိသာသာကွာခြား ချက်ကို ဆက်လက်များပြားလာအောင်ဆောင်ရွက်ရေးမှာ ပရောဂျက်၏ ရည်မှန်း ချက်ပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်သည်။
အဓိကအားဖြင့် ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက်၏ အပြင်အဆင်တင်ပြပုံ အလေ့အထပြောင်း လဲလာခြင်းမှာ FT၏ တန်ဖိုးအရှိဆုံးအပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အောက်ပါ ဥပမာအချို့ကိုကြည့်ပါ။
အထူးသဖြင့် အထက်ပါ အလေ့အထအသစ်ကို သတင်း အကဲဖြတ်မှုနှင့် လွတ်လပ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မည့် အရာဟုမမြင်ဘဲ လက်ခံလာရေး ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက် အယ်ဒီတာများကို အားပေးတိုက်တွန်းခြင်း။ -	ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုသည့် စုစုပေါင်းအရေအတွက်ထက် ပရိသတ်အရေအတွက် အချိုးအစားကိုဦးစားပေးရန် အားပေးတိုက်တွန်း ရခြင်း။ (ဥပမာ။ ကြည့်ရှုသည့် အမျိုးသမီးပရိသတ်အရေအတွက် ရာခိုင်နှုန်း) -	သတင်းဆောင်းပါးများအား ပင်မ FT ဆောင်းပါးများအဖြစ် မမြင်စေဘဲ လူသိများအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း (အထူးကဏ္ဍ၊ နှစ်သက်စရာကဏ္ဍ၊ ကြည်နူးစရာကဏ္ဍ စသည်ဖြင့် တလှည့်စီအမည်တပ် ဖော်ပြသည်။) -	FT၏ စာဖတ်ပရိသတ်မှာ မည်သူများဖြစ်သည်ဆိုသည့် အချက်နှင့် ပင်မ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာတွင် ၎င်းတို့မည်သည့်အရာများကို မြင်တွေ့လိုသည်တို့ကို အချက်အလက်များအပြင် ဂျာနယ်လစ်ဆန်သော အမြင်ဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားခြင်း။ -	FT ၏ အမျိုးသမီးပရိသတ်များက အမျိုးသားပရိသတ်များ ဖတ်ရှုသည်များကိုပင် အလားတူဖတ်ရှုကြောင်း စိန်ခေါ်မှုသဖွယ်ဖြစ်နေသည့် ယခင်ကနားလည်ထားမှု (အမျိုးသမီးပရိသတ် ရာခိုင်နှုန်းမည်မျှများသည်ဖြစ် စေ FT တွင် ဖော်ပြသော သတင်းဆောင်းပါးများကို သတ်မှတ်အရေ အတွက်ထက် ကျော်လွန်ကြည့်ရှုသည့် အရေအတွက်တွင် အမျိုးသား များမှာ အမျိုးသမီးများထက်များပြားသည်။) -	ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို စီမံလည်ပတ်နေသည့်အဖွဲ့၏ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု အဆင့်ဆင့်ကိုနားလည်မှုရရှိခြင်း။ အဆိုပါကိစ္စ ရပ်များမှ ထိုအဖွဲ့တွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိသူများက ပြတ်ပြတ်သားသားသိရှိလေ့မရှိပေ။ -	ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို စီမံလည်ပတ်နေသည့်အဖွဲ့နှင့် AE အဖွဲ့ တို့အကြား ပိုမိုနီးစပ် ဟန်ချက်ညီကာယုံကြည်မှုရှိလာသည့်အပြင် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်နိုင်ခြင်း။ -	လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ နာမည်ကောင်းရှိမှု အပေါ်မူတည်၍ တာဝန် အရမဖြစ်မနေဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းသဘော ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအကြား လိပ်ခဲတည်းလည်းဖြစ်နေသည်ကို လိုအပ်သကဲ့သို့ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။
ပရောဂျက် XX မှ ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိလာခဲ့သည်များ။
•	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အလေ့အထပြောင်းလဲရန်မှာ ကြန့်ကြာမှုရှိသော် လည်းပြောင်းလဲယူနိုင်ခဲ့သည်။ ပရောဂျက် XX မှ ပေါ်ထွက်လာသော သတင်းဆောင်းပါးများသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှု များပြားသည်ကို တွေ့မြင်လာရသောကြောင့် ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက်ကို စီမံလည်ပတ်နေသည့် အယ်ဒီတာများက ပင်မစာမျက်နှာတွင်ထည့်သွင်း မည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောထားအမြင်ပြောင်းလဲလာသည်။ •	ပရောဂျက် XX ကြောင့် FT ပရိသတ်များအကြား ရေပန်းစားသည့် သတင်းဆောင်းပါးကဏ္ဍအရပ်ရပ်ကို တိုးချဲ့ရန် အထောက်အကူပြုခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ယခင်ကပရိသတ်အချို့သာ စိတ်ဝင်စားသည့် အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်သော သတင်းဆောင်းပါးများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများ၊ အမျိုးသမီးအမည်များ ပိုမိုထည့်သွင်းတင်ပြလာသည့်အခါတွင် ကြည့်ရှုသူပိုမိုများပြားလာကြောင်း ထိုပရောဂျက်ကြောင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို စီမံလည်ပတ်နေသည့် အယ်ဒီတာများသိရှိလာခဲ့သည်။ ထိုသို့အမျိုးသမီးများကို ပိုမိုအသားပေး ရေးသားသည့် သတင်းဆောင်းပါးများကို ပရိသတ်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာ သောကြောင့်လည်း ထိုပရိုဂျက်တွင်တာဝန်ကျသည့် အယ်ဒီတာများ သည် ထိုကဲ့သို့သတင်းဆောင်းပါးများကို ပိုမိုဖန်တီးတင်ဆက်လိုလာကြသည်။ အဆိုပါ သတင်းဆောင်းပါးများတွင် မျိုးဆက်ပွားခြင်း၊ အမျိုးသမီးရာသီစက်ဝန်း၊ သွေးဆုံးခြင်း၊ မိဘဘဝ၊ လိင်မှုဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနှင့် လိင်တူလိင်ကွဲစုံမက်သူများ၊ လိင်တူရော လိင်ကွဲပါ စုံမက်သူများနှင့် လိင်စိတ်ခံယူမှု မပြတ်သားသေး သူများစသဖြင့် အကြောင်းအရာပေါင်းစုံပါဝင်သည်။ •	မက်လုံးများကြောင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့တွင် အထောက်အကူရရှိခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူကြိုက်ပိုများအောင် ထပ်မံဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခွင့် အရေးများနှင့် လူကြိုက်ပိုများနိုင်မည့် သတင်းဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ပင်မဝက်ဘ်ဆိုက်ကို စီမံလည်ပတ်နေသည့် အယ်ဒီတာများလိုလားသည့် သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် ပတ် သက်သည့် စိတ်ကူးများကိုထိုးထွင်းသိမြင်လာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ •	အဆိုပါပရောဂျက်တွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အချင်းချင်း မိမိတို့၏ အချက် အလက်များကို အပြန်အလှန်မျှဝေကြသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ စိတ်ဝင်တစားပါဝင်မှုရှိစေရန် (နှင့်ပရောဂျက်သစ်ကို စတင်ချိန် က တည်းက ခိုင်မာအားကောင်းမှုရှိစေရန်) ၎င်းတို့ဖန်တီးသည့် သတင်းဆောင်းပါးများကို အမျိုးသမီးများက ကြိုက်နှစ်သက်ပုံအားအသိပေး သည်။သတင်းကောင်းမှန်သမျှကို ကျေနပ်လက်ခံကြစမြဲပင်ဖြစ်သည်။ •	အသစ်ပြုလုပ်သော/ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်သော ပရောဂျက်များတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်မှာအရေးပါသည်။ ပရောဂျက်အဖွဲ့၏ စရိုက်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ (နှင့် စိုးရိမ်မှုများ) ပရောဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ •	အသေးစားစမ်းသပ်မှုဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုသို့ စမ်းသပ်မှုကို တိုးချဲ့နိုင်သကဲ့သို့ ထိန်းညှိမှုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ အလုပ်မဖြစ်ပါက ဆက်မလုပ်ဘဲ နေနိုင်သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ချက် များကြောင့် တစ်စုံတစ်ခုကို အမြဲတစေသိလာနိုင်သည်။ •	ခေါင်းဆောင်မှုမှာအရေးပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အကြီးတန်းအယ်ဒီတာများထံမှ သတင်းအချက်အလက် နှင့်အထောက်အကူရရှိခြင်း၊ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသည်နှင့် ထိုဖြစ်ရပ်အရေးပါသည့် အကြောင်းရင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းတို့မှာအရေးပါသည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ထပ်ဆင့်အားစိုက်ထုတ်မှုများကို ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမှာ လည်းအထောက်အကူပြုသည်။ •	အမျိုးသမီးများ (နှင့် အမျိုးသားများ)နှင့် ပတ်သက်သော ကျွန်မတို့၏ တင်ကူးထင်မြင်ချက်များမှာ မှားယွင်းလေ့ရှိကြောင်း အချက်အလက်များအရသိရသည်။ အမျိုးသမီးများကို အသားပေးရေးတင်ပြထားသည့် အမျိုးသမီးများနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများ (ဖက်ရှင်၊ စတိုင်၊ အလှအပရေးရာ) ကို အမျိုးသားရာခိုင်နှုန်း အများအပြားကလည်း အမြဲ တစေဖတ်ရှုလေ့ရှိသည်။ မိမိအလုပ်ကို စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ အကြောင်း အရာများမှသည် အမျိုးသမီးများနှင့် သက်ဆိုင်သောနည်းပညာ သတင်း ဆောင်းပါးများတွင်လည်း ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်မှန်ကန် ကြောင်းကို လပေး၊ နှစ်ပေး ဖတ်ရှုသူ အမျိုးသား ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိ နေခြင်းကသက်သေထူသည်။ FT တွင်ဖော်ပြသော ငွေရေးကြေးရေး ဆိုင်ရာ အထူးဆောင်းပါးအချို့ (ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ ရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲမှု) တွင် အမျိုးသမီးများကို အသားပေးရေးသားထားသည်။
ပရောဂျက်။ ။ အမျိုးသမီးပရိသတ်က ၎င်းတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည် ဟု ပြောကြားလာသော တင်ပြပုံ၊ အပြင်အဆင်ဖြင့် တင်ဆက်ထားသော FT ၏ သတင်းဆောင်းပါးများဖြင့် အမျိုးသမီးပရိသတ်ရရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
အဖတ်များသည့် သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် ဖတ်ချင်စရာ အကောင်းဆုံး အကြောင်းအရာများကို သတင်းလွှာထဲတွင် ကျကျနနထည့်သွင်းကာ သောကြာနေ့တိုင်းတွင် အီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သည်။ သတင်းလွှာပါ အကြောင်းအရာများကို FT ၏ အမျိုးသမီးဂျာနယ်လစ်များက အပတ်စဉ် တစ်ယောက်တစ်လှည့်ရွေးချယ်ထည့်သွင်းသည်။
မိမိတို့မှာအချိန်နည်းပြီး သတင်းများနှင့်လည်းမျက်ခြည်မပြတ်လိုကြောင်း ပြောပြလာသည့် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်။ ထိုလိုအင်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် နည်းလမ်းပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
၁။ သတင်းလွှာပုံစံ။ ။ အလုပ်များသည့် အမျိုးသမီးများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလွှာဖြစ်စေရန်တင်ပြထားသည်။ သတင်းလွှာထဲတွင် တစ်ပတ် အတွင်း အမျိုးသမီးပရိသတ်များမလွတ်တမ်း ဖတ်ရှုသင့်သည့်သတင်းများကို ဖတ်ရှုခွင့်ရရှိစေရန် သတင်းလွှာတွင် စီစဉ်တင်ဆက်ထားသည်။ ၂။ ဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာ။ ။ လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်း အမျိုးသမီး များဖတ်ရှုခဲ့သည်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို သတင်းဆောင်းပါးရွေးချယ်သူက အသုံးပြုသည်။ FT မှာ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာများ ကိုသာဖော်ပြသည့် သတင်းစာဟု၎င်းတို့နားလည်ထားကြောင်း အမျိုးသမီးပရိသတ်ထံမှ ကြားသိရသဖြင့်ကဏ္ဍမျိုးစုံမှ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများကို ထည့်သွင်းထားသည့်အပြင် ဖတ်ချင်စရာအကောင်းဆုံး သတင်းဆောင်းပါး များနှင့် အဖတ်များသည့် သတင်းဆောင်းပါးများကိုပါထည့်သွင်းထားသည်။ ထိုသို့ FT တွင် ဖော်ပြသည့် သတင်းဆောင်းပါးအားလုံးသည် အမျိုးသမီးများနှင့် သင့်လျော်သည်ဟု ကျွန်မတို့ကမှတ်ယူသည့်အပြင် ထိုသို့မဖော်ပြပါက အမျိုးသမီးပရိသတ်များ ဖတ်ခွင့်မကြုံဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ၃။ သတင်းဆောင်းပါးရွေးချယ်သူများ။ ။ အမျိုးသမီးပရိသတ်နှင့် ပိုမိုသင့်လျော် သည့် သတင်းလွှာဖြစ်ကြောင်းခံစားမိစေရန် အပတ်စဉ်တိုင်းတွင် အမျိုးသမီး ဂျာနယ်လစ်များက သတင်းဆောင်းပါးများကို အလှည့်ကျရွေးချယ်ကြသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ကျွန်မတို့၏ အမျိုးသမီးဂျာနယ်လစ်များကို လူသိပို များစေသည့်အပြင် သတင်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ အမြင်ကိုပိုမိုထင်ဟပ်ပြနိုင်သည်။ ၄။ တင်ပြပုံ။ ။ သတင်းလွှာသည် လတ်တလောဖြစ်ပျက်နေသည်များတင်ပြ ထားသည့်အပြင် FT က ပင်တိုင်ဖော်ပြနေသည်များနှင့် ခြားနားအောင်လည်း ရည်ရွယ်ထည့်သွင်းထားကာ သမားရိုးကျပုံစံမှခွဲထွက်၍ လူပြောများသည့် အကြောင်းအရာများကို အသားပေးထည့်သွင်းထားသည်။ ဖတ်ချင်စရာကောင်း အောင်လည်း စာမျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးထားသည်။ သတင်းဆောင်းပါး ရွေးချယ်သည့် ဂျာနယ်လစ်တိုင်းက မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်း အရာ၊ ကျွမ်းကျင်သည့်နယ်ပယ်နှင့် စိတ်ဝင်စားရာများကိုပါ ပရိသတ်ထံ မိတ်ဆက်ဖော်ပြကြသည်။ ထို့အပြင် ရွေးချယ်တင်ပြထားသည့် FT ပါ သတင်း ဆောင်းပါးများနောက်ကွယ်မှ အကြောင်းအရာများနှင့် ထိုသတင်းဆောင်းပါး များကို မိမိတို့မည်သည့်အတွက် နှစ်သက်ရသည်ကိုလည်း အဆိုပါအမျိုးသမီး ဂျာနယ်လစ်များကတင်ပြထားသည်။ ၅။ ထင်သာမြင်သာရှိခြင်း။ ။ FT ၏ ပင်မအသွင်အပြင်နှင့် ကွဲပြားမှုရှိစေရန် အထူးစီမံထားသည့် ကောက်ကြောင်းဖြင့်ရေးဆွဲထားသော လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုကာ ပင်မစာစောင်နှင့် မတူသည့် အရောင်များကိုလည်း အသုံးပြုထားသည်။ သတင်းဓာတ်ပုံများကိုလည်း လူတန်းစားအလွှာစုံပါအောင် ရိုက်ကူးထားသည်။
သတင်းဆောင်းပါးရှည်ကို အတိုချုပ်ဖော်ပြမှု အခြေအနေမည်သို့ ရှိသနည်း။*
ထိုအစီအစဉ်ကြောင့် FT ၏ပျမ်းမျှပရိသတ်ထက် စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုသည့် ပရိသတ်ပိုမိုရရှိကာ အမျိုးသမီးပရိသတ် အရေအတွက်မှာလည်းပိုများသည်။
•	FT သတင်းလွှာ၏ ပျမ်းမျှပရိသတ်ထက် အမျိုးသမီးပရိသတ် ၈.၂ ရာခိုင် နှုန်းပိုရှိလာသည်။ •	စာဖတ်ပရိသတ် ပျမ်းမျှအရေအတွက်တွင် ယခင်ကထက် ၃.၅ ရာခိုင် နှုန်းပိုများလာသည်။ •	ကလစ်ခေါက် ကြည့်ရှုသည့် ပျမ်းမျှနှုန်းမှာလည်း ယခင်ကထက် ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာသည်။ •	အဆိုပါအစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းက နောက် ပိုင်းတွင် လပေး၊ နှစ်ပေး ဖတ်ရှုသူအရေအတွက် လစဉ်တိုးလာခဲ့သည်။
•	ကျွန်မတို့နှင့် အကျွမ်းတဝင်လုံးဝမရှိသည့် ပရိသတ်အတွက်သတင်းလွှာ အခင်းအကျင်းတစ်ခုကို ပုံစံပြုရခြင်း။ •	FT ၏ မူလအနှစ်သာရမပျောက်အောင်ထိန်းသိမ်းရင်း ပရိသတ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည့် သတင်းလွှာအခင်းအကျင်းနှင့် ရေးသားတင်ပြပုံအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရခြင်း။ •	မူလအနှစ်သာရကို မပြတ်ထိန်းထားရင်း စာရေးသူအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း။ •	ဤသတင်းလွှာတွင် ကဏ္ဍစုံမှ စာရေးသူအများအပြားရေးသားသည်များပါရှိစေရန် သေချာစွာဆောင်ရွက်လိုသည်။ •	ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ပိုမိုပြုလုပ်နိုင်သည့် စာမျက်နှာအခင်းအကျင်း ဒီဇိုင်းရရှိစေရန် သတင်းတည်းဖြတ်သည့် ပလက်ဖောင်းသစ်တစ်ရပ် တည်ဆောက်ရခြင်း။
သတင်းဆောင်းပါးရှည်ကို အတိုချုပ်ဖော်ပြမှုမှ ကျွန်မတို့မည်သည့်အရာများကို သိရှိလာခဲ့သနည်း။
•	အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်သည်ကိုသိသာအောင်တင်ပြရန်မှာ အဓိကလိုအပ်ချက်မဟုတ်ပေ။ သတင်းလွှာထဲတွင် အမျိုးသမီးများ အတွက်ရည်ရွယ်ကြောင်း မည်သည့်နေရာတွင်မှ မဖော်ပြသော်လည်း ဤသတင်းလွှာမှာ အမျိုးသမီးများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်ဟု အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်းကြောင့် သက်ရောက် မှု ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး မည်သို့ရှိမည်ကိုကျွန်မတို့မသိပါ။ •	အမျိုးသားများသည်လည်း အမျိုးသမီးများအတွက် ရည်ရွယ်သော သတင်းလွှာများကိုဖတ်ရှုကြသည်။ ဤသတင်းလွှာကို အမျိုးသမီး ပရိသတ်၏ စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထုတ်ဝေသော်လည်း အမျိုးသားပရိသတ်များကလည်း စိတ်ဝင်စားကြသည်။ •	ပရိသတ်ထံမှ တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှု အနည်းအကျဉ်းသာရရှိသည်။ ဤ သတင်းလွှာ၏ ပရိသတ်များက စာရေးသူများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တုံ့ ပြန်မှုမပြုကြသောကြောင့် လက်ရှိအခြေအနေတွင် တုံ့ပြန်မှုကို ကိန်းဂဏန်းဖြင့်ပြသရန် အကန့်အသတ်အများအပြားရှိနေသေးသည်။ ထိုသို့အခြေအနေဖြစ်နေရသည့် အကြောင်းရင်းကို တိတိကျကျမသိရသော်လည်း အလှည့်ကျစာရေးသူ အရေအတွက် အများအပြားရှိနေသောကြောင့် ပရိသတ်အနေဖြင့် စာရေးသူနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့တုံ့ပြန်ရန် စိတ်ကူးမပေါကြသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ပရောဂျက်။ ။ FT၏ ပင်မစာမျက်နှာပါ ဓာတ်ပုံများတွင် ကျား/မ ပိုမိုညီမျှစွာ ပါဝင်စေသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို ကျွန်မတို့ရှာဖွေလိုသည်။
ဂျက်နက်ဘော့ဆော့ဖ်ဝဲသည် FT သတင်းဆောင်းပါးများပါ ဓာတ်ပုံများတွင် မျက်နှာကိုအခြေခံကာ ကျား/မ ခွဲခြားပေးသောဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဆော့ဖ်ဝဲက ကျား/မ ခွဲခြားမှုကို မော်နီတာတွင် အရောင်ပါအလံများဖြင့်ပြသကာ အယ်ဒီတာများမြင်နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးသည့်အပြင် Slack ချန်နယ်မှတစ် ဆင့် ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း ဖော်ပြပေးသည်။
၁။	အဖွဲ့အစည်းပြင်ပ။ ။ အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်က ပိုမိုစိတ်ဝင်တစားရှိလာစေရန်။ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများအရ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသမီးပါဝင်သောဓာတ်ပုံများဖြင့် သရုပ်ဖော်တင်ပြသော သတင်းဆောင်းပါးများကို အမျိုးသားများထက် ပိုမိုကြည့်ရှုနိုင်ချေရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ၂။	အဖွဲ့အစည်းတွင်း။ ။ ပင်မစာမျက်နှာတွင် ကျား/မ ပါဝင်မှုမညီမျှ သည်ကို ပိုမိုသိနားလည်မှုရှိလာပြီး အမျိုးသမီးများပါဝင်သည့်ဓာတ်ပုံများကို ပိုမိုထည့်သွင်းလာစေရန် FT ဂျာနယ်လစ်များအားတွန်းအားပေးရန်။
•	လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် မျက်နှာပုံသဏ္ဌာန်အခြေခံပြီး ကျား/မ ခွဲခြား သည့် ဆော့ဖ်ဝဲ/ဒေတာဘေ့စ်မှာ လူဖြူမျိုးနွယ်မဟုတ်သူများကို ခွဲခြားရာတွင် ပြဿနာအချို့ရှိပုံရပြီး၊ အဆိုပါကဲ့သို့သော ပြဿနာမှာ မှတ်ဉာဏ်တု (AI) အသုံးပြုသည့် ဆော့ဖ်ဝဲများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ •	ဂျက်နက်ဘော့ဆော့ဖ်ဝဲတွင် ကျားမခွဲခြားရာ၌ သုံးစွဲသူက လိုအပ်သည် များကို မကြာခဏချိန်ညှိရန် လိုအပ်ပေရာ သတင်းခန်းမဝန်ထမ်းများက ထိုသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ •	ဆော့ဖ်ဝဲက အလိုအလျောက်ပေးပို့လာသည့် အချက်အလက်များကို စိစစ်ပြီးဝန်ထမ်းများက ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းထဲတွင် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုလာအောင်ပြောဆိုတိုက်တွန်းရခြင်း။
ကျွန်မတို့ မည်သည့်အရာများကို သိရှိလာခဲ့သနည်း။
•	သတင်းခန်းမဝန်ထမ်းများက စိတ်ဝင်စားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို ဒီဇိုင်း ပြုရေးဆွဲရန်သုံးစွဲမည့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ဝင်များက စတင်ရေးဆွဲသည့် ကာလကပင် ပါဝင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲကိုရေးဆွဲပြီးစီးပြီး စတင် အသုံးပြုသည့်အခါတွင်မှ အသုံးမတည့်သည့်ဖန်ရှင်များကို ပြင်ဆင် ဖယ်ရှားခြင်းမျိုး ပြုလုပ်ရန်မှာမလွယ်ကူပေ။ ဤသို့သော ကိစ္စရပ်များ တွင်အရင်းအမြစ်များ အကန့်အသတ်ရှိပါက အဆိုပါ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကို ဒီဇိုင်းပြုရေးဆွဲရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ •	အထက်ပါ အကြောင်းများကြောင့် ဂျက်နက်ဘော့ဆော့ဖ်ဝဲတွင် ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းမှာ အချက်အလက်ကောက်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်ထက် သတင်းခန်းမတွင်အလုပ်လုပ်နေသော ဂျာနယ်လစ်များကို ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှမှုရှိအောင် သတိပိုမိုထားမိစေရန် ဆောင်ရွက်ရာတွင် (မော်နီတာတွင်အရောင်ပါ အလံများဖြင့်ပြသကာ) ပိုမိုအသုံးဝင်လာခဲ့သည်။ ဂျက်နက်ဘော့ဆော့ဖ်ဝဲ၏ သတိပိုမိုထားမိစေရန်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကိုနောင်ပြုလုပ်မည့် ပရောဂျက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ကျွန်မတို့မျှော်လင့်မိသည်။ အထက်ပါကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကြောင့် ဂျာနယ်လစ်များအား သတင်းဆောင်းပါးပြီးစီးအောင် ရေးသားခြင်းသက်သက်ကို အာရုံစိုက်နေရာမှ သတင်းဆောင်းပါးစတင် ရေးသားစဉ်ကာလကပင် သတင်းဓာတ်ပုံအသုံးပြုရာ၌ ကျား/မ ညီမျှစွာ ပါဝင်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာစေရန်သတိပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ •	သတင်းခန်းမဝန်ထမ်းများက ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုသည့် အော်တိုစနစ်ကို အသုံးပြုရန်၎င်းတို့၏ လုပ်လေ့လုပ်ထအပြုအမူကို ပြောင်းလဲရန် ခက်ခဲသည်။ ထိုအချက်ကြောင့်လည်း ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးမပြုဘဲ လူကိုယ် တိုင်စိစစ်သည့် နည်းလမ်းကို ပြောင်းသုံးရန်ရည်ရွယ်လာခဲ့သည်။
ရှီဆက်ဟီဆက်(SHE SAID HE SAID) ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ၅ဝး ၅၀ ပရောဂျက်
ပရောဂျက်။ ။ FT ဂျာနယ်လစ်အဖွဲ့များ ၎င်းတို့ဖန်တီးတင်ဆက်သည့် သတင်း ဆောင်းပါးများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးစာရေးသူညီမျှစေရန် ကျွန်မတို့က အထောက်အကူပြုပေးလိုသည်။
ပန်းတိုင်က မည်သည့်အရာနည်း။ ။ FT အယ်ဒီတာအဖွဲ့က ဖန်တီးတင်ဆက် သည့် အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်အချိုးအစား ပိုမိုပါဝင်သော သတင်းဆောင်းပါး များကို အမျိုးသမီးပရိသတ်ကကောင်းစွာဖတ်ရှုကြကြောင်း FT၏ ဆန်းစစ် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို လက်တွေ့အသုံးချရန်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ် အချိုးအစားပိုမိုအသုံးပြုသည့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့များသည် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်သည့်ဓာတ်ပုံများကို အသုံးပြုရန်လည်းဖြစ်သည်။
ထိုပရိုဂျက်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံ ဆော့ဖ်ဝဲက အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးလာသည့် အချက်အလက်များကိုပေးပို့ပြီး၊ ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစား မမျှတသည်ကို ယခင်ကထက် သတိထားမိလာစေရန် စတင်ဆောင်ရွက်သည်။ ယခုနှစ်တွင်မူ ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုသည့်စနစ်မှ လူကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်သည့်နည်းလမ်းကို ပိုမိုအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်လာခဲ့သည်။
•	SHE SAID HE SAID ဆော့ဖ်ဝဲ (၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုသည်)။ ။ဤဆော့ဖ်ဝဲမှာ FT သတင်းဆောင်းပါးများတွင် သတင်းရင်းမြစ်အဖြစ် ကိုးကားဖော်ပြသူများ၌ ကျား/မ ပါဝင်ခြင်းညီမျှမှုကိုဖော်ပြပေးသည်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲသည် ရှီဆက်ဟီဆက် (‘she said…he said…’) ဆိုသည့်နာမ်စားများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်များ၏ ရှေ့ဆုံးအမည်များကို အသုံးပြုကာ သတင်းရင်းမြစ်မှာ အမျိုးသားဖြစ်သည်၊ အမျိုးသမီး ဖြစ်သည်ဟုခွဲခြားပေးသည်။ •	၅ဝး၅၀ ပရိုဂျက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်စတင်အသုံးပြုသည်။) ။ ။ ရိုးရှင်း လှပြီး၊ ဂျာနယ်လစ်များက ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး သတင်း ဆောင်းပါးများတွင် ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုကို ရှာဖွေစစ်ဆေးသည့် စနစ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်ကို ရှီဆက်ဟီဆက်ဆော့ဖ်ဝဲအား အသုံးပြုပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဘီဘီစီသတင်းဌာနနှင့် ပူးပေါင်းကာ စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
•	ရှီဆက်ဟီဆက်ဆော့ဖ်ဝဲ။ ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဂျာနယ်လစ်များအား ဆော့ဖ်ဝဲကထုတ်ပေးသည့် အချက်အလက်များကို ကနဦးဆန်းစစ်ကာ အဆိုပါအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုစေခြင်း။ •	၅ဝး၅၀ ပရိုဂျက်။ ။ •	ဂျာနယ်လစ်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍတွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအား ဦးစီးနေရာမှပါဝင်စေရန် ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားဂျာနယ်လစ်များကိုလည်း ပရောဂျက်တွင်ပါဝင်လာအောင် တိုက်တွန်းရာတွင်အထောက်အကူပြုခြင်း။ •	အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးစာရေးသူများ အရေအတွက်နည်းနည်းမှ စတင်ပါဝင်ပြီး၊ တဖြေးဖြေးချင်းသာ အရေအတွက်များလာခြင်း၊ ရှိပြီးသားအရေအတွက်တွင်ပင် ရပ်တန့်နေခြင်းနှင့် ထိုထက်လျော့နည်းလာသည့် အခြေအနေများတွင် အဆိုပါအမျိုးသမီးစာရေး သူများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ပေးရန် နည်းလမ်းများရှာရခြင်း။ •	ပရိုဂျက်တွင် ပါဝင်သူအချင်းအချင်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပြောဆိုဆက်သွယ်မှုမှာ ရိုဂျက်၏ ပန်းတိုင်နှင့်ပတ်သက်၍ အနက်ကောက်လွဲ မှုများအားဖော်ထုတ်ပြုပြင်နိုင်ရန် အဓိကအရေးပါသည့် အချက်ပင် ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်ထိ တာဝန်ပေးထားသည့် ကဏ္ဍခြောက်ခုမှ ဂျာနယ်လစ်များမှာ ပရိုဂျက်အတွက်အလုပ်လုပ်နေသည်။ သို့ရာ တွင်အဆိုပါကဏ္ဍ ခြောက်ခုမှ ဂျာနယ်လစ်များသည် FT တွင်ရှိ သော ဂျာနယ်လစ်နှင့် အယ်ဒီတာရာပေါင်းများစွာနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ထိုမျှများပြားသည့် လူဦးရေနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ရပ် ရှာဖွေရန်မှာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
•	ဆော့ဖ်ဝဲမသုံးဘဲလူကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်းက ပရိသတ်၏စိတ်ဝင်တစားတုံ့ပြန်မှုကိုပိုမိုရရှိသည်။ ဤ ၅ဝး၅၀ ပရိုဂျက်ကိုစတင် ခဲ့သည့်အစောပိုင်းကာလတွင် ကျား/မ မညီမျှစွာပါဝင်မှုကို ပိုမိုသိရှိ လာစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့်နည်းလမ်း ထက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များစိတ်ဝင်တစား ပါဝင်လာစေရန် ထိထိ ရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပုံရသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မပြတ်ဆွေးနွေးမှုရှိစေရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း တစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည့်အပြင် သတင်းခန်းမအတွင်းတွင်လည်း ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှမှုဆိုင်ရာ သိနားလည်မှုပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။ •	ပရောဂျက်တွင် ပါဝင်လိုသူများနှင့် ပူးတွဲလုပ်ကိုင်သည့်အခါ ၅ဝး၅၀ ပရိုဂျက်မှာ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်လိုသူများအတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဦးတည်ချက်နှင့် ပုံစံတစ်ရပ် ရရှိသွားသကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည်။ •	လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမှာ အရေးပါသည်။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့လိုက်ဦးဆောင်မှု အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖကများစိတ် တွင် မိမိတို့အလုပ်ဟု သတ်မှတ်ပါဝင်လိုစိတ်ရှိလာကာ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်လိုစိတ်လည်း တိုးပွားလာစေနိုင်သည်။ အဆိုပါ ပရောဂျက် ကိုအထက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူက တာဝန်ပေးလာသည့်အရာဟု အစပိုင်းတွင်ထင်မြင်ခဲ့ကြသောကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတွင် စိတ်အား ထက်သန်မှုသိပ်မရှိခဲ့ပေ။ သို့ရာတွင် အဖွဲ့များအားမိမိတို့ရင်ဆိုင်နေရ သောအခက်အခဲများနှင့် မိမိ၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်သော သင့်လျော်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုတင်ပြပေးရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည့်အခါတွင်မူ စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့် စိတ်ဝင်တစားပါဝင်မှုမှာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
အေမီဒီယာ၏ နက်နက်နဲနဲ ဆန်းစစ်လေ့လာမှု
အေမီဒီယာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဂျိုးစတိန်းလာဆင်အိုစရိန်း၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။
အေမီဒီယာကုမ္ပဏီသည် နော်ဝေနိုင်ငံတွင်း သတင်းစာစောင်အမည် ၇၀ ကျော် ကိုထုတ်ဝေလျက်ရှိသည့် အကြီးဆုံးမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်ကာ ၎င်းထုတ်ဝေသည့် စာစောင်များကိုနေ့စဉ်ဖတ်ရှုသူ ၁.၈ သန်းခန့်ရှိသည်။
အမျိုးသမီးပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို အေမီဒီယာက မည်သည့်အတွက် ဆန်းစစ်ခဲ့သနည်း။
အေမီယာသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် မိမိတို့၏ပရိသတ်အကြောင်းနှင့် ပရိသတ်များ အလေးထားဖတ်ရှုသည့် အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုနားလည်လာစေရန် မိမိတို့ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းခန်းမများမှလာသော အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရန် စတင်အားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် ရွေးချယ်ထား သည့်သတင်းခန်းမများတွင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်မှုများကို နှစ်လခန့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် စာဖတ်ပရိသတ်များ ရသစုံပိုမိုရရှိစေရန် တင်ဆက်သည့် ကဏ္ဍအသီးသီးကို လေ့လာသည့်အပြင် အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်သော သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် အခပေးဖတ်ရှုရသော သတင်းဆောင်းပါးများကို မည်သို့ချိန်ညှိပေးရမည်ကို ပိုမိုနားလည်လာစေရန်လည်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆန်းစစ်လေ့လာမှုကို ကျား/မ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ အပါအဝင် အခြားအကြောင်းအရာ နယ်ပယ်များတွင်လည်း တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပရိုဂျက်များမှ အေမီဒီယာသိရှိလာခဲ့သည်များတွင် အရေးအပါဆုံးအချက် တစ်ခုမှာ စာဖတ်ပရိသတ်နှင့် လပေးနှစ်ပေးမှာယူဖတ်ရှုသူများအတွက် သတင်းစာပါ အကြောင်းအရာများကို ဖန်တီးထည့်သွင်းရာတွင် ပရိသတ်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုမှာ အရေးပါသည်ဆိုသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူများက မည်သည့် သတင်းဆောင်းပါးကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာဒေသစသည့် အခြေအနေများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အေမီဒီယာ သတင်းခန်းမများသည် ထိုအလွှာစုံသောပရိသတ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော အကြောင်းအရာကဏ္ဍစုံလင်အောင် ဖန်တီး တင်ဆက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကျား/မကွဲပြားမှုကိစ္စတွင်မူ အမျိုးသမီးများကို သတင်းအရင်းအမြစ်ပြု ရေးသား ထားသည့်သတင်းဆောင်းပါးများ များများစားစားပါဝင်သည့် စာစောင်များကို အမျိုးသမီးများက ပိုမိုဖတ်ရှုသည်ဆိုသည့် အချက်ကို ၂၁ လကြာ ကာလအတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည့် သတင်းစာ ၁၉ စောင်မှ သတင်းဆောင်ပါးများကို စိစစ်လေ့လာ ပြီးနောက် အေမီဒီယာထုတ်ဝေသူများကသိလာခဲ့သည်။ အဆိုပါ ၂၁ လကြာ ကာ လအတွင်း ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာရာတွင် သတင်းစာ ၆၄ စောင်မှ သတင်းဆောင်းပါး ပုဒ်ရေ ၆၆၀,၀၀၀ ကိုစိစစ်ခဲ့ရာမှ ဤသို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့် ဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သတင်းဆောင်းပါးပုဒ်ရေ ၆၆၀,၀၀၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အမည်များတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်သာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ သည်။
အဓိကပန်းတိုင်မှာ အေမီဒီယာမှထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာများကိုဖတ်ရှုသော ပရိသတ်အလွှာအမျိုးမျိုး အကြိုက်ကိုလိုက်၍ သတင်းဆောင်းပါးများတင်ဆက် နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ တင်ပြရာတွင် ကျား/မ အချိုးအစားညီမျှမှု ပိုရှိလာခြင်းမှာလည်း လပေး နှစ်ပေး မှာယူဖတ်ရှုသည့် ပရိသတ်ပိုမိုများပြားစေနိုင်သည့်အပြင် ဝင်ငွေ လည်းတိုးလာစေနိုင်သည်။
၁။ အဖွဲ့အစည်းပြင်ပ။ ။ အမျိုးသမီးစာဖတ်ပရိသတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး ဝက်ဘ် ဆိုက်ပေါ်တွင်အချိန်တိုအတွင်း ကြည့်ရှုသူများလာစေကာ ရေရှည်တွင် အေမီဒီယာထုတ်သတင်းစာများကို အမျိုးသမီးပရိသတ်က လပေး နှစ်ပေး မှာယူဖတ်ရှုမှုမြင့်မားလာစေရန်။ ၂။ အဖွဲ့အစည်းတွင်း။ ။ •	သတင်းခန်းမများကမည်သည့် သတင်းဆောင်းပါးမျိုးက အမျိုးသမီးများ နှင့် ပိုမိုသင့်လျော်သည်နှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို အသုံး ပြုရေးအားပေးကာ လပေး၊ နှစ်ပေး မှာယူဖတ်ရှုသည့် အမျိုးသမီး ပရိသတ်များ စိတ်ဝင်စားမှုအရှိန်အဟုန်မြင့်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရန်။ •	အေမီဒီယာ၏ သတင်းခန်းမများတွင် အလေ့အထပြောင်းလဲလာပြီး၊ မျှော်လင့်ထားသည့်အပြောင်းအလဲရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကာအမှန် တကယ် သက်ရောက်မှုရှိလာစေရန်။
အေမီဒီယာသည် ၎င်းသတင်းစာများတွင်ဖော်ပြသည့် သတင်းဆောင်းပါးများတွင်ပါဝင်သော အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများကို ခွဲခြားရေတွက်သည့်လုပ်ငန်းကို ဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဘာသာစကားအားဖြင့် သဘာဝအတိုင်းခွဲ ခြားသည့် နည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စီးပွားရေး အဖွဲ့ အစည်းများကဲ့သို့သောကဏ္ဍများတွင် သတင်းရင်းမြစ်အဖြစ် ကိုးကားရေးသား ထားသည်များကိုကနဦးခွဲခြားပြီး ဥပမာအားဖြင့် နီနာ(Nina) အမည်ရှိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနှင့် နီနာအမည်ရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအဆင့် တွင်မူသိရှိထားသည့် အမည်များကို နော်ဝေနိုင်ငံလူဦးရေဆိုင်ရာ အချက်အလက် စာရင်းဇယားပါ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အမည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေး ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့အချက်အလက်များကို ၎င်းတို့၏ ပင်မအချက်အလက်စု ဆောင်းမှုဇယားတွင် ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးနောက် အေမီဒီယာသည် ၎င်းထုတ်ဝေသော သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြသည့် သတင်းဆောင်းပါးများပါ အချက်အလက်များ၏ အရပ်ရပ်သော အနေအထားများကို ခွဲခြားစိစစ်နိုင်ခဲ့သည်။
သတင်းဆောင်းပါး ပုဒ်ရေ ၆၆၀,၀၀၀ တွင် ဖော်ပြထားသည့် အမည်များတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းသည်သာ အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြောင်း အေမီဒီယာ ကပြုလုပ်သော ဆန်းစစ်လေ့လာမှုတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုလေ့လာမှုတွင် တောက် လျှောက်ထည့်သွင်းဖော်ပြလာသည့် သတင်းဓာတ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကို အသေးစိတ်လေ့လာရာတွင် ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစား မှာ သိသိသာသာ ကွဲပြားမှုရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ လေ့လာမှုတစ်ရပ်တွင် သတင်းစာ ၆၄ စောင်ပါ အကြောင်းအရာများတွင် ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစားမှာ ကွာဟမှုရှိကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ထိုသတင်းစာများထဲမှ အရင်ဦးဆုံးလေ့ လာခဲ့သော စာစောင်သတင်းဆောင်းပါးများတွင် အမျိုးသမီးနာမည်ပါဝင်မှု ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ အခြားသတင်းစာများတွင်မူ အမျိုးသမီးနာမည်ပါဝင်မှု ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် သတင်းစာတိုက်ငယ်များမှ ထုတ်ဝေသည့်စာစောင်များတွင် သတင်းစာတိုက်ကြီးများ၊ ဒေသအလိုက်ထုတ်ဝေသည့် စာစောင်များထက် ကျား/မ အချိုးအစား ပိုမိုညီမျှသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထိုစာစောင်များသည် ဒေသတွင်းဆိုင်ရာများကို ပိုမိုဖော်ပြပြီး ရံဖန်ရံခါ တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြသည်ဖြစ်ရာ ဂျာနယ်လစ်များသွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းသည့် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အများစုမှာအမျိုးသားများဖြစ်နေတတ်သဖြင့် အေမီဒီယာမှဂျာနယ်လစ်များက အင်တာဗျူးပြုလုပ်ရန် လူရွေးချယ်မှုမှာလည်း အဓိကအရေးပါသည့် အကြောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းအရာမတူ သည့်သတင်းဆောင်းပါးများတွင် ဆန်းစစ်လေလာရာ၌ ကျား/မ အချိုးအစား ကွဲပြားမှုကိုအေမီဒီယာက ပို၍အထင်အရှားတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပညာရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ သတင်းဆောင်းပါး ၃၀,၀၀၀ ခန့်တွင် အမျိုးသမီးအမည် ပါရှိမှုမှာ ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး “ဘေးအန္တရာယ်၊ အရေးပေါ်အခြေအနေများနှင့် မတော်တဆဖြစ်ရပ်များ” တွင်မူအမျိုးသမီးအမည်ပါရှိမှုမှာ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသည်။ လူမှုအသိုက်အဝန်းများ၊ မိသားစုများနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာများကို ရေးသားသည့် လူမှုရေးကဏ္ဍသတင်းဆောင်းပါးများတွင်သာ အမျိုးသမီးအမည် များမှာအများဆုံးပါဝင်ကြသည်။ ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစားမတူညီခြင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများက လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများကို မိမိအလိုကျနေရာချခန့်ထားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ထိုသို့ အချိုးအစားမတူညီခြင်းမှာ မိမိအင်တာဗျူးလိုသူများကိုသာ ရွေးချယ်တွေ့ဆုံလေ့ ရှိသောဂျာနယ်လစ်များ၏ ကျား/မ ဆိုင်ရာ ဘက်လိုက်ရွေးချယ်မှုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ကျား/မ အချိုးအစားပိုမိုညီမျှခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်ကို ပိုမိုပီပြင်အသက်ဝင်စေသည်ဟု ၎င်းတို့ယုံကြည်ထားသည်ကို သက်သေထူနိုင် သည့်အထောက်အထားကိုလည်း အေမီဒီယာ၏ ထုတ်ဝေသူများက တွေ့ရှိခဲ့ သည်။ အမျိုးသမီးများကို သတင်းအရင်းအမြစ်ပြုရေးသားထားသည့် သတင်း ဆောင်းပါးများ များများစားစားပါဝင်သည့် စာစောင်များကို အမျိုးသမီးများက ပိုမိုဖတ်ရှုသည်ဆိုသည့် အချက်ကိုလည်း ၂၁ လကြာကာလအတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့ သည့်သတင်းစာ ၁၉ စောင်မှ သတင်းဆောင်ပါးများကို စိစစ်လေ့လာပြီးနောက် အဆိုပါထုတ်ဝေသူများကသိလာခဲ့သည်။
အဆိုပါ သတင်းဆောင်းပါးများကို အမျိုးသမီးပရိသတ်က မည်သို့တုံ့ပြန်ကြသနည်း။
အေမီဒီယာသည်ကောက်ခံရရှိသည့် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုကာ အမျိုးသမီးများနှင့် ပိုမိုသင့်လျော်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများနှင့် အကြောင်းအရာအမျိုးအစားတို့ကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးများနှင့် ပိုမိုသင့်လျော်သည့် သတင်းဆောင်းပါးများ၊ လိုအပ် သည်များကိုနားလည်လာပြီး လပေး၊ နှစ်ပေး မှာယူဖတ်ရှုသည့်အမျိုးသမီး ပရိသတ်ပိုမိုများပြားလာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်အထောက်အကူရရှိခဲ့သည်။
အေမီဒီယာကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုများက မည်သည့်အရာများနည်း။
ရရှိလာသော အချက်အလက်များကြောင့် အပြုအမူပြောင်းလဲလာစေရန်နှင့် ထိုအချက်အလက်များကို အယ်ဒီတာနှင့် ဂျာနယ်လစ်များက အသုံးပြုလာစေရန် ဆောင်ရွက်ရခြင်းမှာ အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်အပေါ် ဝန်ထမ်းများ၏တုံ့ပြန်မှုမှာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကွဲပြားသွား သည်။ အချို့သူများက ထိုသို့သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကို လက်ခံပြီး အခြားသူများကမူလက်ခံခြင်းမရှိပေ။ သတင်းခန်းမဝန်ထမ်း အများစုက အချက် အလက်များ၏ တန်ဖိုးကိုနားလည်ကာစာဖတ်ပရိသတ်အတွင်း သတင်းဆောင်း ပါးများပိုမိုရေပန်းစားအောင် စဉ်းစားရာတွင် အဆိုပါအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည်။ အခြားသူများကမူ ဤပရိုဂျက်ကို အလေးထားခြင်းမရှိဘဲ ၎င်းတို့ တင်ပြနေကျကဏ္ဍဆိုင်ရာ သတင်းဆောင်းပါးများကို တိုတောင်းသည့်သတ်မှတ် ကာလအတွင်းပြီးစီးရေးကိုသာ အာရုံစိုက်ကြသည်။ ကျား/မ ညီညီမျှမျှပါဝင်ရေး ဆိုင်ရာ ပရောဂျက်အောင်မြင်မှုရှိစေရန် အဓိကသော့ချက်မှာ အဖွဲ့အစည်း အတွင်း အလေ့အထပြောင်းလဲအောင် ဆောင်ရွက်ကာထိုပရိုဂျက်မှာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည့်အရာဖြစ်ကြောင်း အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိသူအားလုံး သဘော ပေါက်လက်ခံလာအောင် ဆောင်ရွက်ရေးပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရန် အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သော်လည်း တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ် ကာလအတွင်းတွင် သတင်းဆောင်းပါးများ၌ အမျိုးသမီးသတင်းရင်းမြစ်များ ပါဝင်မှုသိသိသာသာ များပြားလာမည်ဖြစ်သည့်အပြင် အမျိုးသမီးပရိသတ်ကလည်း ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကြမည်ဟု အေမီဒီယာကမျှော်လင့်ထားသည်။
အေမီဒီယာက မည်သည့်အရာများကို သိရှိလာခဲ့သနည်း။
•	အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အလုပ်လုပ်နေသည့် ဝန်ထမ်းများက ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုလာသည့်အနေအထား ရောက်ရှိစေရန်အချိန်ယူရသည်။ •	လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို လက်တွေ့အသုံးချရန် တာဝန်ရှိသည့် သတင်းအယ်ဒီတာများအား လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို မပြတ်ပေးပို့ ရသည်။ •	ကျား/မ ညီမျှစွာပါဝင်မှုမှာ သတင်းစာအလိုက်၊ ကဏ္ဍအလိုက်ကွဲပြား မှုရှိသည်။ ဒေသအလိုက်ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာငယ်များတွင် သတင်း စာကြီးများထက်ဖော်ပြရာ၌ ကျား/မ ပါဝင်မှုပိုမိုမျှတသည်။ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လူမှုဘဝဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးအသံများ ပိုမိုပါဝင်ပြီး၊ အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် အားကစားဆိုင်ရာဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးအသံများ ပါဝင်လေ့သိပ်မရှိပေ။ •	ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစားမတူညီခြင်းမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူများက လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများကို မိမိအလိုကျနေရာ ချခန့်ထားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် ထိုသို့ အချိုးအစား မတူညီခြင်းမှာ မိမိအင်တာဗျူးလိုသူများကိုသာ ရွေးချယ်တွေ့ဆုံလေ့ရှိ သောဂျာနယ်လစ်များ၏ ကျား/မ ဆိုင်ရာဘက်လိုက်ရွေးချယ်မှုကြောင့် လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင် ထိုကိစ္စအတွက်တိကျသောအဖြေမရှိပေ။ •	သတင်းခန်းမအားလုံးမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီကြသကဲ့သို့ဦးစားပေးတင်ပြလိုသည့် အကြောင်းအရာများမှာလည်းကွဲပြားကြသည်။ ပရော ဂျက်၏သက်ရောက်မှုကိုလည်း သတင်းခန်းအတော်များများက ၎င်းတို့ ဖန်တီးတင်ပြသည့် သတင်းဆောင်းပါးများတွင် ဤအချက်အလက်များ ကိုအသုံးပြုကာ ကျား/မ ပါဝင်မှုအချိုးအစားကိုပြောင်းလဲရန် အချိန်ယူလာနိုင်မည့်နောင်နှစ်တွင်မှ ပီပီပြင်ပြင်စတင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ •	ကျား/မ ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ကျား/မ ညီညီမျှမျှပါဝင်ရေး ပိုမိုဦးတည်ဆောင်ရွက်သည့် အချက်အလက်ဆန်းစစ်မှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းခန်းမရှိဂျာနယ်လစ်များမှာ အချိန်များစွာယူ၍ ဆွေးနွေးနေကြသည်။ •	ကျား/မ တန်းတူညီမျှရေးဆိုင်ရာဘုံပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းအတွက်ကောင်းမွန်ရုံသာမက စာဖတ်သူပိုမိုရရှိကာ လပေး၊ နှစ်ပေး မှာယူဖတ်ရှုသူ အရေအတွက်လည်းပိုမိုများပြားလာစေနိုင်သည်။
၁။ မေရီဆီဘန်ဒါသည် ဒေသတွင်းဥပဒေဆိုင်ရာ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၏ ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ မေရီသည်ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီးဘုတ် အဖွဲ့ဥက္ကဌဖြစ်သည်။ ရှေ့နေလုပ်သက် နှစ်နှစ်ဆယ်ရှိသည့် မေရီသည်ဥပဒေပိုင်းတွင် ၅ နှစ်ခန့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုပြီးသည့်အခါ သူမ၏ အလုပ်တွင် ပူးတွဲရှယ်ယာရှင်ဖြစ်လာပြီး ဥပဒေအသိုင်းအဝိုင်းတွင်အများက လေးစားခြင်းကို ခံရသည်။ မေရီသည်နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသည့်ဂီတပညာရှင် တဝန်ဒါ ဆီဘန်ဒါနှင့်လက်ထပ်ထားပြီး သား ၂ ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ အောက်ပါတို့ အနက်မှ ကျား၊မ ပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်ခြင်း လွတ်ကင်းသည့်ခေါင်းစဉ်ကိုရွေး ပါ။
ဥပဒေဆိုင်ရာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ သားနှစ်ယောက်မိခင် မေရီဆီဘန်ဒါကို ဥပဒေဆိုင်ရာ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၏ ပထမဦးဆုံးသော အမျိုးသမီးဥက္ကဌ အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရ တဝန်ဒါဆီဘန်ဒါ၏ဇနီး ဥပဒေဆိုင်ရာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရ အမျိုးသမီးရှေ့နေမှ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌဖြစ်လာ အမျိုးသမီးရှေ့နေမှ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဥက္ကဌဖြစ်လာ
ကျား၊ မ မျှတမှု ဖော်ဆောင်ခြင်းတွင် ထိပ်တန်းရောက်နေသူများ
ရေးသားဖော်ပြသည့် အကြောင်းအရာများတွင် ကျား၊မ မျှတရေးကို ဖော်ဆောင်နေသည့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိမီဒီယာများ၏ အောင်မြင်လျက်ရှိသောလုပ်ဆောင်ချက်ဥပမာများ သင်စိတ်ဝင်စားလောက်မည့် အခြားအချက်အလက်များအတွက်လင့်ခ်များ
Women in News (WIN) သည် သတင်းမီဒီယာလောကတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ပြောဆိုရေးသားနိုင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည် မီဒီယာလောကတွင် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုမြင့်မားသောခေါင်းဆောင်မှုနေရာများရရှိစေရန်နှင့် ရေးသား၊ တည်းဖြတ်မှုအပိုင်းများတွင် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရရှိလာနိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ် သောကျွမ်းကျင်မှုများ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွန်ယက်များကို အမျိုးသမီးသတင်းထောက်များ နှင့် အယ်ဒီတာများအားဖြန့်ဝေပေးပို့ပါသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပင် WIN သည် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ သတင်းခန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့တွင်လည်းကောင်း၊ ၎င်းတို့ရေးသားသော သတင်းများကို ထည့်သွင်းဖော်ပြမှုတွင်လည်းကောင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ကွာဟမှုမရှိစေရန် မီဒီယာလောကတစ်ခုလုံးအတွက် ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပေးပါသည်။
WIN သည် လက်ရှိတွင် အာဖရိကဆာဟာရ အောက်ပိုင်းဒေသ၊ အာရပ်ဒေသနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ (SEA) ဒေသတို့မှ နိုင်ငံပေါင်း ၁၅ ခုရှိ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်း ၈၀ ကျော်နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ WIN Africa တွင် Botswana ၊ Kenya ၊ Malawi ၊ Rwanda ၊ Somalia ၊ Tanzania ၊ Uganda ၊ Zambia နှင့် Zimbabwe နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။ WIN Arab Region တွင် Egypt ၊ Jordan ၊ Lebanon နှင့် Palestine နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည်။ WIN Southeast Asia တွင် Myanmar နှင့် Vietnam နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။
WIN သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အေဂျင်စီ Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) နှင့် နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတို့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
WIN သည် ဆွီဒင်နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အေဂျင်စီ Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) နှင့် နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs တို့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
WAN-IFRA သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိသတင်းစာများနှင့် သတင်းထုတ်ဝေသူများ အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကျော်မှ သတင်းစာ ၁၈,၀၀၀ ကျော်၊ အွန်လိုင်း ဝဘ်ဆိုက် ၁၅,၀၀၀ ကျော် မီဒီယာကုမ္ပဏီ ၃,၀၀၀ ကျော်တို့ကို ကိုယ်စားပြု သည်။ WAN-IFRA သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်း မီဒီယာအသင်းအဖြစ် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန်လည်းကောင်း၊ ယင်းလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် သတင်းမီဒီယာများ စီးပွားရေးအရ အမှီအခိုကင်းရှင်းရေးကို မြှင့်တင်ပေးရန်လည်းကောင်း လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်သူ၏ အနေအထားကြောင့်ထူးခြားပါသည်။
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ထောက်ပံ့ပေးရာတွင် WAN-IFRA သည် ချဉ်းကပ်မှု နှစ်မျိုးကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ကန့်သတ်ချက်များကို အကြံပေးသောနည်းလမ်းဖြင့်ကူညီသည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်းမီဒီယာများ၏ လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်ကွန်ယက်ကိုအားကောင်းစေကာ သက်ဆိုင်ရာ မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းကိုပါ အားကောင်းလာအောင်ကူညီသည်။
ထိုသို့ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ဖြင့် ချဉ်းကပ်ခြင်းကြောင့် WAN-IFRA သည် မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို စိန်ခေါ်နေသော အကြောင်းရင်းများကို ရှုထောင့်မျိုးစုံဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်လာသည်။ အကြံပြုချက်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်ချက်များအကြား အတွေ့အကြုံများအပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှုများမြှင့်တင်လာနိုင်ကာ WAN-IFRA နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ကျယ်ပြန့်သော ကျွမ်းကျင်မှု၊ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်မှုများ ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအပြောင်းအလဲကိုဖန်တီးလာနိုင်သည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့ရေးသားထုတ်ဝေသည့် အကြောင်းအရာများတွင် ကျား၊မ မျှတမှုမြှင့်တင်ရေးအတွက်လိုအပ်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အတွင်းကျကျလေ့လာချက်များကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်က အောက်ပါအချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထောက်အပံံ့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
•	အကြောင်းအရာများတွင် ကျား၊မ မျှတမှု၏အရေးပါမှုကို နားလည်သဘော ပေါက်ရန် •	မီဒီယာတွင်မတူညီသည့် ကျား၊မ ရေးရာပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်မှု နည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရန် •	ကျား၊မ ရေးရာပုံသေကားချပ်သတ်မှတ်မှုများ ရှောင်ရှားနည်းကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် •	ရေးသားဖော်ပြသည့် အကြောင်းအရာများတွင် ကျား၊မ မျှတမှုပိုမိုပါဝင်လာစေရန် •	အဖွဲ့အစည်းတွင်း မဟာဗျူဟာများချမှတ်ရန်နှင့် တိုးတက်မှုများကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရန်လိုအပ်သည့် မက်ထရစ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန် •	အခြားသတင်းဌာနများ၏ အောင်မြင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာရန်
ဤလမ်းညွှန်သည် မီဒီယာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏အသံကို မြှင့်တင်ပေးရန်နှင့် ခေါင်းဆောင်သည့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်လာနိုင်စေရန် စသည့် Women in News အဖွဲ့အစည်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကိုထင်ဟပ်ပြသစေသည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင် ကျား/မတန်းတူညီမျှမှုဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများကြား မျှတမှုရရှိခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
Women in News သည် လိင်ဟုဆိုခြင်းမှာ ကျား/မ နှစ်မျိုး တည်းမဟုတ်ကြောင်းသိရှိပြီးဖြစ်သည်။ လိင်သည် နှစ်မျိုးမက ရှိနိုင်ကြောင်းနားလည်ပြီးဖြစ်သည်။ ဤလမ်းညွှန်သည် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးများကြား ညီမျှမှုအဓိကထား ရေးသားထားသော်လည်း ဤလမ်းညွှန်တွင်ပါဝင်သောအချက်များကို မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းအတွင်းသိရှိထားသော လိင်ပြောင်းထားသူများနှင့် LGBTQIA+ လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်များအတွက်ပါ ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
မီဒီယာလုပ်ငန်းအတွင်း ကျား/မ မဟုတ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဝင်များအတွက် သီးခြားလမ်းညွှန်များလည်းလိုအပ်ကြောင်း WIN ကသိရှိပါသည်။ ၎င်းအတွက် လမ်းညွှန်ကိုမကြာတော့သော အနာဂတ်တွင်ရေးသားသွားရန်ရှိပါသည်။
အခန်း(၁) အခန်း(၂) အခန်း(၃) အခန်း(၄) အခန်း(၅) အခန်း(၆)
လူတစ်ဦး၏ နေထိုင်မှုပုံစံဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်၊ အပြုအမူများနှင့် လူမှုရေး ပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်က အစဉ်အလာ လက်ခံသတ်မှတ်ထားသည့် စရိုက်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် များသည် ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုအား အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီးဟူ၍ နှစ်မျိုးသတ်မှတ်ထားသည်။ သို့ရာတွင်ကျွန်ပ်တို့ သတ်မှတ်သည့် ကျား/မ ဖြစ် တည်မှုမှာမူ လူတစ်ဦးမှာ ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမအဖြစ် မွေးဖွားလာသည်နှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။
*ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုကို ကျား သို့မဟုတ် မ နှစ်မျိုးတည်း သတ်မှတ်ချက်ထက် အမျိုးစုံခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ပ်တို့နားလည်ထားသောကြောင့် ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်မှာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် World Health Organization ၏အချက်အလက်များအပေါ်မှီငြမ်းသည်။ https://www.who. int/health-topics/gender
ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ အစဉ်အလာ လက်ခံထားမှု
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာကို အခြေခံကာရှိ သင့်သည်ဟု အစဉ်အလာသိနားလည်လက်ခံထားသည့် ဝိသေသများ၊ စရိုက် လက္ခဏာများနှင့် အခန်းကဏ္ဍများ။
ကျား/မ အခြေပြု ဘက်လိုက်မှု
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာကို အခြေခံကာရှိ သင့်သည်ဟု အစဉ်အလာသိနားလည်လက်ခံထားသည့် ဝိသေသများ၊ စရိုက် လက္ခဏာများနှင့် အခန်းကဏ္ဍများကြောင့် (သိစိတ်ထဲကရော မသိစိတ်ထဲကပါ) ဘက်လိုက်ဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ရပ်နှင့် အတွေးအမြင်များ။
ကျား/မ အခြေပြု ခွဲခြားဆက်ဆံမှု
လူတို့၏ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုသက်သက်အပေါ်တွင် အခြေခံကာထိုသူများကို ခွဲခြားဆက်ဆံသည့် သဘောထားခံယူမှုနှင့် လုပ်ရပ်များကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ သိနားလည်မှု
ကျား/မ အခန်းကဏ္ဍများ၊ လူမှုရေးပေါင်းသင်းဆက်နွယ်မှုများကို လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကမည်သို့ သတ်မှတ်သည်ဆိုသောအချက်ကို ရှုမြင်နိုင်စွမ်းနှင့် ထိုအရာများ ၏သက်ရောက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်စွမ်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆက်စပ်သောအခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းများ။ ။ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာအကဲဆတ်မှု။
ကျား/မ ညီညီမျှမျှပါဝင်မှု (ဘာသာစကား)
လူများကိုယေဘုယျအားဖြင့်သာ သဘောထားပြီး၊ ကျား/မ ဟူ၍ ရည်ညွှန်းမှုမရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် ကျား ဖြစ်သည်၊ မ ဖြစ်သည်ဟူ၍ပင် အနည်းဆုံးအလားသဏ္ဌာန်တူ ရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသည့် ကျား/မ အတိအကျဖော်ပြခြင်းမပြုသော ဘာသာစကားရေးသားသုံးစွဲပုံ။
ဆက်စပ်သော အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်းများ။ ။ ကျား/မ မျှတသော ဘာသာစကားသုံးစွဲပုံ၊ ကျား/မ ထည့်သွင်းရည်ညွှန်းခြင်းမရှိသည့် ဘာသာစကားသုံးစွဲပုံ။
ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လိင်အမျိုးအစားမှာ ကျား နှင့် မ ဟု နှစ်မျိုးသတ်မှတ်ထားပြီး၊ လူတစ်ဦးသည် ယောက်ျားအဖြစ်မွေးဖွားလာပါက ၎င်းအား အမျိုးသား၊ မိန်းမအဖြစ်မွေးဖွားလာပါက ၎င်းအားအမျိုးသမီးဟူ၍ သတ်မှတ်ထားချက်ကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် အံမဝင်သောသူများသည် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသည့်အပြင် အစော်ကားခံရကာ ဝိုင်းပယ်လည်းခံရသည်။
ကျား/မ ခံယူမှုဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ် ခံစားမိသော ကျား/မ လိင်စိတ်ခံယူမှုပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ခံယူမှုမှာ ၎င်းတို့က မိမိကိုယ်မိမိ အမျိုးသမီးဟုလည်းကောင်း၊ အမျိုးသားဟုလည်းကောင်း၊ မိမိမှာ အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ ဟုတ်သည် ဟုလည်းကောင်း၊ မိမိမှာအမျိုးသမီးလည်းမဟုတ်၊ အမျိုးသားလည်းမဟုတ်ဟုလည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ် လိင်စိတ်ခံယူမှု အသွင် အမျိုးမျိုးထဲမှ တစ်ခုခုဟုလည်းကောင်း မှတ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ လူတစ်ဦး၏ ကျား/မ အဖြစ်ခံယူမှုမှာ ၎င်းမွေးဖွားစဉ်က ယောက်ျားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ မိန်းမအဖြစ်လည်းကောင်း မွေးဖွားလာသည့်လိင်အမျိုးအစားနှင့် တူညီနိုင်သကဲ့သို့ကွဲပြားမှုလည်းရှိနိုင်သည်။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ဖော်ပြပါ website ၏အချက်အလက်များအပေါ်မှီငြမ်းသည်။ https://www.genderspectrum.org/quick-links/ understanding-gender/
ကျား/မ ဟု ခံယူထားခြင်းမရှိသူ
လိင်စိတ်ခံယူမှု ပြောင်းလဲထားသူများအပါအဝင် လူအများစုမှာ ယောက်ျား သို့မဟုတ် မိန်းမအဖြစ် မွေးဖွားလာသူများဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်အချို့သူများမှာ အမျိုးသား သို့မဟုတ် အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် ကျား သို့မဟုတ် မ အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် အံမဝင်ပဲရှိတတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင် အချို့ သူများ၏ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုတွင် အမျိုးသားအသွင်ရော အမျိုးသမီးအသွင်ပါရှိတတ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါကလည်း ၎င်းတို့သည် ကျား သို့မဟုတ် မ ဆိုသော ဖြစ်တည်မှုနှင့် ကွဲပြားသော လိင်စိတ်ခံယူမှုအသွင်ရှိနေတတ်သည်။ အချို့သူများကမူ မိမိကိုယ်မိမိ ကျား ဟုလည်း မသတ်မှတ်သည့်အပြင် မ ဟုလည်း မသတ်မှတ်ကြပေ။ အချို့သူများ၏ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုခံယူချက်မှာ အချိန် ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲသွားတတ်သည်။
ဆက်စပ်သောအခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းများ။ ။လိင်စိတ်ခံယူမှု ပြောင်းထားသူ။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ဖော်ပြပါ website ၏အချက်အလက်များအပေါ်မှီငြမ်းသည်။ www.transequality.org
(transgender) ဆိုသည့်စကားရပ်မှာ အစဉ်အလာလက်ခံထားသော ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်မတူဘဲ ကျား/မ လိင်စိတ်ခံယူမှု အမျိုးမျိုးနှင့် ပြုမူပြောဆိုမှုများကို လွှမ်းခြုံခေါ်ဝေါ်သောစကားရပ်ဖြစ်သည်။ ထိုစကားရပ်တွင် လိင်စိတ်ခံယူမှုပြောင်းထားသူ၊ လိင်ပြောင်းအမျိုးသမီး( ကျား မှ မ ဘဝ သို့)၊ လိင်ပြောင်းအမျိုးသား (မ မှ ကျား ဘဝ သို့)၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူကာ လိင်ပြောင်းထားသူ၊ မိန်းမလျာ သို့မဟုတ် ယောက်ျားလျာ၊ ကျား/မ ဟူ၍ ခံယူထားခြင်းမရှိသူ၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု မပြတ်သားသေးသူများအားလုံးပါဝင်သည်။
ဆက်စပ်သောအခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းများ။ ။ လိင်စိတ်ခံယူမှုပြောင်းထားသူ၊ ကျား/မဟု ခံယူထားခြင်းမရှိသူ။
အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို GLAAD ၏အချက်အလက်များအပေါ်မှီငြမ်းသည်။ https://www.glaad.org/about
မွေးရာပါအတိုင်းလိင်စိတ်ခံယူသူ (Cisgender) ဆိုသည်မှာ မွေးရာပါ ကျား/မ ဖြစ်တည်မှုအတိုင်း လိင်စိတ်ခံယူသူကို ရည်ညွှန်းသည့်စကားရပ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် မိန်းမအဖြစ်မွေးဖွားလာသူက မိမိကိုယ်မိမိ အမျိုးသမီးဟုပင် ခံယူမှုကိုဆိုလိုသည်။ ဤစကားရပ်ကို လိင်စိတ်ခံယူမှုပြောင်းထားသူ (transgender) ဆိုသည့်စကားရပ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်စကားရပ်အဖြစ်အသုံးပြု သည်။
သင်စိတ်ဝင်စားလောက်မည့် အကြောင်းအရာများအတွက် လင့်ခ် အချို့ကို ထပ်မံ ဖော်ပြထားပါသည်။